(No. 33, June 9, 2020)
၁။ မူဆယ်မြို့အနီး တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့ တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်
၂။ မိုင်းတင်းအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ သေနတ်ပစ်သတ်ခံရ
၃။ တပ်မတော်ရေယာဉ်ပေါ် နှိပ်စက်ခံခဲ့ရသူ ၅ ဦး၏ အမှုတွင် တရားခံပြေး ၇ ဦး ပါဝင်နေ
၄။ တပ်မှ မြေသိမ်းပြီး တရားပြန်စွဲထားသည့်အမှုကို ဆီဆိုင်တောင်သူများ ရင်ဆိုင်မည်
၅။ မူးယစ်ဆေးအမှုများတွင် ဒဏ်ငွေ လာရောက်ညှိနှိုင်းသော်လည်း ဥပဒေအတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်ဟု KNU ပြော
၆။ နမ့်စန်တွင် တပ်မတော်က စစ်မှုထမ်း ဟောင်းအိမ်ရာဆောက်ရန် မြေသိမ်းမှု မူလပိုင်ရှင် ၉၃ ဦး ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်
၇။ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဖားကန့်တွင် ဈေးဆိုင်တန်း၊ ဘက်ဖိုးနှစ်စီးနှင့် ကားတစ်စီး ရေစီးကြောင်းနှင့် မျှောပါ ပြီး လူ အသေအပျောက် ရှိနိုင်
၈။ သိန္နီ တံတားစောင့် တပ်သား သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ် ၂ လုံးထိ
၉။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ တောင်းဆို
၁၀။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၃ ဖွဲ့အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
၁၁။ ကျောက်ဖြူဒေသခံ သားအဖနှစ်ဦးကို AA ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ မိသားစုပြောကြား
၁၂။ စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသူ/သားများအတွက်ဆမီးမြို့တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် ၂ လုံး စတင်ဆောက်လုပ်
၁၃။ ထိတွေ့မှုများကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားရန် တပ်တွင်း ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ထားဟု KNLA စစ်ဦးစီးချုပ်ပြော
၁၄။ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ကိုယ်စားလောင်းအဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပါတီရုံးသို့ စာရင်းပေးသွင်း ရမည်
၁၅။ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး ပြန်လွှတ်ပေးပြီးနောက် ၃ ရက်အကြာ ဒေါ်စိန်မြဦးသေဆုံးမှု AA နှင့်မသက်ဆိုင်ဟု ထုတ်ပြန်မှု တာဝန်မဲ့ဟု ချင်း အမျိုးသမီးကွန်ရက် ဝေဖန်
၁၆။ ကွိုင်ငံရေထွက်ပေါက် ချောင်းနံရံတွေ မြေပြိုမှုဖြစ်ပွား
၁၇။ မယုံကြည်မှုနှင့် မသိရှိမှုတို့ကြောင့် မူးယစ်အထူးတိုင်ကြားရေးဌာနသို့ မွန်ပြည်နယ်မှ ပြည်သူများ သတင်းပေး တိုင်ကြားခြင်းမရှိ
၁၈။ ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်က မူရင်းနေရာတွေ ပြန်ပေးဖို့ ဒုက္ခသည်တွေ တောင်းဆို
၁၉။ Social distancing ဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိကျောင်းများ ဇူလိုင်လတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်
၂၀။ NLD စစ်တွေခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌဌ ပါတီမှ နုတ်ထွက်
၂၁။ ကျိုင်းတုံ ကိုဗစ် Positive လူနာအားလုံး ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရ
၂၂။ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရသည့် တောင်ကုတ် ချက်ဖောက်ရွာသား ၅ ဦး မိသားစုနှင့် အဆက်အသွယ်မရသေးဟုဆို
၂၃။ မြဝတီမြို့တွင် WY မူးယစ်ဆေးပြား အလုံးရေ ၄ သောင်းကျော် ဖမ်းဆီးရမိ
၂၄။ မူဆယ်-၁၀၅ မိုင် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ်တွင် ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တစ်ဦးသေဆုံးကာ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ
၂၅။ COVID-19 ကြောင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ကုန်းသာကျေးရွာ စိုက်ခင်းများရှိ ဂေါ်ဖီထုပ်များ ဈေးကွက်ပျက်သဖြင့် တောင်သူများ မနစ် နာစေရန် အလှူရှင်တစ်ဦးက ဝယ်ယူပေး
တပ်မတော်နဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်ဖွဲ့တို့ ဇွန် ၇ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းနဲ့ နေ့လယ်ပိုင်းမှာ ရှမ်းပြည်နယ် မူဆယ်မြို့အရှေ့ဘက်နဲ့ နမ့်ဖက်ကာအရှေ့မြောက်ဘက် မီတာ ၁၄၀ဝ အကွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ မနက်ပိုင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာ ကေအိုင်အေ ဘက်က အင်အား ၁၅ ယောက်ဝန်းကျင်သာရှိပြီး နေ့လယ်ပိုင်း နောက်တကြိမ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲမှာတော့ အင်အား ၆၀ နီး ပါး ရှိတယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
မိုင်းထောင် မိုင်းခွဲတာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ TNLA အဖွဲ့ကို နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ တပ်မတော် လုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့ ကေအိုင်အေတို့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ တပ်မတော်ဘက်က ထိခိုက်တာတွေရှိခဲ့ပြီး ကေအိုင်အေ ဘက်က လက်နက်ခဲယမ်းတချို့လည်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကေအိုင်အေဘက်က ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူက ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကို တပ်မတော် ဘက်ကတိုးဝင်လာတဲ့အတွက် ခုခံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူတို့ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။ ကေအိုင်အေ နဲ့ တပ်မတော် ပြည်နယ်အဆင့် သဘောတူညီမှုတွေ ရယူပြီးခဲ့ပြီးတဲ့ အချိန်ကတည်းက ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီနယ် မြေက သူတို့နယ်မြေ ဟုတ်၊ မဟုတ် ကေအိုင်အေသာ အသိဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိကပ်ဘေးကာလအတွင်းမှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ခွန်သန့်ဇော်ထူးနဲ့အဖွဲ့ဟာ မေ ၂၀ ရက်နေ့က လိုင်ဇာအနီး မိုင်ဆာပါဒေသကို သွားရောက်ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးပစ္စည်းတွေကို သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး ကေအိုင်အို/ ကေအိုင်အေ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော်က လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ http://burm ese.dvb.no/archives/392931
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် မိုင်းတင်းအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးကောရွှေဝင်း သည် ( ဇွန် ၆) မွန်းလွှဲပိုင်းတွင် သေနတ်ပစ် သတ်ခံရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(ဇွန် ၆ ရက်) မွန်းလွှဲပိုင်းတွင် မိုင်းတင်းအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကောရွှေဝင်း အသက် ၅၀ နှစ် သည် မန်စန်းရွာရှိ တောင်ယာတွင် အလုပ်လုပ်နေချိန် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ သေနတ်ဖြင့် လာရောက် ပစ်သတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“သေနတ်ပစ်တဲ့ ဒဏ်ရာကတော့ ၆ ချက်ပါ။ တောင်ယာ အလုပ်လုပ်နေရင် သေနတ်ပစ်ခံရ တာပါ။ ဘယ်အဖွဲ့ ကလာပစ်တယ်ဆိုတာ စုံစမ်းဆဲပါ”ဟု ကျောက်မဲမြို့မ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။ သေနတ်ပစ်ခံရပြီး သေဆုံးသွားသည့် ဦးကောရွှေဝင်းသည် နောက်စေ့ ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ ၂ ချက်၊ ကျော လယ် ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ ၁ ချက်၊ ကျောယာဘက် ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ ၁ ချက်၊ ခါးဆစ်ယာဘက် ဖောက်ဝင်ဒဏ်ရာ ၁ ချက် နှင့် မျက်နှာပွင့်ထွက် ဒဏ်ရာ၊ရင်ညွှန့်ဖောက်ထွက် ဒဏ်ရာတချက်တို့ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း ရဲအရာရှိက ပြောသည်။
အဆိုပါ တောင်ယာတွင် ဦးကောရွှေဝင်း နှင့် ဇနီး ဖြစ်သူ ဒေါ်နန်းခမ်းအေး တို့သည် အတူတူ နေ့လည်စာစားပြီး၊ အလုပ် ပြန် လုပ်ရန် သေဆုံးသူ ဦးကောရွှေဝင်း တောင်ယာသို့ သွားနေစဉ် သေနတ်ပစ်ခံရခြင်းဖြစ်ကြာင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့က လာရောက် ပစ်ခတ်သည်ကို မတွေ့ရကြောင်း ရဲမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။ ဦးကောရွှေဝင်း သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တရားခံကို စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ (ပ) ၅၅/၂၀၂၀ ရာဇာသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်းသိရသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16982
တပ်မတော်ရေယာဉ်ပေါ်၌နှိပ်စက်ခံရပြီး အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုခံနေရသူ ၅ ဦး၏ အမှုတွဲတွင် တရားခံပြေး ၇ ဦးပါဝင်နေသည်။ အဆိုပါအမှုအား ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က ရုံးထုတ်တွင် တရားခံပြေးအမှုအတွက် စစ်ဆေးမည့် မှင်နီသက်သေ မရောက်ရှိခဲ့သဖြင့် ကြားနာစစ်ဆေးခြင်းမရှိခဲ့ပေ။“ဝရမ်းစာမဝင်သေး၊ ဝရမ်းစာဝင်လို့ အတည်ပြုပြီးမှ အခု ဖမ်းဆီးထားတဲ့ တရားခံ ၅ ဦးအမှုကို ဆက်လက် ကြားနာစစ်ဆေးမှာ”ဟု အကြမ်းဖက်မှုနှင့်တရားစွဲဆိုခံရသူ ၅ ဦး အမှု အတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကျော်ညွှန်မောင်က ရှင်းပြသည်။
လက်ရှိဖမ်းဆီးခံထားရသူများမှာ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာမှ ကိုညီညီအောင် (၂၄)နှစ် ၊ ကိုအောင်မျိုးလင်း (၂၄)နှစ်၊ ကိုမောင်ချေ (၂၄)နှစ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ပေါ်မှ ကိုမင်းစိုး (၃၈)နှစ် နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ဇီးပင်ကြီးကျေးရွာမှ ကိုကျော်ဝင်းဟိန်း (၂၂)နှစ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်၊ ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာသား (၃၈)ဦးကို ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့ တွင် တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် (၃၃)ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ကာ လက်ရှိအကြမ်းဖက်မှုနှင့် တရားရင်ဆိုင်နေ ရသူ ၅ ဦးကိုဆက်လက်ချုပ်နှောင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ ၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားစဉ်ကာလအတွင်း တပ်မတော် သားများမှ ရေယာဉ်ပေါ်တွင် ထိုးကြိတ်၊ ကန်ကျောက်နှိပ်စက်မေးမြန်းနေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်သည် လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ ပေါ် ပျံ့နှံ့လာခဲ့သည်။
“အဒေါ်သားလေးက မိသားစုကိုလုပ်ကျွေးနေတာပါ။ အဒေါ်တို့က ဆင်းရဲတယ်၊ အဲဒီသားလေးကို အားကိုးပြီးနေ နေရတာ။ ဘာမှလည်းအပြစ်မရှိဘူး။ မိုးလင်းရင် အလုပ်သွား၊ ညနေဆိုရင် နေဝင်မှပြန်လာရတယ်”ဟု တရားရင်ဆိုင်နေရသူ ကိုညီညီအောင်၏ မိခင် ဒေါ်နီနီအေးက ပြောသည်။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်နှင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသူ ၅ ဦး ကို လာမည့် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ထပ်မံရုံးချိန်းလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-732
သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရ ဒေသ ဆီဆိုင်မြို့နယ် မြေယာသိမ်းဆည်းမှု နှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မှ အမှု ရုပ်သိမ်းပေးခြင်းမရှိသဖြင့် မြေပိုင်ရှင်များမှ တရားရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
ဇွန်လ ၄ ရက်က ဆီဆိုင်မြို့နယ် အစိုးရတပ်မတော်နှင့်တောင်သူများ မြေယာအငြင်းပွားမှု ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီး အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့သော်လည်း ထူးခြားသည့်ရလဒ်တစုံတရာမ ထွက်ပေါ် လာကြောင်း လယ်ယာသိမ်းဆည်းခံရသည့် တောင်သူများကပြောသည်။ ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွင် အရှေ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် မှ တာဝန်ရှိသူ နှင့် ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှ တာဝန်ရှိသူများ သိမ်းဆည်းခံ တောင်သူများတက် ရောက်ခဲ့သည်။“လက်ရှိ အခြေနေတော့ ထူးခြားပြောင်းသွားတာမရှိသေးဘူး။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကအဖြေမပေါ်ရလဒ် တစ်စုံတစ်ရာမရပဲနဲ့ ပြီးဆုံးသွားတာပဲလို့ ပြောလို့ရပါတယ်”ဟု ဆီဆိုင်မြို့ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးစံဝင်းမောင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
နှစ်ဖက် တွေ့ဆုံပွဲမှာ တောင်သူများဘက်မှ မြေယာမြေများ ဆက်လက်စိုက်ပျိုးခွင့်ပြုရန်၊တောင်သူ (၇၀)ကျော် တရားစွဲဆို ထားမှုအပေါ် အမှု ရုပ်သိမ်းပေးရန်၊ တပ်မှ ပိတ်ဆို့ထားသည့် လမ်းများကို ပြန်ဖွင့်ပေးရန် နှင့် တပ်မှ သိမ်းဆည်းထားသည့် ထွန်စက် ၂၉ စီး ကိုလည် ပိုင်ရှင်များလက်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံပေးရန် တောင်းဆိုကြကြောင်း ဦးစံဝင်းမောင်က ပြောပြသည်။ အရှေ့တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ တောင်သူ ၇၀ ကျော်ကို ပုဒ်မ ၄၄၇ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ထိုအမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးခြင်းမရှိသေးသည့် အတွက် ဆက်လက် ရင်ဆိုင်သွားရမည်ဟု ဦးစံဝင်းမောင် က ထပ်လောင်းပြောသည်။ ထို့ပြင် ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း ခြေမြန် တပ်ရင် ခမရ ၄၂၃/ ၄၂၄ တပ်ရင်းများမှ ဒေသခံ တောင်သူများထံ စိုက်ပျိုးမြေ၊ မြေယာ အဓမ္မသိမ်းဆည်းခြင်း၊ လယ်သမားများ စိုက်ပျိုးထားသည့် အပင်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ တောင်သူများအား တရားစွဲဆိုခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများ၊ ထွန်စက် များ သိမ်းယူခြင်း၊ တပ်သိမ်းမြေစာရင်းများ ပွင့်လင်းစွာချပြမှုမရှိသည့်အပေါ် ပအိုဝ်း အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်အရပ်ဖက် လူမှု အဖွဲ့အစည်း ၁၉၄ ဖွဲ့က ဇွန် ၃ ရက်က သဘောထားထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြေယာမြေ အငြင်းပွားမှု ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာထူးခြားမှုမရှိပါက ဒုတိယ သမ္မတ ထံစာတင်တောင်ဆို သွားမည်ဖြစ် ပြီး၊ T-Shirt Campaign ပြုလုပ်ရန်နှင့် တောင်သူများကို ပြန်စုကာ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးမှုများလည်း ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ခွန်ဦး က ပြောသည်။ ထို့အပြင် မြေယာများသိမ်းယူထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်းဌာနများအနေဖြင့် မြေသိမ်းခြင်းလျော်ကြေး နစ်နာကြေးပေးခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ထားခြင်းမရှိသည့် မြေနေရာများအား ဥပဒေအညီ မူလလုပ်ပိုင်ခွင့်ရ တောင်သူ များအားပြန်လည် စွန့်လွှတ်ပေးခြင်းစသည့် တည်ဆဲမြေယာဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လေးစားလိုက်နာပေးရန် လူမှု အဖွဲ့အစည်းများက တောင်းဆိုလိုက်သည်။ https://burmese.shannews.org/archives/169 95
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုဖြင့် ဖမ်းဆီးထားသူများကို ငွေကြေးတောင်းခံမှုရှိသည်ဟု ပြောဆိုသည့် အပေါ် ငွေဒဏ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လာရောက်ညှိနှိုင်းမှုသာရှိပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် KNU ချမှတ်ထားသည့် ဥပဒေ အတိုင်းသာ ဆောင်ရွက်နေသည်ဟု ဝင်းရေးမြို့နယ် တာဝန်ရှိသူမှ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
မေလ ၂၈ ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်ရှိ ငါးကလေးချောင်းအနီး မွန်လူငယ် ၄ ဦးကို KNU က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် ငွေကျပ်သိန်း ၂ဝ တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု Mon Human Rights မွန်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့၏ လူမှု ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးခံထားရသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးရန် ငွေကြေးအရ လာရောက် ညှိနှိုင်းမှုသာရှိပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်အနေဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားမှုသာရှိကြောင်း KNU ဒူးပလာယာခရိုင်ရှိ ဝင်းရေးမြို့နယ် တာဝန်ရှိသူများထံ ကေအိုင်စီက ဆက်သွယ်ရာတွင် ယခုကဲ့သို့ ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့သည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့က ရေးမြို့နယ် ငါးကလေးချောင်း ရာဘာတောထဲမှာ လူ ၄ ဦးထံကနေ လက်လုပ်သေနတ် တစ်လက်နဲ့ မြင်းဆေး ၁ဝ လုံး ဖမ်းမိတာပါ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒေသတာဝန်ရှိတစ်ဦးက ထောင်မချနဲ့ ငွေဒဏ်သာ ဆောင် ရွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာရှိတယ်။ မိသားစုဘက်ကရော အခြားမွန်လူငယ်အဖွဲ့တွေရော လာရောက်ညှိနှိုင်းတာရှိတယ်။ မသိ ရင် ကျနော်တို့ လုပ်စားသလို ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့က လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ပဲ ထိန်းသိမ်းထားတယ်။”ဟု KNU ဝင်းရေးမြို့နယ် အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောအယ်ဒါးက ပြောသည်။ လိပ်ပုရွာသား ၃ ဦးနှင့် စုံနံ့သာရွာသား ၁ ဦးကို မူးယစ် ဆေးမှုဖြင့် ဝန်ခံကတိလက်မှတ်ထိုးထားပြီး လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်အရ ၃ လစီ ထိန်းသိမ်းထားရှိကာ အခြားတစ်ဦးအား ကျန်းမာ ရေး အခြေအနေကြောင့် ဆေးကုခွင့်အနေဖြင့် နေအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုထားသည်ဟု KNU တာဝန်ရှိသူများက ပြောဆိုသည်။
KNU အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုများ ဖမ်းဆီးအရေးယူရာတွင် ပြဌာန်းဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေလျှက်ရှိပြီး လူမှု ရေး ပြစ်ဒဏ်များဖြင့်သာ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်သည့်အပေါ် ရေရှည်တွင် လူထုအထင်အမြင် လွှဲမှားသွားနိုင်ပြီး ကျူးလွန်သူ မည်သူမဆို ကော်သူးလေ ၁/၂ဝ၁၄ မူးယစ်အထူး အက်ဥပဒေအရ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖြေ ရှင်းရန်လိုသည်ဟု KNU ဝင်းရေးမြို့နယ် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80 %99%e1%80%b0%e1%80%b8%e1 %80%9a%e1%80%85%e1%
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်ခရိုင် နမ့်စန်မြို့နယ် ဝမ်ပုံကျေးရွာအုပ်စု နောင်ခါးကျေးရွာရှိ တောင်သူ ၉၃ ဦးပိုင် မြေဧက ၁၆၇ ကို တပ်မတော်က စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာဆောက်လုပ်ရန် မေလ ၂၅ ရက်နေ့က မြေစာရင်းရုံးသို့ စာတင်ပြရာတွင် မြေပိုင်ဆိုင်သောတောင်းသူများက ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ထားကြောင်း လယ်မြေသိမ်းခံရသူ ဦးစိုင်းဟိတ် ကပြောဆိုသည်။
အဆိုပါ မြေနေရာကို တပ်မတော် အမှတ် (၂) စစ်ဆင်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ်က ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်းဖြစ် ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ အဆိုပါမြေများ၌ မည်သည့်လုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ ပြီးခဲ့သည့် မေလအတွင်းမှ ထိုသို့ စစ်မှု ထမ်းဟောင်း အိမ်ယာဆောက်ရန်အတွက် အရှေ့လယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ သူတို့ သိမ်းထားတာလည်း နှစ်၂၀ ရှိပြီလေ။ ၂၀ တောင်ကျော်နေပြီ ကျွန်တော် ဒီဒေသကျေးရွာတွေ အရပ်ဖက်အထောက်အထား တွေပေါ့။ အနီးနားဝတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေပေါ့။ ဒါတကယ်ဘိုးဘွား ပိုင်မြေဆိုတာတစ်နယ်လုံးသိတာပဲလေ။ ကျန်တဲ့ အထောက်အထားတော့ မရှိဘူးလေ။ သူတို့လာပြောတုန်းက မြေဌားပေးပါ တပ်သက်သာချောင်ချိရေး အတွက်စိုက်ပျိုးရေး လုပ်မယ်ဆိုပြီးလာပြောတာ အခုကျတော့ ကျွန်တော့်ကို လက်မှတ်လာထိုး ခိုင်းတယ်လေ။ တပ်သိမ်းမှာပေါ့ လက်မှတ်ထိုး ပေးဆို ကျွန်တော်မထိုးဘူးလို့ ခင်ဗျားတို့ လာတုန်းကလည်း သိမ်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လို့ ဟိုနေ့ကမှသိတာ ရုံးကခေါ် ပြောတော့ ထွေအုပ်ရုံးကခေါ်ပြောတော့ ဒါတပ်သိမ်းမြေထဲမှာ မပါဘူး။ အဲဒါ ပြန်လျှောက်ယူဖို့တော့ ပြောတယ်”ဟု ဦးစိုင်ဟိတ် ကပြောဆိုသည်။
“သူတို့ကတော့ ရဲဘော်ဟောင်းအိမ်ရာအတွက် သိမ်းထားတာကန့်ကွက်လိုရင် ကန့်ကွက်ပါဆိုလို့ စာထွက်ထားတာလေ မြေစာရင်းမှာ သူတို့ကသိမ်းထားတာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တကယ်တောင်သူပိုင်ရှင် အစစ်အမှန်တွေကမစိုက်ရဘူးပေါ့. အဲဒါကြောင့် ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်တွေက ပြန်လိုချင်တာပေါ့။ အဲဒီမြေတွေ ကိုပြန်ရချင်တာပေါ့ ” ဟု ဦးစိုင်းဟိတ် ကပြောဆို သည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရရုံး တို့ကို တောင်သူများက မြေပြန်လည် ရရှိရေး အကြိမ်ကြိမ်တင်ပြတောင်းဆိုထားသော်လည်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိကြောင်း တောင်သူ များက ပြောဆိုသည်။ ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနက တပ်မတော်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်များထံ မြေသိမ်းယူမှုကိစ္စ မေးမြန်းရန် ကြိုးစားသော်လည်း အဆက်အသွယ်မရရှိပေ။ https://www.khitthitnews.com/2020/06/%e1%80%94%e1%80% 99%e1%80%b7%e1%80%ba%e1%80
၇။ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဖားကန့်တွင် ဈေးဆိုင်တန်း၊ ဘက်ဖိုးနှစ်စီးနှင့် ကားတစ်စီး ရေစီးကြောင်းနှင့် မျှောပါ ပြီး လူ အေ သအပျောက် ရှိနိုင်
မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဖားကန့်တွင် ဈေးဆိုင်တန်း၊ ဘက်ဖိုးနှစ်စီးနှင့် ကားတစ်စီး ရေစီးကြောင်းနှင့်မျှောပါပြီး လူ အသေအပျောက်ရှိနိုင်ကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဇွန် ၈ ရက် နံနက်အစောပိုင်းက မိုသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးနောက် ယင်းဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မမုံကျေးရွာမှ ဦးထွေးမောင်က ပြောကြားသည်။ ”မနက် ၁ နာရီကနေ မိုးသည်းနေတာ။ ရေစီးကြောင်းကို မြေစာဖို့ထားတော့ ရေအားနဲ့ ပေါက်ကြလာတာပေါ့။ ဘက်ဖိုးနှစ်စီး၊ ဆိုင်ခန်း ငါးခန်း ခြောက်ခန်း၊ မြေသယ်တစ်စီး၊ဖိုးဝှီးကားတစ်စီး မျှောလာတယ်။ လူ အသေအပျောက်တော့ စစ်ဆေးဆဲ ရှိသေးတယ်”ဟု ဦးထွေးမောင်က ပြောကြားသည်။ ရေစီးကြောင်းသည် အနံပေ ငါးရာ၊ အလျား ပေ နှစ်ထောင်ကျော်ခန့်ရှိပြီး လူအသေအပျောက် ရှိနိုင်ကြောင်း၊အများစုမှာ ခိုးကျင်းများဖြစ်နေသဖြင့် မည်သည့် လုပ်ကွက်မျှ မျှောလာသည်ကို မသိရကြောင်း ဒေသခံအများစုက ဆိုပါသည်။
ဖားကန့်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဉာဏ်လင်းအောင်က ” ကွင်းဆင်းနေတယ်။ ဘက်ဖိုးနှစ်စီး၊ဖိုးဝှီး ကားတစ်စီးမျှောလာ တယ်။ လူအသေအပျောက် ရှိလား စုံစမ်းနေတယ်။ ဘယ်လုပ်ကွက်က ဆိုတာလည်း မသိရသေးဘူး။ တစ်ခြားနေရာမဖြစ် ဘူး”ဟု ဆိုသည်။ ဒေသခံရွာသားများအဆိုအရ ယင်းနေရာမှာ ယူနတီနှင့် ဧရာရတနာ သက်တမ်းကုန်ကျင်း ဟောင်းနေရာ ဖြစ်ပြီး ခိုးတူးနေသည့် ယာဉ်များဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဖားကန့်ဒေသတွင် မြေပြိုကျမှု၊ နွံကန် ပေါက်ကျမှုကြောင့် ဧပြီ ၂၂ ရက်မှ ဧပြီ ၂၅ ရက်အထိ လေးရက်ဆက်တိုက် မြေပြိုမှုများ၊ နွံကန်ပေါက်ကြမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လူ ၅၉ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ယန္တရားတန်ဖိုး သိန်းပေါင်းသောင်းနှင့်ချီကာ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများအရသိရသည်။
ဖားကန့်ဒေသတွင် မြေပြိုမှုကို လစဉ်တိုင်း နေရာအနှံဖြစ်နေပြီး အထူးသဖြင့် မိုးဦးရာသီမှာ မိုင်းဒဏ်၊သဘာဝဒဏ်များကြောင့် အက်ကြောင်းများမိုးရေဝင်ကာ လျှောပြိုခြင်း၊ အမြင့်ပိုင်းမှ ရေကန်များ လျှောဆင်းကာ ပြိုကျခြင်း၊ မြေစာပုံများမြေလျှောခြင်း များ၊ ယင်းမြေသားပြိုကျမှုများကြောင့် အောက်ခြေရေအိုင်မှ လှိုင်လုံးကြီးများကြောင့် ရေအိုင်ကမ်းပါးတွင် ကျောက်ရှာနေသူ များအား ရေအားဖြင့် ဆွဲခြမှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်တွင် သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအရ ဖားကန့်ဒေသတွင် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ (၈၀၈) ခု တစ်ဧက လုပ်ကွက်ပေါင်း (၁၅၆၃၈)ကွက် ၊ အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီ (၂၂၂) ခု လုပ်ကွက်ပေါင်း (၃၀၂ )ကွက် အထိ ရှိခဲ့သည်။ NLD အစိုးရလက်ထက်တွင် လုပ်ကွက်များကို သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း မရှိတော့ပဲ လုပ်ကွက် ဧရိယာအကျယ်အဝန်း နှင့် ပေါင်းစပ်တူးဖော်ခွင့်များကို ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် အကျိုးတူလုပ်ကွက် ၄ ခု၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ကွက် ၆၃၆ ကွက်ရှိပြီး အများစုမှာ ခိုးတူးနေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ https://news-eleven.com/article/177471
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း သိန္နီမြို့အဝင်တံတားကင်းစောင့် တပ်သားများ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ် ၂ လုံးထိမှန်ခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၆ ရက် ည ၁၁ နာရီကျော် ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်လာသည့် လူတဦးအား သိန္နိမြို့ အဝင်တံတား ကင်းစောင့်နေသည့် တပ် သားမှ စစ်ဆေးရန်ရပ်ခိုင်းရာမရပ်သဖြင့်ဟုဆိုကာ သေနတ်ပစ်ခြိမ်းခြောက်ရာမှ လူနေအိမ်များအားထိခိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိန္နီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စိုင်းဦးခမ်း က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။“ဆိုင်ကယ်စီး လူတယောက်က တံတားဖြတ်သန်းစဉ်မှာ လုံခြုံရေးကတားပါတယ်။ တားလို့ မရပ်တဲ့အတွက် ကင်းစောင့်တဲ့ တပ်သားက သေနတ်ပစ်လိုက် တာပါ။ လူတော့ထိဘဲ အိမ် ၂ အိမ်ကိုထိသွားတယ်”ဟု စိုင်းဦးခမ်း က ပြောသည်။ အဆိုပါ အိမ် ၂ အိမ်သည် တံတားအနီး တွင်ရှိသည့်အိမ်များဖြစ်ပြီး၊ အိမ်ခေါင်မိုး၊ နံရံ များတွင် ကျည်ဆံထိမှန်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ တပ်မှလည်း ကျည်ထိမှန်သည့် အိမ်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြောင်း၊ သေနတ်ပစ်သည့် တပ်သားများကိုလည်း အရေးယူမှု ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြော သည်ဟု စိုင်းဦးခမ်း က ထပ်ပြောသည်။
“ဆိုင်ကယ်ကိုတားတာ မရပ်လို့မိုးပေါ်ထောင်ပစ်တယ်ပြောတယ်။ သေနတ်သံ ၅ ချက် ကျော် ၁၀ ချက်နီးပါးရှိတယ်။ ကျနော့အိမ်ကို ၃ ချက်ထိတယ်။ လူအိပ်ချိန်မို့လို့တော်သေးတယ်”ဟု ကျည်ထိမှန်သည့် အိမ်ပိုင်ရှင် စိုင်းကျော်ခိုင် က သျှမ်းသံတော်ဆင့် ကို ပြောသည်။ ထို့အပြင် တန်ဖိုးကြီးသည့် ပစ္စည်းများ ပျက်စီးပါကလည်းလျော်ပေးမည်ဟု တပ်ကပြော ဆိုကြောင်းလည်း စိုင်းကျော်ခိုင် က ပြောသည်။“ တန်ဖိုးကြီးပျက်စီးတာ ရှိရင် လျော်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူ တယောက်ယောက်ကို ထိသွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတယ်။ စိုးရိမ်စရာပါ။ နောက်နောင်ဒီလိုမျိုး မဖြစ်ဖို့ပဲ လိုပါတယ် ” ဟု စိုင်းကျော်ခိုင် က တောင်းဆိုလိုက်သည်။
လုံခြုံရေးအရ ဆိုင်ကယ်တားသည်ကို မရပ်သည့်အတွက် သေနတ်ပစ်ရသည့် အကြောင်းပြချက်မဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ နောက် နောင် အရပ်သားနေထိုင်သည့် နေအိမ်ဘက်သို့ သေနတ်မပစ်ရန် တောင်းဆိုချင်ကြောင်း ကျည်ထိမှန်သည့် နေအိမ်တွင်နေ ထိုင်သူများက ပြောသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/17000
လာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ အထွေထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ ပြည်တောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က တရားဝင် ကြေညာထားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးလိုကြောင်း ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီက ကချင်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဆီကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပေးပို့ တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုပါက ပြည်နယ်အခြေစိုက်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပါတီတွေနဲ့ အကြို ဆွေး နွေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ကချင်အမျိုးသား ကွန်ဂရက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ‌ဒေါက်တာ M- ကောန်လက ပြောပါတယ်။“ဒီရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ ပြည်နယ်တိုင်းက သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအလိုက်က ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့တွေက အကောင်အထည်ဖော်တယ်။ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာ တချို့ကျတော့ ဗဟို က လိုအပ်တဲ့ဟာကို ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ပေမယ့် တချို့ကျတော့ ပြည်နယ်တိုင်းကနေပြီးတော့မှ သူ့လိုအပ်ချက် အရ သူပြန်ပြီးတော့မှ စာရင်းအချက်အလက်တွေကို ပေးပို့ရတာရှိတယ်။ အဲလို ကိစ္စတွေမှာ ကျနော်တို့စကားပြောဖို့ လို တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆတယ်ပေါ့နော်”ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ ပြည်နယ်အတွင်းက ပါတီအား လုံးနဲ့ ဆွေးနွေးစေလိုကြောင်းနဲ့ ကျန်တဲ့ပါတီကို မခေါ်ရင်လည်း ကချင်အမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီနဲ့ အချက် ၅ ချက် ဆွေးနွေး လိုကြောင်းလည်း စာမှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဆွေးနွေးလိုတဲ့အချက် ၅ ချက်ကတော့ ရက်ပေါင်း ၉၀ နေထိုင်သူများ သက်ဆိုင်ရာ ရောက်ရှိတဲ့ဒေသမှာ မဲပေးမယ့်ကိစ္စ လူဦးရေစာရင်းကောက်ယူပုံ၊ ဝေးလံခေါင်ဖျားနေတဲ့ ဒေသခံနိုင်ငံသားတွေကို၏ မဲပေးခွင့်ရရေးနဲ့ မဲဆန္ဒနယ်တိုးချဲ့သတ်မှတ် ရေးကိစ္စ၊ ကိုယ်စားလောင်းများ လိုက်နာရမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်ကိစ္စ၊ ကြိုတင်မဲ သတ်မှတ်ပုံကိစ္စနဲ့ ဧည့်နိုင်ငံ သားများကို ပါဝင်မဲပေးခွင့် သတ်မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးလိုကြောင်း စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ အလားတူ မဲပေးနိုင်သူ အရည်အချင်း သတ်မှတ်ခြင်းမှာ ဧည့်နိုင်ငံသားတွေကို ပါဝင်မဲပေးခွင့် သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် ဧည့်နိုင်ငံသားဆိုတာ ဘယ် လို လူမျိုးလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ လိုအပ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ အဆိုပါအိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ဒီကနေ့မနက် ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုသွားရောက်ပေးဖို့ထားပြီးအကြောင်းမပြန်သေးကြောင်းလည်း ဒေါက်တာ M-ကောန်လ က ပြောပါတယ်။ ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပဲ ကျင်းပသွားမယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က ဇွန်လ ၄ ရက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ မယ့် ရက်ကို ပုံမှန်အတိုင်း ၄ လကြိုတင် ကြေညာသွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/arc hives/393127
ကပ်ရောဂါဘေးကာလမှာ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ကို ကိုဗစ်-၁၉ ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူလူထုစားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရးကော်မတီက ဇွန်လ ၈ ရက်မှာ စားနပ်ရိက္ခာတွေ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပါ တယ်။
အန်စီအေ လက်မှတ် ရေးထိုးထားတဲ့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်(PNLO)၊ ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ RCSS/SSA နဲ့ PNO အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့စစ် (ဌာနေ)တို့ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာပါ။ RCSS အနေနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း ပြည်သူအယောက် ၆၀ဝ၀ဝ ကျော်ကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးခဲ့သလို သံသယလူနာ မတွေ့ရှိဘူး လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကပ်ဘေးကာလအတွင်း ပြည်သူတွေကို ထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ တပ်မတော်နဲ့ နားလည်မှုလွဲပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းအွမ်ခေးက ပြောပါတယ်။
PNO အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့စစ်(ဌာနေ)အနေနဲ့လည်း ကပ်ဘေးကာလမှာ ပြည်သူတွေကို ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးမှုတွေ အတော်များများလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PNO အသွင်ပြောင်းပြည်သူ့စစ် ဒုကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်မှူး အောင်သန်းက ပြောပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားနက်ကိုင်တစ်ဖွဲ့ကို ဆန် ၂၄ ပြည်အိတ် ၃၀ဝ စီ၊ ဆီ ၁၀ ပိဿာပုံး ၃၀ စီ ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။ http://burmes e.dvb.no/archives/393063
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ဇင်ချောင်းအုပ်စုမှာနေထိုင်တဲ့ အသက် ၈၁ နှစ်အရွယ် ဦးဝေကျန်အောင်နဲ့ အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် ဦးမောင်မောင်ညိုတို့ သားဖနှစ်ဦးကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက အေအေ အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတာ ဖြစ် တယ်လို့ မိသားစုက RFA ကိုဒီနေ့ပြောပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ညနေက ရွာနဲ့ နှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ ကမ်းခြေဘက်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ ထွက်သွားပြီးနောက် ပျောက်ဆုံးသွားတာလို့ ဦးမောင်မောင်ညို ရဲ့ ဇနီး ဒေါ်သန္တာငြိမ်းက ပြောပါတယ်။“တနင်္လာနေ့ ညနေ ၄ နာရီလောက်မှာ အိမ်ကထွက်သွားပါတယ်။ အိမ်ကို ပြန်မရောက်ဘူး။ ည ၆ နာရီ ထိုး ပေမယ့် မရောက်၊ ၈ နာရီ လောက်မှာလည်း မရောက်၊ ၉ နာရီလောက်မှာတော့ ကျွန်မတို့ လိုက်ရှာကြပါတယ်။ အဲလို လိုက် ရှာတဲ့အခါမှာ ည ၁၁ နာရီလောက်မှာ ဆိုင်ကယ်ရယ်၊ သူ့အဖေမှာပါသွားတဲ့ ဓားနဲ့ ခမောက်ကိုပဲ တွေ့တော့တယ်” ဦးဝေကျန်အောင်ရဲ့သား၊ ဦးမောင်မောင်ညိုရဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ဦးဇင်း ဦးဝဇီရာဝုဓ က အေအေက ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ သက် သေ တွေ ရထားတယ်လို့ မိန့်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ အသက် ၈၀ ကျော်အရွယ် ဦးဝေကျန်အောင်ဟာ ဇင်ချောင်းအုပ်စု ကုန်ဘောင်ကြီးရွာမှာ အခြေချနေထိုင်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေသူပါ။ သူနဲ့အတူဖမ်းဆီးခံရတဲ့သားဖြစ်သူ ဦးမောင်မောင်ညိုကတော့ ကျောက်ဖြူ မြို့ ဓညဝတီရေတပ်ဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ပင်စင်ယူပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေသူပါ။ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်သန္တာငြိမ်းက သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ ရိုးရိုးသားသား လုပ်ကိုင်စား သောက်နေသူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာစေချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။”ဦးဝေကျန်အောင်နဲ့ ဦးမောင်မောင်ညို တို့သားဖနှစ်ဦးကို အေအေ အဖွဲ့က ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ RFA က သီးခြားအတည်ပြုချက် ရနိုင်ဖို့အတွက် မျက်မြင်တွေကို မေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။
ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဦးမောင်မောင်ညိုရဲ့ဇနီး ဒေါ်သန္တာငြိမ်းက ဖမ်းဆီးခံတဲ့ကိစ္စအပေါ် ဇင်ချောင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှာ အသိပေးထား ပေမယ့် အမှုဖွင့်ထားတာ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) က မနေ့က ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာ ရက္ခိုင့် တပ်တော်အနေနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ အမာခံတွေ၊ သတင်းပေးတွေ၊ ရိက္ခာထောက်ပံ့ ပေးပို့နေသူတွေ၊ မြန်မာ့တပ်မတော် ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးကို အထောက်အကူပြုနေသူတွေကို ရံဖန်ရံခါ ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းလေ့ရှိပြီး အပြစ်မရှိသူတွေကို လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့ အခြေအနေနဲ့ သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်လွှတ်ပေးလေ့ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ရေး ကာလအတွင်း မသင်္ကာလို့ ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေကို တပ်မတော်ရော၊ အေအေပါ နှစ်ဘက်စလုံးက လုပ် ဆောင်နေတာပါ။ အဲဒီ လို ဖမ်းဆီးခံရရင်း ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေရှိသလို စစ်ကြောရေးမှာလက်လွန်ပြီး သေဆုံးသွားတာတွေ၊ ဘာ သတင်း အစအနမှ မရတော့ဘဲ ပျောက်ဆုံး သွားတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ https://www.rfa.org/b urmese/ne ws/father-and-son-arrested-by-aa-in-kyaukphyu-06052020083219.html
စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသူ/သားများအတွက် ဆမီးမြို့တွင် ကျောင်းဆောင်သစ် ၂ လုံး စတင်ဆောက်လုပ်နေကြောင်း ချင်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်ထံမှ သိရသည်။ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “ဒုက္ခသည် တွေက တိုးလာသလို ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အရေအတွက်လည်း တိုးလာတယ် ဆမီးမှာဆိုရင် ကျောင်းသူကျောင်းသား ဦးရေ ၇၅၀ လောက်တိုးလာတယ် အဲဒီအတွက်ကို မနက်ပိုင်းဖွင့်တဲ့ကျောင်း ညနေပိုင်းဖွင့်တဲ့ကျောင်း မနက်ပိုင်းကို တစ်ဝက် တက်၊ ညနေပိုင်းကို တစ်ဝတ်တက်၊ဒီလိုစနစ်တွေ သုံးဖို့ ဆွေးနွေးထားတယ် အဲလိုလုပ်လို့ အဆင်ပြေရင် ပရိဘောဂနဲ့ ကျောင်းဆောင် သက်သာသွားမယ်။ ပေ ၈၀ ပေ ၃၀ ကျောင်းဆောင်တွေ ဆောက်လုပ်ဖို့ ဆမီးမှာတော့ ခိုင်းလိုက်ပြီ သစ်တိုင် သွပ်မိုးနဲ့ အကာတော့ ဝါးထရံနဲ့လုပ်မှာဖြစ်တယ် အဲလို ၂ လုံး ဆောက်ခိုင်းထားလိုက်တယ်”ဟုပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့၊ ဆမီးမြို့၊ မီးဇာရွာနှင့် ကင်ချောင်းဝရွာတို့တွင် စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည် များပြားလာသလို ကျောင်းသူ ကျောင်း သားဦးရေမှာလည်း များပြားလာသောကြောင့် ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် အချိန်မှီကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် ကျောင်းဆောင်များ ဆောက်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က “ဆမီးတစ်ခုထဲမှာတင် အခုနာမည်စာရင်း ကောက်ယူထားတာက ၇၅၀ ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ် ပလက်ဝမှာတော့ အခုလုပ်လို့မရသေးဘူး ပစ္စည်းတွေ ဝယ်လို့လည်း မရဘူး ပို့လို့လည်း မရသေးဘူး အဲဒါကြောင့် ဆမီးမှာစလုပ်နေတယ်”ဟုပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့တွင် တိုက်ပွဲရှောင်သည့် အိမ်ထောင်စု ၁၁၃၂ စုရှိပြီး လူဦးရေအားဖြင့် ၅၀၉ဝ ဦးရှိကြောင်း နှင့် ဆမီးမြို့တွင် အိမ်ထောင်စု ၆၉၈ အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး လူဦးရေအားဖြင့် ၂၉၆၁ ဦး ရှိကြောင်း ပြည်သူများ အရေးပေါ်ကူညီရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကော်မတီ RRCCI ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73263
အစိုးရ တပ်မတော်နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများဖြစ်ပွားစေသည့် ထိတွေ့မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရှောင်ရှားရန် တပ်တွင်းညွှန် ကြား ချက်ထုတ်ထားကြောင်း တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် ( NCA) လက်မှတ်ထိုးထား သည့် KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KNLA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဂျော်နီက ပြောသည်။
လတ်တလော KNU နယ်မြေဒေသများတွင် အစိုးရ စစ်တပ်၏ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများနှင့် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အကြား နယ်မြေကျူးကျော်မှု အကြောင်းပြချက်များဖြင့် ပဋိပက္ခနှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပစ်ခတ်မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပွား လာခြင်းကြောင့် ယခုလို ညွှန်ကြားချက် ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဂျော်နီက ယခုလိုပြောသည်။ ၎င်းက “အခု ကျနော်တို့ လူ တွေကို ညွှန်ကြားထားပြီးပြီ။ ကိုယ့်နေရာနဲ့ ကိုယ်နေပြီး နယ်မြေကျူးကျော်တာမျိုး မဟုတ်ရင် ဘာမှမလုပ်ဖို့နဲ့ တကယ်လို့ နယ်မြေကျူးကျော်လာတာမျိုးဖြစ်ရင်လည်း ဘယ်လို အရေးယူဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုပေါ့။ အခုဆိုရင် ကျနော်ထင်တယ် နောက်တစ်ပတ် နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေသွားမှာပါ” ယနေ့ ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။ ပြီးခဲ့သည့် လများမှစ၍ ယခုဇွန်လဆန်းပိုင်းအထိ KNU လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့အကြား ထိတွေ့မှု ၊ ပစ်ခတ်မှုများ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကေအိုင်စီ-ကရင်သတင်းဌာန၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှု အပေါ် ယခုလိုပြန်လည်ပြော ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် KNU လက်အောက်ခံတပ်များနှင့် အစိုးရစစ်တပ်အကြား မကြာ ခဏ ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်သတ်မှတ်နယ် မြေကျူးကျော်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားရခြင်း ဖြစ်သည် ဟု သက်ဆိုင်ရာနှစ်ဖက်တပ်များက ပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်များအပြီး ထုတ်ဖော်ပြောလေ့ရှိသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ယနေ့အချိန်ထိ နယ်မြေပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းကို ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိ သေးကြောင်းသိရသည်။ အလား တူ မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အခွင့်အကောင်းယူပြီး ၎င်းတို့ နယ်မြေထဲတွင် တပ်စခန်းနှင့် တပ် အင်အားတိုးချဲ့မှုများ ယခင်နှစ်များထက် နှစ်ဆဖြည့်တင်းခြင်းများ ပြုလုပ်လာကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၁၅ ရက်နေ့ က KNU ဗဟိုက သဘောထားထုတ်ပြန်ထားပြီး တပ်မတော်စစ်ကြောင်းများမှ ရန်လိုသည့် ပုံစံပိုမိုပြသလာခြင်းကြောင့် အောက် ခြေတွင် ထိတွေ့မှုများ ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုထားသည်။
ယခုဇွန်လဆန်းပိုင်းတွင်လည်း KNU တပ်မဟာ (၅) နှင့် တပ်မဟာ(၇) ဒေသတို့တွင် အစိုးရတပ်မတော်နှင့် KNLA တပ်ဖွဲ့ ဝင်များအကြား ပစ်ခတ်မှု ၂ ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂ရက်နေ့ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် ဒေသခံ ရွာသား ၂ ဦး လက်နက်ကြီး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလို ဇွန်လ ၄ရက်နေ့တွင်လည်း KNU ဖာပွန်ခရိုင်ဒေသရှိ သောလယ်ထ နှင့် ဖားအံခရိုင်ဒေသရှိ သူမွဲထ ဒေသတို့တွင် နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။ နယ်မြေသတ်မှတ်ကျူးကျော်မှု အကြောင်း ပြချက်ဖြင့် ဖြစ်ပွားသည့် ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုများအပြင် လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း KNU ၏ ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို တပ်မတော်ဘက်မှ နှောင့်ယှက်ဟန့်တားမှုများနှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေး ဂိတ် များဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လည်း နှစ်ဖက် ပဋိပက္ခများ ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%8 0%91%e1%80%ad%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%
လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ MUP ကိုယ်စားလောင်းများအဖြစ် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မိမိတို့မြို့နယ် ပါတီရုံးအသီးသီးသို့ သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း MUP တွဲ ဖက်အတွင်းရေးမှူး(၁) နိုင်လယိတမက မွန်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။
မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၏ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအရည်အချင်း သတ်မှတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးကို မော်လမြိုင်မြို့၌ (ဇွန် ၇ ရက်နေ့)က ကျင်းပ၍ ဗဟိုကော်မတီဝင်များမှ တင်ပြချက်များအား အတည်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။“ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုတဲ့ အမတ်လောင်းတွေအနေနဲ့ အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့်မြို့ နယ်မှာရှိတဲ့ MUP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ထံကို လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းလျှောက်ထားရပါမယ်၊ အဲဒီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် အဆိုပြုသူတွေကို သတ်မှတ်ရက်တွေမှာ မြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ပဏာမရွေးချယ်ပြီးတော့ ဗဟိုကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်” ဟု နိုင်လယိတမက ဆိုသည်။
MUP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဆိုပြုလျှောက်လွှာတစ်စောင်အတွက် ငွေကျပ်တစ်သိန်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စား လှယ်လောင်း အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက် ၁၉ ချက်ရှိသည့်အနက် အဓိကအားဖြင့် ဒေသခံ (သို့မဟုတ်) ဒေသတွင်းနေ ထိုင်သူ (သို့မဟုတ်)ဇာတိမွေးရပ်မြေမှ ပါတီဝင်ဖြစ်ရမည်ဟု ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရည်အချင်း (Criteria of Candidate) သတ်မှတ်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ နိုင်လယိတမက “မြို့နယ်အသီးသီးက ရွေးချယ်လာတဲ့ သူတို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တွေကို ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ဗဟိုကိုတင်ပြရပါမယ်၊ အဲဒီမြို့နယ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဗဟိုကနေ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အရည်အချင်းတွေကို စိစစ်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်”ဟု ပြောသည်။
မွန်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး MWO အဖွဲ့ဝင် မိစားယားပိုင်က “ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ အရည် အချင်း ကိုပဲကြည့်မယ်၊ ပြောချင်တာက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးဟာ သူလုပ်ရမယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရှိ ရမယ်၊ ဥပမာ – ဒီဒေသမှာတာဝန်ယူထားတယ်ဆိုရင်၊ ဒေသခံတွေက ဘာကိုလိုအပ်နေသလဲ သိထားရမယ်၊ နောက်တစ်ခု က နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိကျွမ်းကျင်မှုရှိသလဲဆိုတာ မိမိကိုယ်ကို သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိရမယ်”ဟု ဆို သည်။ လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လွှတ်တော်အသီးသီး၌ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် MUP ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတွင် လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးများကို အဓိက ဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမည်ဟုလည်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁၂ ဦး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၀ ဦး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၂၀ ဦးတို့အပြင် ဗမာ၊ ကရင်နှင့် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများအတွက်ပါ မဲဆန္ဒနေရာသတ်မှတ်ပေးထားပြီး လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP , မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီတို့ အဓိက ယှဉ်ပြိုင်သွားရမည့်အနေအထားတွင် တွေ့ရှိရကြောင်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက ဆိုသည်။ http://burmese.monn ews.org/2020/06/08/%e1%80%99%e1 %80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ် သိုင်းကျပ်ကျေးရွာက ဒေါ်စိန်မြဦးကို AA က တစ်လကျော်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီး ပြန်လွှတ်ပေးပြီး နောက် ၃ ရက်အကြာ သေဆုံးသည့်ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး AA က ၎င်းတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခြင်းသည် တာဝန်မဲ့ရာရောက်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသမီးကွန်ရက်မှ အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ခင်ဝင်းရီကပြောဆိုသည်။
AA က ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းကြေညာချက်တွင် မင်းပြားမြို့နယ် သိုင်းကျပ်ကျေးရွာ သူ ဒေါ်စိန်မြဦး အသက် ၅၁ နှစ် မင်းပြားပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင် သေဆုံးမှုသည် ၎င်းတို့နှင့်မပတ်သက်ကြောင်း၊ ဧပြီလ ၂၇ ရက် နေ့က ဒေါ်စိန်မြဦး နှင့်အတူ ဦးယောင်ဇာ၊ ဦးမောင်စိန်ဖြူ၊ ဦးစိန်ဝင်းကြိုင် တို့ကို ရာမောင်တံတားထိပ် စခန်းချ တပ်စွဲထား သော မြန်မာ့တပ်မတော်၏ စစ်သင်္ဘောသို့ ရိက္ခာပေးပို့နေသည့်အတွက် ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ ခေါ်ယူစစ်ဆေးစဉ် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု မလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်စိန်မြဦးသည် နဂိုရှိရင်းစွဲ နှလုံးရောဂါနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး အားနည်းသော ရောဂါ အခံပါရှိလာကြောင်း၊ မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်စိန်မြဦးနှင့် အမျိုးသား ၃ ဦးကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် မင်းပြားမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဒေါ်စိန်မြဦး သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး သေဆုံးမှုသည် AA နှင့် မသက်ဆိုင် ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“သူတို့တာဝန်မဲ့တဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းအပေါ်မှာ ကျွန်မတို့က တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ကြေညာချက် ပြန်ထုတ်တာဖြစ် တယ်။ “တစ်လကျော်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အရာမျိုး ပြီးတော့ အညိုအမဲတွေစွဲတဲ့ အရာမျိုးက သူတို့နဲ့ လုံးဝ မဆိုင်ပါဘူး ဆိုတဲ့အရာမျိုး AA ကဖမ်ပြီးတော့မှ လုံးဝမိသားစုနဲ့တောင်မတွေ့ရဘူး။ နောက်မှမိသားစုတွေသိရတယ်။ မိသားစုတွေ ရောက် လာတဲ့အချိန်မှာ မိသားစုတွေကို ကြောက်တယ်။ နဂိုစိတ်တွေ လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ လူတွေကိုကြောက်တယ်။ ဘာမှမသိတော့ ဘူး။ ဘာမှ မပြောနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးဆိုတော့ ဘယ်လောက်အထိ သူအကြမ်းဖက်ခံရပြီလဲ။ AA ကမဖမ်းရင် ဒီလိုတွေ ဒေါ်စိန်မြဦး ဖြစ်စရာ ဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး” ဟု ဒေါ်ခင်ဝင်းရီကပြောဆိုသည်။
ချင်းအမျိုးသမီးကွန်ရက်က AA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်း ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့တွင် ကြေ ညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ချင်းအမျိုးသမီးကွန်ရက်၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် AA က ဒေါ်စိန်မြဦးကို ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့အထိ ၁ လ ကျော်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်စိန်မြဦး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာချိန်တွင် မူလသာမန်စိတ်နေစိတ်ထား ပျောက် သွားသည့်အပြင် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းများ ပုံမမှန်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ခြောက်ခြားခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာများ ထိခိုက်နေခဲ့ကြောင်း၊ လက်ကောက်ဝတ်နှစ်ဖက်စလုံးနှင့် နောက်ကျောဘက်တွင် အညိုအမည်းများ စွဲနေကာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်လည်း ဒဏ်ရာများရှိနေခဲ့ကြောင်း၊ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း၊ AA ၏ ထုတ်ပြန် ချက်ကို ရှုတ်ချကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများအပေါ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ နောက်နောက် တွင် မပြုလုပ်ရန်နှင့် တိုက်ပွဲများအတွင်း အမျိုးသမီးများနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်ဖွဲ့များက ကျင့်သုံးရန် ထုတ်ပြန်ထားသည့် UN Security Resolution 135 ပါ အချက်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန် တောင်းဆိုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ https://www.khi tthitnews.com/2020/06/%e1%80%96%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80
ကယား(ကရင်နီ) ပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကွိုင်ငံရေထွက်ပေါက် ချောင်းတစ်လျှောက် သစ်ပင်တွေကြီး တွေ လှဲဖြိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက် ချောင်းဘေးတွေမှာ မြေပြိုမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
“ဒီချောင်းရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ သစ်ပစ်တွေအားလုံးကို ဖြိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ အဲ့ဒီချောင်းနံဘေးမှာရှိတဲ့ နံရံတွေပေါ့နော် နံရံ တွေကလည်း ဒါကံပြိုနိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ ဒါက ကျတော်တို့လက်တွေ့ပေါ့နော် ဒီနေရာဟာဆိုရင် ဒီလိုမျိုးပြိုစရာ အ ကြောင်းကိုမရှိဘူး။ ဒီသစ်ပင်ကို မဖြိုဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဒီမြေက ပြိုစရာအကြောင်းလဲမရှိဘူး။ ဒီသစ်ပင်တွေကို ဖြိုလိုက်တဲ့ ခါကျတော့ မြေကြီးကိုစွဲထားတဲ့ သစ်ပင်အမြစ်တွေက မရှိတော့တဲ့ ခါကျတော့ အဲ့ဒါပြိုတယ်လို့ ဒါကျတော်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျတော်ရဲ့အမြင်နဲ့ဒါ သုံးသပ်တာပေါ့နော်။”လို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ်ကပြောပါတယ်။
ချောင်းဘေးကနေ တူးဖော်ထားတဲ့ အပင်ကြီးတွေကို အချို့ကိုတော့ တူးဖော်တဲ့ လူတွေက ပြန်လည်ရှင်းလင်းပေးခဲ့ပေမဲ့လဲ အချို့အပင်ကြီးတွေက ဒေသခံတွေရဲ့လယ်ယာမြေတွေနားက အပင်ကြီးတွေကို လယ်မြေပိုင်ဆိုင်တဲ့ သူတွေကပြန်လည် ရှင်းလင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှင်းလင်းဖို့အတွက် အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ ကွိုင်ငံရွာဟောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ ကိုခွန်းလေဘီဦး က ပြောပါတယ်။ “အဲ့ဒီလှဲထားတဲ့ သစ်ပင်အကြီးတွေပေါ့နော သစ်ပင်အကြီးတွေလဲ ပြန်မရှင်းပေးဘူးပေါ့နော်။ လယ်သမား တွေလဲ ကိုယ့်ဟာကို ပြန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာတအားခက်တယ်။ အချိန်တွေလည်း တစ်အားကုန်တဲ့ခါကျတော့ ကျတော်တို့ ရှုံးဆုံးသွားတဲ့ ကျတော်တို့သဘာဝသယံဇာတတွေ၊ သစ်ပင်ကြီးတွေ ဒီဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ် ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးကျတော် မေးချင်ပါတယ်။”လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၂၀၊ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့မှာ ဖရူဆိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသဲရယ်က ကွိုင်ငံရွာ က ဒေသခံတွေနဲ့ သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ ဒေသခံတွေက အခုလိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခံ တွေက ချောင်းဘေးမှာရှိနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးကို လဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် မြေပြိုမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာ သစ်ပင် တွေကို ပြန်လည်အစားထိုးစိုက်ပျိုးပေးဖို့ တောင်းဆိုတာတွေ ရှိနေတယ်လို့ ဦးသဲရယ်က ပြောပါတယ်။
ကွိုင်ငံရေထွက်ပေါက်ကနေ ရေသွယ်တဲ့ချောင်းတူးဖော်တဲ့ အခါမှာ ဒေသခံတွေရဲ့လယ်ယာမြေ အချို့နဲ့ချောင်းဘေးမှာရှိတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေ ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက် လတ်တလောမှာ ချောင်းပေါင်တွေကနေ မြေပြိုမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အဆိုပါ မြေပြိုမှုတွေထပ်ပြီးတော့ မဖြစ်ဖို့အတွက် ဒေသခံတွေကချောင်းဘေးမှာ သစ်ပင်တွေပြန်လည်စိုက်ပျိုးပေးဖို့အတွက် တောင်း ဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကွိုင်ငံရေထွက်ပေါက်ကနေ တစ်ခြားရွာတွေကိုရေလွဲပေးဖို့အတွက် ချောင်းကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ ရေးနှစ်မှာ ရေစီးရေလာ ပိုမိုကောင်းမွန်ဖို့အတွက် နကိုယ်ရှိပြီးသား ငူးပလော့ဆည်သို့ သွားတဲ့ချောင်းကို ထပ်မံပြီးတော့ ပြင်ဆင်တူးဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရေမြောင်းကိုပြင်ဆင်တူးဖော်တဲ့ အခါမှာ ဒေသခံတွေရဲ့လယ်ယာမြေတွေလဲ တစ်ချို့ တစ်ဝက်က ချောင်းဖော်တဲ့အထဲမှာပါသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73279
၂၀၂၀ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားပေးပို့လာသော မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်တွင် “မူးယစ်ဆေးဝါး အထူးသတင်းတိုင်ကြားရေး ဌာန”သို့ တိုင်ကြားလာခြင်းကြောင့် ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် မူးယစ်အမှုပေါင်း (၁၈) မှု ကို ဖော်ပြထားရာ မွန်ပြည်နယ်မှ တိုင်ကြားမှုတစ်ခုမှ မပါရှိကြောင်း သိရသည်။“မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူအများဆုံးထဲမှာ မွန်ပြည်နယ်က ထိပ်ပိုင်းမှာရှိတယ်။ (အဲဒါကို) ဘာလို့မတိုင်တာလဲဆိုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဒီတိုင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကို မယုံကြည်လို့ မတိုင်တာပါ” ဟု ရေးမြို့နယ်က တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးက ပြောပါသည်။ သတင်းပေးပို့တိုင်ကြားသူများ၏ လုံခြုံရေးကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက အကာအကွယ်မပေးသည့်အပြင် ၎င်းတို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းများကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောပါသည်။
“မူးယစ်ဆေးဝါး အထူးသတင်းတိုင်ကြားရေးဌာန”သို့ တိုင်ကြားလာပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အဆင့်သို့ ပြန်လည်ညွှန် ကြားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ တိုက်ရိုက်ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်း ပြုလုပ်စေလိုကြောင်း မုဒုံမြို့နယ်မှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးက ပြောပါသည်။“အထက်ကနေ တိုက်ရိုက်လာဖမ်းတာမဟုတ်ဘဲ အောက်ခြေကိုပဲ ဖမ်းခိုင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ထိရောက်မှု မရှိ ဘူးပေါ့”ဟု မုဒုံမြို့နယ်မှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူကပြောပါသည်။ မူးယစ်ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်လာပါက “မူးယစ်ဆေးဝါး အထူး သတင်းတိုင်ကြားရေးဌာန”သို့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းနှင့် တိုင်ကြားနိုင်သည့် နည်းလမ်းကို ပြည်သူများသိရှိခြင်းမရှိသေး ကြောင်း မေးမြန်းချက်များအရသိရသည်။“မူးယစ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ထိရောက်မှုရှိဖို့ အစိုးရ ဘတ်ဂျက် နဲ့ စီမံချက်လိုမျိုး စနစ်တကျလုပ်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်”ဟု မုဒုံမြို့နယ်မှ တက်ကြွလှုပ်ရှား သူက ပြောပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ ပိုမိုဖမ်းဆီးရမိနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ သို့ တိုင်ကြားနိုင်သည့်အပြင် ထူးခြားသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့် ကြီးမားသည့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်း/ဝယ်မှုများကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ “မူးယစ်ဆေးဝါး အထူးသတင်းတိုင်ကြားရေးဌာန”သို့ တိုင်ကြားလိုပါက အော်တိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ် ဝ၆၇-၅၉၀ ၂၀ဝ၊ ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ် ဝ၆၇-၅၉၀ ၂၃၃ နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ [email protected] သို့ ရုံးချိန် အတွင်း လုံခြုံစိတ်ချစွာ တိုင်ကြားနိုင်ပါကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက အသိပေးထားသည်။ http://burmese.monnew s.org/2020/06/05/%e1%80%99%e1%80%9a%e1% 80%af%e1%80%b6%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အသွင်ဆောင် အကြမ်းဖက် ပဋိပက္ခ တွေကြား နေအိမ်တွေမီးရှို့၊ အုပ်စုလိုက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ဒေသခံ ရခိုင်ပြည်သူတွေရော မွတ်စလင်တွေပါ အသက် ဘေးလွတ်ရာကို အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာ နေထိုင်နေကြရတဲ့အထဲ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ကျောက်တလုံး ဒုက္ခသည်စခန်းထဲက ဒုက္ခသည်တွေလည်း အပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီက ဒုက္ခသည် တွေဟာ ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်မှာ ကိုယ့်အိုးကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ဒေသခံ တွေဖြစ်ပြီး သူတို့ မူရင်းနေရာတွေမှာ ပြန်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးခဲ့ပေမယ့်လည်း ခုချိန်ထိ တော့ မပြေလည်သေးပါဘူး။ အချင်းချင်းကြားမှာ ဘာပဋိပက္ခမှမရှိဘဲ မြို့ပေါ်မှာ အတူတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြရာကနေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် အခြေအနေတွေ ဖြစ်ချိန်မှာ ဒုက္ခသည်စခန်းထဲ ဘယ်လိုရောက်သွားရ တယ်ဆိုတာကို စနေနေ့က အွန်လိုင်းကနေလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်သူ ဦးခင်ရွှေက ပြောပြပါတယ်။
နောက် ဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်သူ မခင်နီလာဝင်းကလည်း ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ နေထိုင်နေရတဲ့အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။“အရင်က ကျမတို့ ရေလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်၊ တံငါလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်။ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်မှာဆို မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းတွေ ကုန်စုံဆိုင်တွေ လုပ်ကိုင်တော့ ကျမတို့ အဆင်ပြေချောမွေ့ စားဝတ်နေရေးလည်း အဆင်ပြေခဲ့ ပါတယ်။ အခု ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် စားဝတ်နေရေးဟာ လုံးဝ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်းနဲ့ အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်ရ တယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်း ဒီထဲရောက်တဲ့ အချိန်ကျတော့ လူဦးရေက ၁,၅၀၀ ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ ၁,၅၀၀ ကျော်လောက်မှာ ၁၂၀ နီးပါး အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဆိုတာ မရှိပါ။ ဒီနေရာမှာနေဖို့ဆိုတာ ကျမတို့အတွက် လုံးဝ မသင့်တော်ပါ။ ကျမ အမေတယောက်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး အကုန်ဆုံးရှုံးရပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ အများကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။”ပြည်ထောင်စုအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကြား အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သူတို့ဘက်က လိုလားချက်တွေကို တင်ပြထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ကျောက်တလုံး ဒုက္ခသည်စခန်း စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဖြူချေက ပြောပါတယ်။
အစိုးရရဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး အစီအစဉ်ကို ကြိုဆိုပေမယ့် လက်ရှိ ကျောက်တလုံး ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ ရွှေ့ပေးမယ် ဆိုတဲ့ နေရာဟာ ဆားငန်ဒီရေတောကို တာပတ်ပြီး စခန်းပြန်လည်နေရာချထားမှာဖြစ်လို့ လူ့အသိုက်အဝန်းတခု နေသင့်နေ အပ်တဲ့နေရာဒေသ မဟုတ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေဘက်က လက်မခံဘဲ မနေလိုကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ဒုက္ခ သည်တွေ ဘက်က ရှင်းလင်းပါတယ်။
ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန် ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေထဲမှာတော့ IDP တွေ ကို သူတို့ မူလနေထိုင်နေတဲ့နေရာ ဒါမှမဟုတ် တခြားနေရာသစ်ကို ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ သဘော ဆန္ဒအရသာ ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်၊ လုံခြုံမှုရှိရမယ်၊ ဒါ့အပြင် ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ အညီ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ မူလနေထိုင်ရာ ဒေသတွေမှာ ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ဖို့ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလို မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် IDP တွေ ပြောင်းရွှေ့လိုတဲ့ နေရာသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့လည်း အကြံပေး ထားပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-refugees-kyauk-phyu/5452622.html
Covid-19 ကာလ Social distancing စနစ်ဖြင့် ကရင်ပြည်နယ်ရှိ အထက်တန်းအဆင့်(နဝမတန်းနှင့် ဒဿမတန်း) ကျောင်းများ အားလုံးကို ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးထံမှ သိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊အခြေခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင်နှစ် အခြေခံပညာကျောင်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးဆောင် ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးဝင်း က ပြောသည်။ ၎င်းက “Social distancing ပဲ။ ၆ ပေ အကွာအဝေးလေကွာ မင်းတို့ကလည်း၊ (နှာခေါင်းစည်း- mask တွေက တော့) ဌာနကလည်းပေးမယ်။ ကျောင်းတွေကလည်း ပြင်ထားတယ်။ လက်ဆေးခုံကတော့ မင်းတို့လှူမှရမယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ယနေ့ (ဇွန် ၈ ရက်)တွင် ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ကျောင်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားသည့်အခါ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ အနေ ဖြင့် တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး ၆ ပေအကွာနေကာ လူဦးရေအလိုက် အချိန်ခွဲသင်ကြားသွားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဦးစိုးဝင်းက ဆက်ပြော သည်။ ထို့အပြင် အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းအပ်နှံရေး သီတင်းပတ်အဖြစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်း ကရင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးထံမှ သိရသည်။ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်များ ဖွင့်လှစ် သည့် ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်း COVID-19 ရောဂါ ပြန့်ပွားကူးစက်မှု အခြေအနေအရ အလယ်တန်းနှင့်မူလတန်း အဆင့်များကို တစ်ဆင့်ချင်းစီ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ဆက်လက်အကြောင်းကြား သွားမည်ဟုလည်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားထားသည်။ http://kicnews.org/2020/06/socialdistancing%e1%80 %bb%e1%80%96%e1%80%84% e1%80%b9%e1%
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှ စစ်တွေခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသင်္ခါကျော်မှာ ဇွန်လ ၁ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ပါတီဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်စာ တင်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသင်္ခါကျော်က “ဒီလ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကရော၊ ပါတီဝင်အဖြစ်ကပါ နုတ်ထွက်စာတင်လိုက်ပြီ။ နုတ်ထွက်တာကတော့ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ ထွက် လိုက်တာ။ ပါတီ ဗဟိုကိုရော ပြည်နယ်ကိုရော စာပို့လိုက်ပြီ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ NLD ပါတီ စစ်တွေခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသင်္ခါကျော်သည် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် ရွှီပြည်ရခိုင် စာစောင်တွင် စာတည်းမှူးအဖြစ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်းက ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသူလည်း ဖြစ်သည်။
ပါတီက နုတ်မထွက်မီ မေလ ၁၄ ရက်က ၎င်းမှာ ရွှီပြည်ရခိုင်စာစောင် စာတည်းမှူး အဖြစ်မှ အကြောင်းပြချက် တစုံတရာ မရှိ ဘဲ ရပ်စဲခံလိုက်ပြီး ၎င်းနေရာတွင် NLD ပါတီမှ စစ်တွေမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံရွှေကျော်အား အစားထိုးလိုက်ကြောင်းလည်း ပြော ပြသည်။ ဦးသင်္ခါကျော်က “မေလ ၁၄ ရက်က စည်ပင်ဝန်ကြီးရုံးက ဝန်ထမ်းတယောက်က ဖုန်းဆက်တယ်။ ရွှီပြည်ရခိုင် စာတည်း မှူးနေရာကို လူစားလဲမယ်လို့ ဝန်ကြီးက ပြောတယ်လို့ ပြောတယ်။ အသိပေးတယ်ပေါ့။ ဖြုတ်လိုက်တဲ့ သဘောပဲ။ ဦးလေး က ပြောတယ်။ ဝန်ကြီးကို တချက်မေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ သူက ဖုန်းဆက်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကပ်ဘိနက် အစည်း အဝေး ဝင်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီကိစ္စတွေက ဝန်ကြီးချုပ် သဘောမတူဘဲ လုပ်လို့မရဘူး။ ကပ်ဘိနက်မှာ အတည်ပြု လိုက်ပြီးတော့ ဦးလေးလည်း ထပ်မမေးတော့ဘူး”ဟု ဆိုသည်။
NLD ပါတီအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်များတွင် လူထုထောက်ခံမှု ရရှိလာအောင်ကြိုးပမ်းလုပ်ကိုင်နေသော အချိန်တွင် စစ်တွေခရိုင်အတွင်း ပါတီဝင် အချင်းချင်းကြားတွင် သဘောထား ကွဲလွဲမှုတချို့ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းလည်း ပါတီနှင့်နီးစပ်သူ တချို့ထံမှကြားသိရသည်။ NLD ပါတီမှ စစ်တွေခရိုင် အတွင်းရေးမှူး ဦးကောင်းစံလှ သည်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်းက ပါတီတာဝန်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ဦးကောင်းစံလှက “ကျနော်က မိသားစုစားဝတ်နေရေးရှိတယ်။ ပါတီတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ နုတ်ထွက်လိုက်တာ။ အခု ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ထွက် တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်ကလည်း ပါတီကနုတ်ထွက်ထားတဲ့ ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ပါတီကိစ္စကိုတော့ တစုံတရာ မှတ်ချက် မပေးလိုတော့ဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စစ်တွေခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသင်္ခါကျော် ပါတီမှ နုတ်ထွက်သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဧရာဝတီမှ NLD ပါတီမှ ရခိုင်ပြည်နယ် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလေးအား ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ အစည်းအဝေး လုပ်နေသည့်အတွက် အလုပ်မအားကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ သည်။ NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး မုံရွာအောင်ရှင်အား ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါကိစ္စအား ၎င်း အနေဖြင့် မသိရှိသေးကြောင်း တုံ့ပြန် ဖြေကြားသည်။ NLD စစ်တွေခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဦးသင်္ခါကျော် အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စ အပါအဝင် ပါတီတွင်းတချို့သော ပြဿနာတို့ကြောင့် နုတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်ကာ၊ ပါတီ တာဝန် ပြန်လည်ထမ်းဆောင်ရန် ကမ်းလှမ်း ညှိနှိုင်းလာမည်ဆိုလျှင်လည်း မထမ်းဆောင်တော့ရန် ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြစ် ကြောင်းလည်း ပြောဆိုသည်။ ဦးသင်္ခါကျော်သည်၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်တွေမဲ ဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ https://burma.irr awaddy.com/news/202 0/06/08/224246.html
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် positive အတည်ပြုလူနာ မရှိတော့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့တွင် လူနာအမှတ် (၁၁၂)သည် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။“ဒီမနက် (၁၀) နာရီ ကပဲ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရပြီ။ Home Quarantine ၇ ရက် ထပ်နေရမယ်။”ဟု ကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံမှ ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာလှဌေးမင်း ကသျှမ်းသံတော်ဆင့် ကိုပြောသည်။
အတည်ပြု လူနာအမှတ် (၆၄) သည်လည်း ၂ ကြိမ်ဆက်တိုက် negative ဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်တွင်မူ ဆေးရုံ၌ ၁၄ ရက် စောင့် ကြည့်ထားကြောင်း သိရသည်။“ဆေးရုံမှာက Positive လူနာ မရှိတော့ဘူး။ ခုလက်ရှိ ပိုးတွေ့လူနာ တစ်ယောက်ကျန်တယ်။ သူကလည်း Negative ဖြစ်ပြီ။ သူ့ကိုလည်း ၁၄ ရက်စောင့်ကြည့်ပြီး ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရမယ်။”ဟု ဒေါက်တာလှဌေးမင်း ကပြောသည်။
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြု လူနာ ၃ ဦး တွေ့ရှိပြီး ၂ ဦး ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရကာ ကျန်တဦးသည် Negative ဖြစ်ပေမယ့် ဆေးရုံမှ ၁၄ ရက် စောင့်ကြည့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျိုင်းတုံ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ သံသယ လူနာ ၈ ဦး ရှိထားကြောင်း သိရသည်။ သျှမ်းပြည်နယ်တွင် အတည်ပြု လူနာ ၂ ဦး ရှိသည်။ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ အတည်ပြု လူနာတစ်ဦး နှင့် သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ရှိ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံမှာ အတည်ပြု လူနာ တစ်ဦး ရှိသည်။ https://burmese.shanne ws.org/archives/16975
ဇွန် ၁ ရက်နေ့နှင့် ၃ ရက်နေ့တွင် တပ်မတော်မှ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည့် တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ ချက်ဖောက်ကျေးရွာ သား ၅ ဦးမှာ မိသားစုနှင့် အဆက်အသွယ်မရဘဲ ဖြစ်နေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီး ခေါ် ဆောင်ခြင်းခံရသူ ၃ ဦးမှာ ချက်ဖောက်ရွာမှ ဦးကံဇော် (၄၄)နှစ်၊ ဦးနိုင်ချေ (၂၆)နှစ် မောင်နိုင်နိုင်လင်း (၁၈) နှစ်တို့ ဖြစ်ကြ သည်။ နောက်ထပ် နှစ်ဦးကို ဇွန် ၃ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းတို့မှာ ဦးကျော်တင်အောင် (၃၇) နှင့် မောင်ငမိုး (၁၈) နှစ်တို့ ဖြစ်ကြသည်ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက နိရဉ္စရာ သတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
” ဇွန် ၁ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက သုံးဘီးနှစ်စီးနှင့် မအီမြို့ကိုဈေးပြုဖို့သွားကြတာ မိန်းမ၊ ယောက်ျား လူပေါင်း ၃ဝ လောက်ရှိ တယ်။ ဒီရွာကလူတွေက မအီက ဈေးပြုပြီးတော့ စားသောက်နေကြ။ အဲဒီ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်နှစ်စီးကိုဖမ်းတယ်။ ဖမ်းပြီးတော့ ရဲစခန်းကိုခေါ်သွားတယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေကို ညနေပိုင်းမှာလွှတ်ပေးလိုက်ပြီး သူတို့သုံးယောက်ကို ဖမ်းသွားတယ်။ သူတို့က ဦးကံဇော်၊ ဦးနိုင်ချေနဲ့ မောင်နိုင်နိုင်လင်းတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ဇွန် ၃ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင်လည်း တပ်မတော်စစ်ကြောင်း တစ်ကြောင်း ဝင်ရောက်လာပြီး ရွာသား နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု ဆိုသည်။“ ရွာ ထဲကို ဝင်လာတယ်။ အင်အား တစ်ရာကျော်လောက်ပါတယ်။ ရွာသားတွေက ကြောက်လန့်ပြီး ပုန်းနေကြတယ်။ ဦးကျော်တင်အောင် နှင့် ငမိုးကိုတော့ ရွာမှာတွေ့လို့ သူတို့က ဖမ်းယူသွားတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကို ဘယ်ကိုခေါ်သွားမှန်းတော့ မသိဘူး။ တစ်ရက်နေ့က ဖမ်းသွားတဲ့ သုံးယောက်တော့ မအီရဲစခန်းမှာ ရှိတယ်လို့သိရတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထိုသို့ ပထမ ၃ ဦးကို မအီရဲစခန်းတွင် ချုပ်နှောင်ထားသည်ဟု ပြောဆိုသဖြင့် မအီရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ ချက်ဖောက်ကျေးရွာမှ ဖမ်းဆီးထားသူ တစ်ယောက်မှ မရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူ စည်ပင်ဝန်ကြီးလည်းဖြစ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ ဦးဝင်းမြင့်သို့ ဆက် သွယ်ရာ ၎င်းသတင်း သူမရရှိဟု ပြောကြားသည်။ ချက်ဖောက်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ ၄ဝဝ နီပါးရှိပြီး မအီနှင့်ဆိုလျှင် ၃ မိုင်ခန့်ကွာဝေးကြောင်း သိရှိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-73281
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တွင် ယမန်နေ့ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းက WY မူးယစ်ဆေးပြား အလုံးရေ (၄)သောင်း ကျော် နှင့်အတူ တရားခံ ၄ ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း မြဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ယမန်နေ့ နံနက် (၁၀း၃၀) အချိန်ခန့်တွင် မြဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး သက်လင်းဦးနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မြဝတီရှေ့ တန်းရုံးမှ ခြေလျင်တပ်ရင်း (၉၇) တပ်ရင်းမှူး ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ဆန်းဝင်း၊ မူးယစ်တပ်စု(၃၂) မြဝတီမူးယစ်တပ်ဖွဲ့ရုံးမှ ရဲမှူးမင်းအောင်မြင့်ဦးနှင့် ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချနေကြောင်း သတင်းအရ မြဝတီမြို့ အမှတ် ၄ ရပ် ကွက် ဇော်ဂျီ(၂)လမ်းတွင် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် မသင်္ကာဖွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား တွေ့ရှိ၍ ရပ်တန့် စစ် ဆေးခဲ့သည်။ ထိုသို့ စစ်ဆေးရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တန့်ယန်းမြို့၊ နောင်ဖာကျေးရွာနေ စိုင်းရွှေ(၄၅)နှစ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ နမ့်စန်မြို့ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက်နေထိုင်သူ နန်းရှန်နွန်း (၂၇)နှစ်တို့ကို စစ်ဆေးရှာဖွေရာတွင် စိုင်းရွှေ ၏လက်၌ ကိုင်ဆောင် ထားသော ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အမဲရောင်ဖြင့် ထုပ်ထားပြီး တိပ်အဝါ ရောင်ပတ်ထားသော အထုပ်(၄)ထုပ် အတွင်းမှ WY စာတမ်းပါ မူးယစ်ဆေးပြားအလုံးရေ (၄) သောင်းအား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းခဲ့သည်ဟု မြဝတီရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
ထိုသိမ်းဆည်းရမိသော မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုင်းရွှေအား စစ်ဆေးရာ အဆိုပါဆေးပြားများမှာ မြဝတီမြို့ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက် အလိုတော်ပြည့် (၂) လမ်းသွယ်နေ ဦးဖေသန်းအောင်ဆိုသူထံမှ ရရှိသော ပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသဖြင့် အဆိုပါ ပူးပေါင်းအဖွဲ့မှ ဦးဖေသန်းအောင်၏ နေအိမ်သို့ သွားရောက် ရှာဖွေခဲ့ သည်။ ထိုသို့ရှာဖွေစဉ် နေအိမ် တွင် ဦးဖေသန်းအောင်နှင့်အတူ မြဝတီမြို့ အမှတ် (၃) ရပ်ကွက်နေသူ အောင်နိုင်စိုး (၃၀) နှစ်အား တွေ့ရှိပြီး နေအိမ်တွင်း ဆက်လက်ရှာဖွေရာ မူးယစ်ဆေးဝါး တစ်စုံတစ်ရာ မတွေ့ရသော်လည်း နေအိမ်မီး ဖိုချောင်အခန်းတွင်းမှ မူးယစ်ဆေးဝါး ထုပ်ပိုးရာတွင် အသုံးပြုသည့် မှိုင်းခံ စက္ကူနှင့်ဂျပ်ဖာတို့အား လည်းကောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်း ရငွေဟုယူဆရသော မြန်မာငွေ ၆ သိန်းကျပ်နှင့် အောင်နိုင်စိုး ဝတ်ဆင်ထားသော အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ ယာဘက်အိတ်ကပ်အတွင်းမှ WY စာတမ်းပါ မူးယစ်ဆေးဝါး ၂ ပြား၊ မြန်မာငွေ ၂ သိန်းကျပ်အား တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၎င်းအပြင် နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းရှိ 9K/9797 နံပါတ်ပါ Nissan Navara အနက်ရောင် မော်တော်ယာဉ် (၁)စီးနှင့် Moccona Wave. 125 i နီ/မဲရောင် ဆိုင်ကယ် (၁)စီးအား တွေ့ရှိပြီး သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း မြဝတီမြို့မ ရဲစခန်းထံမှ သိရသည်။ မူးယစ် ဆေးဝါး အမြောက်အများ လက်ဝယ်တွေ့ရှိသူ စိုင်းရွှေ (၄၅) နှစ်၊ နန်းရှန်နွန်း(၂၇)နှစ် နှင့် ကွင်းဆက်တရားခံများဖြစ်သော ဦးဖေသန်းအောင် (၅၂)နှစ်နှင့် အောင်နိုင်စိုး (၃၀)နှစ် တို့အား ဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စီစဉ်နေကြောင်း မြဝတီ မြို့မရဲစခန်းထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/ 2020/06/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e%80%9 0%e1%80%ae%e1%
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ တုန်ခမ်ရွာအဆင်း နမ့်ခွမ်ရွာအဝင် ရေကွေ့ မူဆယ်- ၁၀၅ မိုင် ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ် ၌ ယနေ့ (ဇွန် ၇ ရက်) ညနေ ၄ နာရီအချိန်ခန့်က ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ တစ်ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ မူဆယ်မြို့ တုန်ခမ်အဆင်း နမ့်ခွန်ရွာအဝင် ရေကွေ့တွင် ၁၅ မိုင်ဘက်မှ မူဆယ်မြို ဝင်ရောက်ရန် တန်းစီစောင့် ဆိုင်းနေသော ကုန်တင်ယာဉ် အမှတ် MDY 1F/ – – – – – FUSO ခဲရောင် ၁၂ ဘီးယာဉ်ကားအား ၁၀၅ မိုင်ဘက်မှ မူဆယ်ဘက်သို့ မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်အမှတ် YGN 2I/- – – – WASH အ‌ဖြူရောင်သည် ကုန်တင်ယာဉ် နောက်ဘက်ရှိ ယာဉ်အကူကို ဝင်တိုက်ကာ ကုန်တင်ယာဉ်အနောက်ဘက် အောက်ထဲသို့ ဝင်တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါယာဉ်တိုက် မှုကြောင့် WASH ကားအဖြူရောင်မှာ ခေါင်းခန်းနှင့် အလယ်ခန်း ပျက်စီးခဲ့ပြီး ၎င်းယာဉ်ကို မောင်းနှင်လာသော ယာဉ်မောင်း ချစ်မြိုင်မှာ အဆိုပါနေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သော ကုန်တင်ယာဉ်အကူနှင့် ‌သေဆုံးသူတို့ကို နှလုံးလှ လူမှု့ကူညီရေးအသင်း ကားဖြင့် မူဆယ်ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်စဉ်သို့ အမှတ် ၁၂၅ ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့စုမှ လာ ရောက် စစ်ဆေးချက်အရ WASH ကားမောင်သူ ချစ်မြိုင်အား ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၇၉/၃၃၈/၃၀၄(က) တို့ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူရန် ဆောင်ရွတ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ https://news-eleven.com/article/177345
၂၅။ COVID-19 ကြောင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ကုန်းသာကျေးရွာ စိုက်ခင်းများရှိ ဂေါ်ဖီထုပ်များ ဈေးကွက်ပျက်သဖြင့် တောင်သူများ မနစ်နာစေရန် အလှူရှင်တစ်ဦးက ဝယ်ယူပေး
COVID-19 ကြောင့် ဈေးကွက်ပျက်သဖြင့် တောင်သူများမနစ်နာစေရန် အလှူရှင်တစ်ဦးကဝယ်ယူ၍ ဇွန် ၇ ရက်က ပရဟိတ အဖွဲ့များ အကူအညီဖြင့် လိုအပ်သည့်နေရာများသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“ ဒေသကထွက်တဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်ကို ၂၄ နှစ် ရှိသွားပြီ ဝယ်ရောင်းတယ်။ အခုက ဝယ်ရောင်းတော့ COVID-19 က သူရှိတော့ ဈေးကွက်က ဒီလိုမျိုးပျက်ပြားသွားတော့ တောင်သူလည်း အခက်အခဲရှိသ လို ဝယ်ရောင်းသူမှာလည်း အခက်အခဲရှိတယ်။ ကျွန်မကတောင် သူလုံးဝမနစ်နာအောင်လို့ ဝယ်ပြီးတော့မှ ဈေးချိုချိုနဲ့ ရောင်းပေးတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မအရင်းကို ရအောင်ပြန်ရောင်းတယ်။ ပြန်ရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ အမြတ်ကို ကယားပြည်နယ်မိုး ခေါင်ရေရှားအရပ်ပေါ့နော်။ ရေမရှိတဲ့ဒေသ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ လူမျိုးဘာသာမရွေး လှူ ပေးပါလို့ ပြောတယ်” ဟု အလှူရှင်ဖြစ်သူ နန်းလှဦးက ပြောကြားသည်။
ယခင်က လွိုင်ကော်၊ ဒီးမော့ဆို၊ ဖရူဆိုမြို့များ၌ ဂေါ်ဖီဈေးကွက်ရှိခဲ့ပြီး အဆင်ပြေသည့်အပြင် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဖယ်ခုံနှင့် မိုးဗြဲဘက်မှ ဂေါ်ဖီလိုအပ်ပါက ရောင်းချပေးခဲ့ရသော်လည်း ယခုအခါ ဈေးကွက်ပျက်သွားကြောင်း သိရသည်။ ဂေါ်ဖီထုပ်များ ကို ဖေးကူလက်များ ပရ ဟိတအသင်း၊ ငွေတောင်ပြည်လူမှုကူညီရေးအသင်း၊ လင်းမေတ္တာပရဟိတအသင်းတို့က စိုက်ခင်း အထိ သွားရောက်ခူးယူကြပြီး လိုအပ်သည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ မိဘမဲ့ကျောင်းများ၊ ဂိတ်တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား သွားရောက်၍ ပို့ဆောင်ပေးကြောင်း သိရသည်။
“ သူတို့က ဆက်သွယ်လာတာပေါ့နော်။ ကျွန်မတို့ကပြောတယ် မရောင်းဘူးလားပေါ့။ ကျွန်မတို့ ကူရောင်းပေးရမလဲ ဘယ် လောက်နဲ့ ရောင်းပေးရမလဲပေါ့။ မဟုတ်ဘူးတဲ့ သူတို့ အပြတ်လှူမယ်တဲ့။ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်က မရောင်းဘူး လှူမယ်ဆို လို့ လာပြီးတော့ သယ်ပြီးမှ လိုက်လှူပေးမှာရှင်”ဟု ဖေးကူလက်များ ပရဟိတအသင်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ မအိက ပြောကြားသည်။ ကယားပြည်နယ်တွင် လွိုင်ကော်မြို့နယ် လင်ဖုံလေးကျေးရွာနှင့် ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ် ကုန်းသာကျေးရွာတို့မှာ ရေကြောရှိသည့် နေရာဖြစ်သဖြင့် ဆယ့်နှစ်ရာသီပတ်လုံး ရေရရှိသဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စိုက်ပျိုး၍ အသက်မွေးကြ ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article /177394
၁။ မူဆယျမွို့အနီး တပျမတျောနှငျ့ ကအေိုငျအတေို့ တိုကျပှဲနှဈကွိမျဖွဈ
၂။ မိုငျးတငျးအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူး ကွီးကွပျရှေးခယျြရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ သနေတျပဈသတျခံရ
၃။ တပျမတျောရယောဉျပျေါ နှိပျစကျခံခဲ့ရသူ ၅ ဦး၏ အမှုတှငျ တရားခံပွေး ၇ ဦး ပါဝငျနေ
၄။ တပျမှ မွသေိမျးပွီး တရားပွနျစှဲထားသညျ့အမှုကို ဆီဆိုငျတောငျသူမြား ရငျဆိုငျမညျ
၅။ မူးယဈဆေးအမှုမြားတှငျ ဒဏျငှေ လာရောကျညှိနှိုငျးသျောလညျး ဥပဒအေတိုငျးသာ ဆောငျရှကျဟု KNU ပွော
၆။ နမျ့စနျတှငျ တပျမတျောက စဈမှုထမျး ဟောငျးအိမျရာဆောကျရနျ မွသေိမျးမှု မူလပိုငျရှငျ ၉၃ ဦး ဝိုငျးဝနျးကနျ့ကှကျ
၇။ မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးမှုကွောငျ့ ဖားကနျ့တှငျ ဈေးဆိုငျတနျး၊ ဘကျဖိုးနှဈစီးနှငျ့ ကားတဈစီး ရစေီးကွောငျးနှငျ့ မြှောပါ ပွီး လူ အသအေပြောကျ ရှိနိုငျ
၈။ သိန်နီ တံတားစောငျ့ တပျသား သနေတျပဈခတျမှုကွောငျ့ နအေိမျ ၂ လုံးထိ
၉။ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျနှငျ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရနျ ကခငျြအမြိုးသားကှနျဂရကျပါတီ တောငျးဆို
၁၀။ တိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျ ၃ ဖှဲ့အတှကျ စားနပျရိက်ခာ ထောကျပံ့ပေးအပျ
၁၁။ ကြောကျဖွူဒသေခံ သားအဖနှဈဦးကို AA ဖမျးဆီး ချေါဆောငျသှားတယျလို့ မိသားစုပွောကွား
၁၂။ စဈဘေးရှောငျကြောငျးသူ/သားမြားအတှကျဆမီးမွို့တှငျ ကြောငျးဆောငျသဈ ၂ လုံး စတငျဆောကျလုပျ
၁၃။ ထိတှမှေု့မြားကို အတတျနိုငျဆုံး ရှောငျရှားရနျ တပျတှငျး ညှနျကွားခကျြထုတျထားဟု KNLA စဈဦးစီးခြုပျပွော
၁၄။ မှနျညီညှတျရေးပါတီ ကိုယျစားလောငျးအဖွဈ ပါဝငျယှဉျပွိုငျလိုသူမြား သကျဆိုငျရာမွို့နယျပါတီရုံးသို့ စာရငျးပေးသှငျး ရမညျ
၁၅။ ဖမျးဆီးစဈဆေး ပွနျလှတျပေးပွီးနောကျ ၃ ရကျအကွာ ဒျေါစိနျမွဦးသဆေုံးမှု AA နှငျ့မသကျဆိုငျဟု ထုတျပွနျမှု တာဝနျမဲ့ဟု ခငျြးအမြိုးသမီးကှနျရကျ ဝဖေနျ
၁၆။ ကှိုငျငံရထှေကျပေါကျ ခြောငျးနံရံတှေ မွပွေိုမှုဖွဈပှား
၁၇။ မယုံကွညျမှုနှငျ့ မသိရှိမှုတို့ကွောငျ့ မူးယဈအထူးတိုငျကွားရေးဌာနသို့ မှနျပွညျနယျမှ ပွညျသူမြား သတငျးပေး တိုငျကွားခွငျးမရှိ
၁၈။ ကြောကျဖွူမွို့ပျေါက မူရငျးနရောတှေ ပွနျပေးဖို့ ဒုက်ခသညျတှေ တောငျးဆို
၁၉။ Social distancing ဖွငျ့ ကရငျပွညျနယျရှိကြောငျးမြား ဇူလိုငျလတှငျ ဖှငျ့လှဈသှားမညျ
၂၀။ NLD စဈတှခေရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌဌ ပါတီမှ နုတျထှကျ
၂၁။ ကြိုငျးတုံ ကိုဗဈ Positive လူနာအားလုံး ဆေးရုံဆငျးခှငျ့ရ
၂၂။ ဖမျးဆီးချေါဆောငျခံရသညျ့ တောငျကုတျ ခကျြဖောကျရှာသား ၅ ဦး မိသားစုနှငျ့ အဆကျအသှယျမရသေးဟုဆို
၂၃။ မွဝတီမွို့တှငျ WY မူးယဈဆေးပွား အလုံးရေ ၄ သောငျးကြျော ဖမျးဆီးရမိ
၂၄။ မူဆယျ-၁၀၅ မိုငျ ပွညျထောငျစုလမျးမပျေါတှငျ ယာဉျတိုကျမှု ဖွဈပှားခဲ့ပွီး တဈဦးသဆေုံးကာ တဈဦးဒဏျရာရ
၂၅။ COVID-19 ကွောငျ့ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ ကုနျးသာကြေးရှာ စိုကျခငျးမြားရှိ ဂျေါဖီထုပျမြား ဈေးကှကျပကျြသဖွငျ့ တောငျသူမြား မနဈနာစရေနျ အလှူရှငျတဈဦးက ဝယျယူပေး
တပျမတျောနဲ့ ကအေိုငျအေ တပျဖှဲ့တို့ ဇှနျ ၇ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးနဲ့ နလေ့ယျပိုငျးမှာ ရှမျးပွညျနယျ မူဆယျမွို့အရှဘေ့ကျနဲ့ နမျ့ဖကျကာအရှမွေ့ောကျဘကျ မီတာ ၁၄၀ဝ အကှာမှာတိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။ မနကျပိုငျး ဖွဈခဲ့တဲ့တိုကျပှဲမှာ ကအေိုငျအေ ဘကျက အငျအား ၁၅ ယောကျဝနျးကငျြသာရှိပွီး နလေ့ယျပိုငျး နောကျတကွိမျထပျဖွဈတဲ့ တိုကျပှဲမှာတော့ အငျအား ၆၀ နီး ပါး ရှိတယျလို့ တပျမတျောသတငျးမှနျပွနျကွားရေးအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောပါတယျ။
မိုငျးထောငျ မိုငျးခှဲတာတှေ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ TNLA အဖှဲ့ကို နယျမွရှေငျးလငျးရေးဆောငျရှကျနတေဲ့ တပျမတျော လုံခွုံရေးအဖှဲ့နဲ့ ကအေိုငျအတေို့ ထိတှတေို့ကျပှဲဖွဈခဲ့တာပါ။ အဲဒီတိုကျပှဲတှအေတှငျးမှာ တပျမတျောဘကျက ထိခိုကျတာတှရှေိခဲ့ပွီး ကအေိုငျအေ ဘကျက လကျနကျခဲယမျးတခြို့လညျး သိမျးဆညျးရမိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အခုဖွဈစဉျနဲ့ပတျသတျပွီး ကအေိုငျအဘေကျက ဗိုလျမှူးကွီးနျောဘူက ကအေိုငျအေ ထိနျးခြုပျနယျမွထေဲကို တပျမတျော ဘကျကတိုးဝငျလာတဲ့အတှကျ ခုခံတိုကျပှဲဖွဈပှားခဲ့တာဖွဈပွီး သူတို့ဘကျကထိခိုကျမှုမရှိဘူးလို့ပွောဆိုပါတယျ။ ကအေိုငျအေ နဲ့ တပျမတျော ပွညျနယျအဆငျ့ သဘောတူညီမှုတှေ ရယူပွီးခဲ့ပွီးတဲ့ အခြိနျကတညျးက ဆှေးနှေးပွီးဖွဈတာကွောငျ့ အဲဒီနယျ မွကေ သူတို့နယျမွေ ဟုတျ၊ မဟုတျ ကအေိုငျအသော အသိဆုံးဖွဈတယျလို့ ဗိုလျမှူးခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ပွောပါတယျ။
လကျရှိကပျဘေးကာလအတှငျးမှာ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး (ကွညျး) တှဲဖကျစဈရေးခြုပျ ဗိုလျခြုပျခှနျသနျ့ဇျောထူးနဲ့အဖှဲ့ဟာ မေ ၂၀ ရကျနကေ့ လိုငျဇာအနီး မိုငျဆာပါဒသေကို သှားရောကျပွီး ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေးပစ်စညျးတှကေို သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ပွီး ကအေိုငျအို/ ကအေိုငျအေ ဒုတိယ ဥက်ကဋ်ဌ ဗိုလျခြုပျ ဂှမျမျောက လကျခံရယူခဲ့ပါတယျ။ http://burm ese.dvb.no/a rchives/392931
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ မိုငျးတငျးအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူး ကွီးကွပျရှေးခယျြရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဌ ဦးကောရှဝေငျး သညျ ( ဇှနျ ၆) မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ သနေတျပဈ သတျခံရကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
(ဇှနျ ၆ ရကျ) မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ မိုငျးတငျးအုပျစု အုပျခြုပျရေးမှူး ကွီးကွပျရှေးခယျြရေးအဖှဲ့ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးကောရှဝေငျး အသကျ ၅၀ နှဈ သညျ မနျစနျးရှာရှိ တောငျယာတှငျ အလုပျလုပျနခြေိနျ အမညျမသိ လကျနကျကိုငျ အဖှဲ့မှ သနေတျဖွငျ့ လာရောကျ ပဈသတျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။“သနေတျပဈတဲ့ ဒဏျရာကတော့ ၆ ခကျြပါ။ တောငျယာ အလုပျလုပျနရေငျ သနေတျပဈခံရ တာပါ။ ဘယျအဖှဲ့ ကလာပဈတယျဆိုတာ စုံစမျးဆဲပါ”ဟု ကြောကျမဲမွို့မ ရဲစခနျးမှ တာဝနျရှိသူတဦးက သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ ပွောသညျ။ သနေတျပဈခံရပွီး သဆေုံးသှားသညျ့ ဦးကောရှဝေငျးသညျ နောကျစေ့ ဖောကျဝငျဒဏျရာ ၂ ခကျြ၊ ကြော လယျ ဖောကျဝငျဒဏျရာ ၁ ခကျြ၊ ကြောယာဘကျ ဖောကျဝငျဒဏျရာ ၁ ခကျြ၊ ခါးဆဈယာဘကျ ဖောကျဝငျဒဏျရာ ၁ ခကျြ နှငျ့ မကျြနှာပှငျ့ထှကျ ဒဏျရာ၊ရငျညှနျ့ဖောကျထှကျ ဒဏျရာတခကျြတို့ဖွဈကွောငျး ၎င်းငျး ရဲအရာရှိက ပွောသညျ။
အဆိုပါ တောငျယာတှငျ ဦးကောရှဝေငျး နှငျ့ ဇနီး ဖွဈသူ ဒျေါနနျးခမျးအေး တို့သညျ အတူတူ နလေ့ညျစာစားပွီး၊ အလုပျ ပွနျ လုပျရနျ သဆေုံးသူ ဦးကောရှဝေငျး တောငျယာသို့ သှားနစေဉျ သနေတျပဈခံရခွငျးဖွဈကွာငျး၊ မညျသညျ့အဖှဲ့က လာရောကျ ပဈ ခတျသညျကို မတှရေ့ကွောငျး ရဲမှတျတမျးအရ သိရသညျ။ ဦးကောရှဝေငျး သဆေုံးမှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး တရားခံကို စုံစမျးနဆေဲဖွဈပွီး၊ (ပ) ၅၅/၂၀၂၀ ရာဇာသတျကွီး ဥပဒေ ပုဒျမ ၃၀၂ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူထားကွောငျးသိရသညျ။ https://burmese.shann ews.org/archives/16982
တပျမတျောရယောဉျပျေါ၌နှိပျစကျခံရပွီး အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးဥပဒဖွေငျ့ တရားစှဲဆိုခံနရေသူ ၅ ဦး၏ အမှုတှဲတှငျ တရားခံပွေး ၇ ဦးပါဝငျနသေညျ။ အဆိုပါအမှုအား ဇှနျလ ၅ ရကျနကေ့ ရုံးထုတျတှငျ တရားခံပွေးအမှုအတှကျ စဈဆေးမညျ့ မှငျနီသကျသေ မရောကျရှိခဲ့သဖွငျ့ ကွားနာစဈဆေးခွငျးမရှိခဲ့ပေ။“ဝရမျးစာမဝငျသေး၊ ဝရမျးစာဝငျလို့ အတညျပွုပွီးမှ အခု ဖမျးဆီးထားတဲ့ တရားခံ ၅ ဦးအမှုကို ဆကျလကျ ကွားနာစဈဆေးမှာ”ဟု အကွမျးဖကျမှုနှငျ့တရားစှဲဆိုခံရသူ ၅ ဦး အမှု အတှကျ လိုကျပါဆောငျရှကျနသေညျ့ တရားလှတျတျောရှနေ့ေ ဦးကြျောညှနျမောငျက ရှငျးပွသညျ။
လကျရှိဖမျးဆီးခံထားရသူမြားမှာ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ၊ ကြောကျဆိပျကြေးရှာမှ ကိုညီညီအောငျ (၂၄)နှဈ ၊ ကိုအောငျမြိုးလငျး (၂၄)နှဈ၊ ကိုမောငျခြေ (၂၄)နှဈ၊ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ပျေါမှ ကိုမငျးစိုး (၃၈)နှဈ နှငျ့ မွောကျဦးမွို့နယျ၊ ဇီးပငျကွီးကြေးရှာမှ ကိုကြျောဝငျးဟိနျး (၂၂)နှဈတို့ ဖွဈကွသညျ။ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ၊ ကြောကျဆိပျကြေးရှာသား (၃၈)ဦးကို ဧပွီလ ၁၉ ရကျနေ့ တှငျ တပျမတျောက ဖမျးဆီး စဈဆေးခဲ့ပွီးနောကျ (၃၃)ဦးကို ပွနျလှတျပေးခဲ့ကာ လကျရှိအကွမျးဖကျမှုနှငျ့ တရားရငျဆိုငျနေ ရသူ ၅ ဦးကိုဆကျလကျခြုပျနှောငျထားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးတို့ ၅ ဦးကို ဖမျးဆီးခြုပျနှောငျထားစဉျကာလအတှငျး တပျမတျော သားမြားမှ ရယောဉျပျေါတှငျ ထိုးကွိတျ၊ ကနျကြောကျနှိပျစကျမေးမွနျးနသေညျ့ ဗီဒီယိုဖိုငျသညျ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာ ပျေါ ပြံ့နှံ့လာခဲ့သညျ။
“အဒျေါသားလေးက မိသားစုကိုလုပျကြှေးနတောပါ။ အဒျေါတို့က ဆငျးရဲတယျ၊ အဲဒီသားလေးကို အားကိုးပွီးနေ နရေတာ။ ဘာမှလညျးအပွဈမရှိဘူး။ မိုးလငျးရငျ အလုပျသှား၊ ညနဆေိုရငျ နဝေငျမှပွနျလာရတယျ”ဟု တရားရငျဆိုငျနရေသူ ကိုညီညီအောငျ၏ မိခငျ ဒျေါနီနီအေးက ပွောသညျ။ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒပေုဒျနှငျ့ တရားစှဲဆိုခံထားရသူ ၅ ဦး ကို လာမညျ့ ဇှနျလ ၁၉ ရကျနတှေ့ငျ ထပျမံရုံးခြိနျးလိုကျကွောငျးသိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-732
သြှမျးပွညျ တောငျပိုငျး ပအိုဝျးကိုယျပိုငျ အုပျခြုပျရ ဒသေ ဆီဆိုငျမွို့နယျ မွယောသိမျးဆညျးမှု နှငျ့ ပတျသကျပွီး တပျမှ အမှု ရုပျသိမျးပေးခွငျးမရှိသဖွငျ့ မွပေိုငျရှငျမြားမှ တရားရငျဆိုငျရမညျဖွဈကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
ဇှနျလ ၄ ရကျက ဆီဆိုငျမွို့နယျ အစိုးရတပျမတျောနှငျ့တောငျသူမြား မွယောအငွငျးပှားမှု ပွဿနာနှငျ့ပတျသကျပွီး အထှေ ထှအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန ရုံးအစညျးအဝေးခနျးမတှငျ တှဆေုံ့ညှိနှိုငျးခဲ့သျောလညျး ထူးခွားသညျ့ရလဒျတစုံတရာမ ထှကျပျေါ လာကွောငျး လယျယာသိမျးဆညျးခံရသညျ့ တောငျသူမြားကပွောသညျ။ ထိုတှဆေုံ့ဆှေးနှေးမှုတှငျ အရှတေို့ငျးစဈဌာနခြုပျ မှ တာဝနျရှိသူ နှငျ့ ပအိုဝျး ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျခှငျ့ရဒသေမှ တာဝနျရှိသူမြား သိမျးဆညျးခံ တောငျသူမြားတကျ ရောကျခဲ့သညျ။“လကျရှိ အခွနေတေော့ ထူးခွားပွောငျးသှားတာမရှိသေးဘူး။ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲကအဖွမေပျေါရလဒျ တဈစုံတဈရာမရပဲနဲ့ ပွီးဆုံးသှားတာပဲလို့ ပွောလို့ရပါတယျ”ဟု ဆီဆိုငျမွို့ အောငျခမျြးသာရပျကှကျ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးစံဝငျးမောငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
နှဈဖကျ တှဆေုံ့ပှဲမှာ တောငျသူမြားဘကျမှ မွယောမွမြေား ဆကျလကျစိုကျပြိုးခှငျ့ပွုရနျ၊တောငျသူ (၇၀)ကြျော တရားစှဲဆို ထားမှုအပျေါ အမှု ရုပျသိမျးပေးရနျ၊ တပျမှ ပိတျဆို့ထားသညျ့ လမျးမြားကို ပွနျဖှငျ့ပေးရနျ နှငျ့ တပျမှ သိမျးဆညျးထားသညျ့ ထှနျစကျ ၂၉ စီး ကိုလညျ ပိုငျရှငျမြားလကျသို့ ပွနျလညျအပျနှံပေးရနျ တောငျးဆိုကွကွောငျး ဦးစံဝငျးမောငျက ပွောပွသညျ။ အရှတေို့ငျး စဈဌာနခြုပျမှ တောငျသူ ၇၀ ကြျောကို ပုဒျမ ၄၄၇ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားပွီး ထိုအမှုကိုရုပျသိမျးပေးခွငျးမရှိသေးသညျ့ အတှကျ ဆကျလကျ ရငျဆိုငျသှားရမညျဟု ဦးစံဝငျးမောငျ က ထပျလောငျးပွောသညျ။ ထို့ပွငျ ဆီဆိုငျမွို့နယျအတှငျး ခွမွေနျ တပျရငျ ခမရ ၄၂၃/ ၄၂၄ တပျရငျးမြားမှ ဒသေခံ တောငျသူမြားထံ စိုကျပြိုးမွေ၊ မွယော အဓမ်မသိမျးဆညျးခွငျး၊ လယျသမားမြား စိုကျပြိုးထားသညျ့ အပငျဖကျြဆီးခွငျး၊ တောငျသူမြားအား တရားစှဲဆိုခွငျး၊ ခွိမျးခွောကျခွငျးမြား၊ ထှနျစကျ မြား သိမျးယူခွငျး၊ တပျသိမျးမွစောရငျးမြား ပှငျ့လငျးစှာခပြွမှုမရှိသညျ့အပျေါ ပအိုဝျး အရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ မိတျဖကျအရပျဖကျ လူမှု အဖှဲ့အစညျး ၁၉၄ ဖှဲ့က ဇှနျ ၃ ရကျက သဘောထားထုတျပွနျခဲ့သညျ။
မွယောမွေ အငွငျးပှားမှု ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး တစုံတရာထူးခွားမှုမရှိပါက ဒုတိယ သမ်မတ ထံစာတငျတောငျဆို သှားမညျဖွဈ ပွီး၊ T-Shirt Campaign ပွုလုပျရနျနှငျ့ တောငျသူမြားကို ပွနျစုကာ ထှနျယကျစိုကျပြိုးမှုမြားလညျး ပွုလုပျသှားမညျဟု ခှနျဦး က ပွောသညျ။ ထို့အပွငျ မွယောမြားသိမျးယူထားသညျ့ သကျဆိုငျရာ တပျရငျးဌာနမြားအနဖွေငျ့ မွသေိမျးခွငျးလြျောကွေး နဈနာကွေးပေးခွငျး၊ အကောငျအထညျဖျောထားခွငျးမရှိသညျ့ မွနေရောမြားအား ဥပဒအေညီ မူလလုပျပိုငျခှငျ့ရ တောငျသူ မြားအားပွနျလညျ စှနျ့လှတျပေးခွငျးစသညျ့ တညျဆဲမွယောဥပဒမြေားပါ ပွဋ်ဌာနျးခကျြမြားကို လေးစားလိုကျနာပေးရနျ လူမှု အဖှဲ့အစညျးမြားက တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/169 95
မှနျပွညျနယျ ရေးမွို့နယျတှငျ မူးယဈဆေးဝါးအမှုဖွငျ့ ဖမျးဆီးထားသူမြားကို ငှကွေေးတောငျးခံမှုရှိသညျဟု ပွောဆိုသညျ့ အပျေါ ငှဒေဏျဖွငျ့ ဆုံးဖွတျဆောငျရှကျပေးရနျ လာရောကျညှိနှိုငျးမှုသာရှိပွီး မိမိတို့အနဖွေငျ့ KNU ခမြှတျထားသညျ့ ဥပဒေ အတိုငျးသာ ဆောငျရှကျနသေညျဟု ဝငျးရေးမွို့နယျ တာဝနျရှိသူမှ ဇှနျလ ၃ ရကျနကေ့ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
မလေ ၂၈ ရကျနကေ့ မှနျပွညျနယျ၊ ရေးမွို့နယျရှိ ငါးကလေးခြောငျးအနီး မှနျလူငယျ ၄ ဦးကို KNU က ဖမျးဆီးချေါဆောငျ သှားပွီး မူးယဈဆေးဝါးမှုဖွငျ့ ငှကေပျြသိနျး ၂ဝ တောငျးဆိုခဲ့သညျဟု Mon Human Rights မှနျလူ့အခှငျ့အရေးအဖှဲ့၏ လူမှု ကှနျရကျစာမကျြနှာတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ ထိုသို့ ဖမျးဆီးခံထားရသူမြားကို ပွနျလှတျပေးရနျ ငှကွေေးအရ လာရောကျ ညှိနှိုငျးမှုသာရှိပွီး မိမိတို့အနဖွေငျ့ လူမှုရေးပွဈဒဏျအနဖွေငျ့ ထိနျးသိမျးထားမှုသာရှိကွောငျး KNU ဒူးပလာယာခရိုငျရှိ ဝငျးရေးမွို့နယျ တာဝနျရှိသူမြားထံ ကအေိုငျစီက ဆကျသှယျရာတှငျ ယခုကဲ့သို့ ပွနျလညျရှငျးပွခဲ့သညျ။
“ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလ ၁၄ ရကျနကေ့ ရေးမွို့နယျ ငါးကလေးခြောငျး ရာဘာတောထဲမှာ လူ ၄ ဦးထံကနေ လကျလုပျသနေတျ တဈလကျနဲ့ မွငျးဆေး ၁ဝ လုံး ဖမျးမိတာပါ။ မှနျပွညျသဈပါတီ ဒသေတာဝနျရှိတဈဦးက ထောငျမခနြဲ့ ငှဒေဏျသာ ဆောငျ ရှကျပေးဖို့ တောငျးဆိုတာရှိတယျ။ မိသားစုဘကျကရော အခွားမှနျလူငယျအဖှဲ့တှရေော လာရောကျညှိနှိုငျးတာရှိတယျ။ မသိ ရငျ ကနြျောတို့ လုပျ စားသလို ဖွဈနတေယျ။ ကနြျောတို့အနနေဲ့က လူမှုရေးပွဈဒဏျအနနေဲ့ပဲ ထိနျးသိမျးထားတယျ။”ဟု KNU ဝငျးရေးမွို့နယျ အတှငျး ရေးမှူး ပဒိုစောအယျဒါးက ပွောသညျ။ လိပျပုရှာသား ၃ ဦးနှငျ့ စုံနံ့သာရှာသား ၁ ဦးကို မူးယဈ ဆေးမှုဖွငျ့ ဝနျခံကတိလကျမှတျထိုးထားပွီး လူမှုရေးပွဈဒဏျအရ ၃ လစီ ထိနျးသိမျးထားရှိကာ အခွားတဈဦးအား ကနျြးမာ ရေး အခွအေနကွေောငျ့ ဆေးကုခှငျ့အနဖွေငျ့ နအေိမျပွနျခှငျ့ပွုထားသညျဟု KNU တာဝနျရှိသူမြားက ပွောဆိုသညျ။
KNU အနဖွေငျ့ မူးယဈဆေးဝါးမှုမြား ဖမျးဆီးအရေးယူရာတှငျ ပွဌာနျးဥပဒအေရ ဆောငျရှကျမှုအားနညျးနလြှေကျရှိပွီး လူမှု ရေး ပွဈဒဏျမြားဖွငျ့သာ ဆုံးဖွတျဆောငျရှကျသညျ့အပျေါ ရရှေညျတှငျ လူထုအထငျအမွငျ လှဲမှားသှားနိုငျပွီး ကြူးလှနျသူ မညျ သူမဆို ကျောသူးလေ ၁/၂ဝ၁၄ မူးယဈအထူး အကျဥပဒအေရ ထိထိရောကျရောကျ ကိုငျတှယျဖွေ ရှငျးရနျလိုသညျဟု KNU ဝငျးရေးမွို့နယျ ကြေးရှာတာဝနျရှိသူမြား၏ ပွောပွခကျြအရ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80 %99%e1% 80%b0%e1%80%b8%e1%80%9a%e1%80%85%e1%
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး လှိုငျလငျခရိုငျ နမျ့စနျမွို့နယျ ဝမျပုံကြေးရှာအုပျစု နောငျခါးကြေးရှာရှိ တောငျသူ ၉၃ ဦးပိုငျ မွဧေက ၁၆၇ ကို တပျမတျောက စဈမှုထမျးဟောငျး အိမျရာဆောကျလုပျရနျ မလေ ၂၅ ရကျနကေ့ မွစောရငျးရုံးသို့ စာတငျပွရာတှငျ မွပေိုငျဆိုငျသောတောငျးသူမြားက ဝိုငျးဝနျးကနျ့ကှကျထားကွောငျး လယျမွသေိမျးခံရသူ ဦးစိုငျးဟိတျ ကပွောဆိုသညျ။
အဆိုပါ မွနေရောကို တပျမတျော အမှတျ (၂) စဈဆငျရေးနှငျ့ ကှပျကဲရေးဌာနခြုပျက ၁၉၉၈ ခုနှဈတှငျ သိမျးဆညျးခဲ့ခွငျးဖွဈ ပွီး နှဈပေါငျးမြားစှာ အဆိုပါမွမြေား၌ မညျသညျ့လုပျငနျးမှ ဆောငျရှကျခွငျးမရှိဘဲ ပွီးခဲ့သညျ့ မလေအတှငျးမှ ထိုသို့ စဈမှု ထမျးဟောငျး အိမျယာဆောကျရနျအတှကျ အရှလေ့ယျပိုငျးတိုငျး စဈဌာနခြုပျက တငျပွတောငျးဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။“ သူတို့ သိမျးထားတာလညျး နှဈ၂၀ ရှိပွီလေ။ ၂၀ တောငျကြျောနပွေီ ကြှနျတျော ဒီဒသေကြေးရှာတှေ အရပျဖကျအထောကျအထား တှပေေါ့။ အနီးနားဝတျဝနျးကငျြကရှာတှပေေါ့။ ဒါတကယျဘိုးဘှား ပိုငျမွဆေိုတာတဈနယျလုံးသိတာပဲလေ။ ကနျြတဲ့ အထောကျအထားတော့ မရှိဘူးလေ။ သူတို့လာပွောတုနျးက မွဌေားပေးပါ တပျသကျသာခြောငျခြိရေး အတှကျစိုကျပြိုးရေး လုပျမယျဆိုပွီးလာပွောတာ အခုကတြော့ ကြှနျတျော့ကို လကျမှတျလာထိုး ခိုငျးတယျလေ။ တပျသိမျးမှာပေါ့ လကျမှတျထိုး ပေးဆို ကြှနျတျောမထိုးဘူးလို့ ခငျဗြားတို့ လာတုနျးကလညျး သိမျးတယျလို့ပွောတာမဟုတျလို့ ဟိုနကေ့မှသိတာ ရုံးကချေါ ပွောတော့ ထှအေုပျရုံးကချေါပွောတော့ ဒါတပျသိမျးမွထေဲမှာ မပါဘူး။ အဲဒါ ပွနျလြှောကျယူဖို့တော့ ပွောတယျ”ဟု ဦးစိုငျဟိတျ ကပွောဆိုသညျ။
“သူတို့ကတော့ ရဲဘျောဟောငျးအိမျရာအတှကျ သိမျးထားတာကနျ့ကှကျလိုရငျ ကနျ့ကှကျပါဆိုလို့ စာထှကျထားတာလေ မွစောရငျးမှာ သူတို့ကသိမျးထားတာဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ တကယျတောငျသူပိုငျရှငျ အစဈအမှနျတှကေမစိုကျရဘူးပေါ့. အဲဒါကွောငျ့ ပိုငျရှငျအစဈအမှနျတှကေ ပွနျလိုခငျြတာပေါ့။ အဲဒီမွတှေေ ကိုပွနျရခငျြတာပေါ့ ” ဟု ဦးစိုငျးဟိတျ ကပွောဆို သညျ။ အဆိုပါ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး နိုငျငံတျော သမ်မတရုံးနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ အစိုးရရုံး တို့ကို တောငျသူမြားက မွပွေနျလညျ ရရှိရေး အကွိမျကွိမျတငျပွတောငျးဆိုထားသျောလညျး အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျပေးခွငျးမရှိကွောငျး တောငျသူ မြားက ပွောဆိုသညျ။ ရနျကုနျခတျေသဈသတငျးဌာနက တပျမတျောပွောခှငျ့ရပုဂ်ဂိုလျမြားထံ မွသေိမျးယူမှုကိစ်စ မေးမွနျးရနျ ကွိုးစားသျောလညျး အဆကျအသှယျမရရှိပေ။ https://www.khitthitnews.com/2020/06/%e1%80%94%e1%80% 99%e1%80%b7%e1%8 0%ba%e1%80
မိုးသညျးထနျစှာ ရှာသှနျးမှုကွောငျ့ ဖားကနျ့တှငျ ဈေးဆိုငျတနျး၊ ဘကျဖိုးနှဈစီးနှငျ့ ကားတဈစီး ရစေီးကွောငျးနှငျ့မြှောပါပွီး လူ အသအေပြောကျရှိနိုငျကွောငျး ဖားကနျ့မွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမှ သိရသညျ။
ဇှနျ ၈ ရကျ နံနကျအစောပိုငျးက မိုသညျးထနျစှာရှာသှနျးပွီးနောကျ ယငျးဖွဈစဉျ ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး မမုံကြေးရှာမှ ဦးထှေးမောငျက ပွောကွားသညျ။ ”မနကျ ၁ နာရီကနေ မိုးသညျးနတော။ ရစေီးကွောငျးကို မွစောဖို့ထားတော့ ရအေားနဲ့ ပေါကျကွလာတာပေါ့။ ဘကျဖိုးနှဈစီး၊ ဆိုငျခနျး ငါးခနျး ခွောကျခနျး၊ မွသေယျတဈစီး၊ဖိုးဝှီးကားတဈစီး မြှောလာတယျ။ လူ အသအေပြောကျတော့ စဈဆေးဆဲ ရှိသေးတယျ”ဟု ဦးထှေးမောငျက ပွောကွားသညျ။ ရစေီးကွောငျးသညျ အနံပေ ငါးရာ၊ အလြား ပေ နှဈထောငျကြျောခနျ့ရှိပွီး လူအသအေပြောကျ ရှိနိုငျကွောငျး၊အမြားစုမှာ ခိုးကငျြးမြားဖွဈနသေဖွငျ့ မညျသညျ့ လုပျကှကျမြှ မြှောလာသညျကို မသိရကွောငျး ဒသေခံအမြားစုက ဆိုပါသညျ။
ဖားကနျ့မွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဉာဏျလငျးအောငျက ” ကှငျးဆငျးနတေယျ။ ဘကျဖိုးနှဈစီး၊ဖိုးဝှီး ကားတဈစီးမြှောလာ တယျ။ လူအသအေပြောကျ ရှိလား စုံစမျးနတေယျ။ ဘယျလုပျကှကျက ဆိုတာလညျး မသိရသေးဘူး။ တဈခွားနရောမဖွဈ ဘူး”ဟု ဆိုသညျ။ ဒသေခံရှာသားမြားအဆိုအရ ယငျးနရောမှာ ယူနတီနှငျ့ ဧရာရတနာ သကျတမျးကုနျကငျြး ဟောငျးနရော ဖွဈပွီး ခိုးတူးနသေညျ့ ယာဉျမြားဖွဈကွောငျး ပွောကွားသညျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈတှငျ ဖားကနျ့ဒသေတှငျ မွပွေိုကမြှု၊ နှံကနျ ပေါကျကမြှုကွောငျ့ ဧပွီ ၂၂ ရကျမှ ဧပွီ ၂၅ ရကျအထိ လေးရကျဆကျတိုကျ မွပွေိုမှုမြား၊ နှံကနျပေါကျကွမှုမြားဖွဈပျေါခဲ့ပွီး လူ ၅၉ ဦး သဆေုံးခဲ့ကွောငျး၊ယန်တရားတနျဖိုး သိနျးပေါငျးသောငျးနှငျ့ခြီကာ ဆုံးရှုံးခဲ့ကွောငျး မှတျတမျးမြားအရသိရသညျ။
ဖားကနျ့ဒသေတှငျ မွပွေိုမှုကို လစဉျတိုငျး နရောအနှံဖွဈနပွေီး အထူးသဖွငျ့ မိုးဦးရာသီမှာ မိုငျးဒဏျ၊သဘာဝဒဏျမြားကွောငျ့ အကျကွောငျးမြားမိုးရဝေငျကာ လြှောပွိုခွငျး၊ အမွငျ့ပိုငျးမှ ရကေနျမြား လြှောဆငျးကာ ပွိုကခြွငျး၊ မွစောပုံမြားမွလြှေောခွငျး မြား၊ ယငျးမွသေားပွိုကမြှုမြားကွောငျ့ အောကျခွရေအေိုငျမှ လှိုငျလုံးကွီးမြားကွောငျ့ ရအေိုငျကမျးပါးတှငျ ကြောကျရှာနသေူ မြားအား ရအေားဖွငျ့ ဆှဲခွမှုမြား မကွာခဏ ဖွဈပှားခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ဦးသိနျးစိနျ အစိုးရလကျထကျတှငျ သတ်တုတှငျး ဝနျကွီးဌာန၏ စာရငျးမြားအရ ဖားကနျ့ဒသေတှငျ ပုဂ်ဂလိက ကုမ်ပဏီ (၈၀၈) ခု တဈဧက လုပျကှကျပေါငျး (၁၅၆၃၈)ကှကျ ၊ အကြိုးတူ ကုမ်ပဏီ (၂၂၂) ခု လုပျကှကျပေါငျး (၃၀၂ )ကှကျ အထိ ရှိခဲ့သညျ။ NLD အစိုးရလကျထကျတှငျ လုပျကှကျမြားကို သကျတမျးတိုးပေးခွငျး မရှိတော့ပဲ လုပျကှကျ ဧရိယာအကယျြအဝနျး နှငျ့ ပေါငျးစပျတူးဖျောခှငျ့မြားကို ကနျ့သတျခဲ့သညျ။ လကျရှိတှငျ အကြိုးတူလုပျကှကျ ၄ ခု၊ ပုဂ်ဂလိက လုပျကှကျ ၆၃၆ ကှကျရှိပွီး အမြားစုမှာ ခိုးတူးနကွေခွငျး ဖွဈကွောငျးသိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/177471
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး သိန်နီမွို့အဝငျတံတားကငျးစောငျ့ တပျသားမြား သနေတျပဈခတျမှုကွောငျ့ နအေိမျ ၂ လုံးထိမှနျခဲ့ ကွောငျး သိရသညျ။
ဇှနျ ၆ ရကျ ည ၁၁ နာရီကြျော ဆိုငျကယျမောငျးနှငျလာသညျ့ လူတဦးအား သိန်နိမွို့ အဝငျတံတား ကငျးစောငျ့နသေညျ့ တပျ သားမှ စဈဆေးရနျရပျခိုငျးရာမရပျသဖွငျ့ဟုဆိုကာ သနေတျပဈခွိမျးခွောကျရာမှ လူနအေိမျမြားအားထိခိုကျရခွငျးဖွဈကွောငျး သိန်နီ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ စိုငျးဦးခမျး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။“ဆိုငျကယျစီး လူတယောကျက တံတားဖွတျသနျးစဉျမှာ လုံခွုံရေးကတားပါတယျ။ တားလို့ မရပျတဲ့အတှကျ ကငျးစောငျ့တဲ့ တပျသားက သနေတျပဈလိုကျ တာပါ။ လူတော့ထိဘဲ အိမျ ၂ အိမျကိုထိသှားတယျ”ဟု စိုငျးဦးခမျး က ပွောသညျ။ အဆိုပါ အိမျ ၂ အိမျသညျ တံတားအနီး တှငျရှိသညျ့အိမျမြားဖွဈပွီး၊ အိမျခေါငျမိုး၊ နံရံ မြားတှငျ ကညျြဆံထိမှနျကွောငျး၊ သကျဆိုငျရာ တပျမှလညျး ကညျြထိမှနျသညျ့ အိမျကိုလာရောကျကွညျ့ရှုကွောငျး၊ သနေတျပဈသညျ့ တပျသားမြားကိုလညျး အရေးယူမှု ပွုလုပျသှားမညျဖွဈကွောငျးပွော သညျဟု စိုငျးဦးခမျး က ထပျပွောသညျ။
“ဆိုငျကယျကိုတားတာ မရပျလို့မိုးပျေါထောငျပဈတယျပွောတယျ။ သနေတျသံ ၅ ခကျြ ကြျော ၁၀ ခကျြနီးပါးရှိတယျ။ ကနြော့အိမျကို ၃ ခကျြထိတယျ။ လူအိပျခြိနျမို့လို့တျောသေးတယျ”ဟု ကညျြထိမှနျသညျ့ အိမျပိုငျရှငျ စိုငျးကြျောခိုငျ က သြှမျးသံတျောဆငျ့ ကို ပွောသညျ။ ထို့အပွငျ တနျဖိုးကွီးသညျ့ ပစ်စညျးမြား ပကျြစီးပါကလညျးလြျောပေးမညျဟု တပျကပွော ဆိုကွောငျးလညျး စိုငျးကြျောခိုငျ က ပွောသညျ။“ တနျဖိုးကွီးပကျြစီးတာ ရှိရငျ လြျောပေးမယျလို့ပွောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူ တယောကျယောကျကို ထိသှားမယျဆိုရငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ ဆိုတဲ့အတှေးဝငျလာတယျ။ စိုးရိမျစရာပါ။ နောကျနောငျဒီလိုမြိုး မဖွဈဖို့ပဲ လိုပါတယျ ” ဟု စိုငျးကြျောခိုငျ က တောငျးဆိုလိုကျသညျ။
လုံခွုံရေးအရ ဆိုငျကယျတားသညျကို မရပျသညျ့အတှကျ သနေတျပဈရသညျ့ အကွောငျးပွခကျြမဖွဈသငျ့ကွောငျး၊ နောကျ နောငျ အရပျသားနထေိုငျသညျ့ နအေိမျဘကျသို့ သနေတျမပဈရနျ တောငျးဆိုခငျြကွောငျး ကညျြထိမှနျသညျ့ နအေိမျတှငျနေ ထိုငျသူမြားက ပွောသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/17000
လာမယျ့ နိုဝငျဘာလမှာ အထှထှေထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပမယျလို့ ပွညျတောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက တရားဝငျ ကွညောထားတာနဲ့ ပတျသကျလို့ ဆှေးနှေးလိုကွောငျး ကခငျြအမြိုးသားကှနျဂရကျပါတီက ကခငျြပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျဆီကို အိတျဖှငျ့ပေးစာ ပေးပို့ တောငျးဆို လိုကျပါတယျ။
၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကငျြးပမယျဆိုပါက ပွညျနယျအခွစေိုကျဖှငျ့လှဈထားတဲ့ပါတီတှနေဲ့ အကွို ဆှေး နှေးဖို့ လိုအပျတယျလို့ ကခငျြအမြိုးသား ကှနျဂရကျပါတီဥက်ကဋ်ဌ ‌ဒေါကျတာ M- ကောနျလက ပွောပါတယျ။“ဒီရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျရဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှနေဲ့ အကောငျအထညျဖျောတဲ့နရောမှာ ပွညျနယျတိုငျးက သကျဆိုငျရာ ဒသေအလိုကျက ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့တှကေ အကောငျအထညျဖျောတယျ။ အကောငျအထညျဖျောတဲ့နရောမှာ တခြို့ကတြော့ ဗဟို က လိုအပျတဲ့ဟာကို ညှနျကွားတဲ့အတိုငျး လိုကျလုပျပမေယျ့ တခြို့ကတြော့ ပွညျနယျတိုငျးကနပွေီးတော့မှ သူ့လိုအပျခကျြ အရ သူပွနျပွီးတော့မှ စာရငျးအခကျြအလကျတှကေို ပေးပို့ရတာရှိတယျ။ အဲလို ကိစ်စတှမှော ကနြျောတို့စကားပွောဖို့ လို တယျလို့ ကနြျောတို့ ယူဆတယျပေါ့နျော”ကခငျြပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအနနေဲ့ ပွညျနယျအတှငျးက ပါတီအား လုံးနဲ့ ဆှေးနှေးစလေိုကွောငျးနဲ့ ကနျြတဲ့ပါတီကို မချေါရငျလညျး ကခငျြအမြိုးသားကှနျဂရကျပါတီနဲ့ အခကျြ ၅ ခကျြ ဆှေးနှေး လိုကွောငျးလညျး စာမှာ ဖျောပွပါတယျ။
ဆှေးနှေးလိုတဲ့အခကျြ ၅ ခကျြကတော့ ရကျပေါငျး ၉၀ နထေိုငျသူမြား သကျဆိုငျရာ ရောကျရှိတဲ့ဒသေမှာ မဲပေးမယျ့ကိစ်စ လူဦးရစောရငျးကောကျယူပုံ၊ ဝေးလံခေါငျဖြားနတေဲ့ ဒသေခံနိုငျငံသားတှကေို၏ မဲပေးခှငျ့ရရေးနဲ့ မဲဆန်ဒနယျတိုးခြဲ့သတျမှတျ ရေးကိစ်စ၊ ကိုယျစားလောငျးမြား လိုကျနာရမယျ့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ကငျြ့ဝတျကိစ်စ၊ ကွိုတငျမဲ သတျမှတျပုံကိစ်စနဲ့ ဧညျ့နိုငျငံ သားမြားကို ပါဝငျမဲပေးခှငျ့ သတျမှတျတဲ့ကိစ်စတှကေို ဆှေးနှေးလိုကွောငျး စာမှာဖျောပွထားပါတယျ။ အလားတူ မဲပေးနိုငျသူ အရညျအခငျြး သတျမှတျခွငျးမှာ ဧညျ့နိုငျငံသားတှကေို ပါဝငျမဲပေးခှငျ့ သတျမှတျထားတဲ့အတှကျ ဧညျ့နိုငျငံသားဆိုတာ ဘယျ လို လူမြိုးလဲဆိုတာ ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိဖို့ လိုအပျကွောငျးလညျးပွောပါတယျ။ အဆိုပါအိတျဖှငျ့ပေးစာကို ဒီကနမေ့နကျ ပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကိုသှားရောကျပေးဖို့ထားပွီးအကွောငျးမပွနျသေးကွောငျးလညျး ဒေါကျတာ M-ကောနျလ က ပွောပါတယျ။ ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို လာမယျ့ နိုဝငျဘာလအတှငျးမှာပဲ ကငျြးပသှားမယျလို့ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးမွငျ့နိုငျက ဇှနျလ ၄ ရကျ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ပွောဆိုခဲ့ပွီး ရှေးကောကျပှဲကငျြးပ မယျ့ ရကျကို ပုံမှနျအတိုငျး ၄ လကွိုတငျ ကွညောသှားမယျလို့ ပွောပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/393127
ကပျရောဂါဘေးကာလမှာ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားတဲ့အနနေဲ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျအဖှဲ့ ၃ ဖှဲ့ကို ကိုဗဈ-၁၉ ရှမျးပွညျနယျ ပွညျသူလူထုစားနပျရိက်ခာ ထောကျပံ့ရးကျောမတီက ဇှနျလ ၈ ရကျမှာ စားနပျရိက်ခာတှေ ထောကျပံ့ပေးအပျပါ တယျ။
အနျစီအေ လကျမှတျ ရေးထိုးထားတဲ့ ပအိုဝျးအမြိုးသားလှတျမွောကျရေးအဖှဲ့ခြုပျ(PNLO)၊ ရှမျးပွညျပွနျလညျ ထူထောငျရေး ကောငျစီ RCSS/SSA နဲ့ PNO အသှငျပွောငျးပွညျသူ့စဈ (ဌာနေ)တို့ကို ထောကျပံ့ပေးခဲ့တာပါ။ RCSS အနနေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉ ကပျဘေးကာလအတှငျး ပွညျသူအယောကျ ၆၀ဝဝဝ ကြျောကို ကနျြးမာရေး စဈဆေးပေးခဲ့သလို သံသယလူနာ မတှရှေိ့ဘူး လို့ သိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကိုဗဈ-၁၉ ရောဂါ ကပျဘေးကာလအတှငျး ပွညျသူတှကေို ထောကျပံ့မှုပွုလုပျတဲ့နရောမှာ တပျမတျောနဲ့ နားလညျမှုလှဲပွီး တိုကျပှဲဖွဈပှားမှုတှေ ရှိခဲ့တယျလို့ RCSS ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုဗိုလျမှူးကွီး စိုငျးအှမျခေးက ပွောပါတယျ။
PNO အသှငျပွောငျးပွညျသူ့စဈ(ဌာနေ)အနနေဲ့လညျး ကပျဘေးကာလမှာ ပွညျသူတှကေို ကနျြးမာရေးအသိပညာပေးမှုတှေ အတျောမြားမြားလုပျခဲ့တယျလို့ PNO အသှငျပွောငျးပွညျသူ့စဈ ဒုကှပျကဲရေးမှူး ဗိုလျမှူး အောငျသနျးက ပွောပါတယျ။ တိုငျးရငျးသားနကျကိုငျတဈဖှဲ့ကို ဆနျ ၂၄ ပွညျအိတျ ၃၀ဝ စီ၊ ဆီ ၁၀ ပိဿာပုံး ၃၀ စီ ထောကျပံ့ခဲ့ပါတယျ။ http://burmes e.dvb.no/archives/393063
ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျဖွူမွို့နယျ ဇငျခြောငျးအုပျစုမှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ ၈၁ နှဈအရှယျ ဦးဝကေနျြအောငျနဲ့ အသကျ ၄၆ နှဈအရှယျ ဦးမောငျမောငျညိုတို့ သားဖနှဈဦးကို ပွီးခဲ့တဲ့ ဇှနျလ ၁ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက အအေေ အဖှဲ့ကဖမျးဆီးသှားတာ ဖွဈ တယျလို့ မိသားစုက RFA ကိုဒီနပွေ့ောပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးဟာ ဇှနျလ ၁ ရကျနညေ့နကေ ရှာနဲ့ နှဈမိုငျလောကျဝေးတဲ့ ကမျးခွဘေကျကို ဆိုငျကယျနဲ့ ထှကျသှားပွီးနောကျ ပြောကျဆုံးသှားတာလို့ ဦးမောငျမောငျညို ရဲ့ ဇနီး ဒျေါသန်တာငွိမျးက ပွောပါတယျ။“တနင်ျလာနေ့ ညနေ ၄ နာရီလောကျမှာ အိမျကထှကျသှားပါတယျ။ အိမျကို ပွနျမရောကျဘူး။ ည ၆ နာရီ ထိုး ပမေယျ့ မရောကျ၊ ၈ နာရီ လောကျမှာလညျး မရောကျ၊ ၉ နာရီလောကျမှာတော့ ကြှနျမတို့ လိုကျရှာကွပါတယျ။ အဲလို လိုကျ ရှာတဲ့အခါမှာ ည ၁၁ နာရီလောကျမှာ ဆိုငျကယျရယျ၊ သူ့အဖမှောပါသှားတဲ့ ဓားနဲ့ ခမောကျကိုပဲ တှတေ့ော့တယျ” ဦးဝကေနျြအောငျရဲ့သား၊ ဦးမောငျမောငျညိုရဲ့ အဈကိုဖွဈသူ ဦးဇငျး ဦးဝဇီရာဝုဓ က အအေကေ ဖမျးသှားတယျဆိုတဲ့ သကျ သေ တှေ ရထားတယျလို့ မိနျ့ပါတယျ။
ဖမျးဆီးခံရတဲ့ အသကျ ၈၀ ကြျောအရှယျ ဦးဝကေနျြအောငျဟာ ဇငျခြောငျးအုပျစု ကုနျဘောငျကွီးရှာမှာ အခွခေနြထေိုငျပွီး လယျယာစိုကျပြိုးရေးအလုပျကို လုပျကိုငျနသေူပါ။ သူနဲ့အတူဖမျးဆီးခံရတဲ့သားဖွဈသူ ဦးမောငျမောငျညိုကတော့ ကြောကျဖွူ မွို့ ဓညဝတီရတေပျဌာနခြုပျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့တဲ့ စဈမှုထမျးဟောငျးတဈဦးဖွဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက ပငျစငျယူပွီးတော့ ရနျကုနျမှာ သှားရောကျအလုပျလုပျနသေူပါ။ ဇနီးဖွဈသူ ဒျေါသန်တာငွိမျးက သူတို့ နှဈဦးစလုံးဟာ ရိုးရိုးသားသား လုပျကိုငျစား သောကျနသေူတှေ ဖွဈတာကွောငျ့ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ ပွနျလညျလှတျမွောကျ လာစခေငျြတယျလို့ ပွောပါတယျ။”ဦးဝကေနျြအောငျနဲ့ ဦးမောငျမောငျညို တို့သားဖနှဈဦးကို အအေေ အဖှဲ့က ဖမျးသှားတယျဆိုတဲ့ ပွောဆိုခကျြနဲ့ ပတျသကျလို့ RFA က သီးခွားအတညျပွုခကျြ ရနိုငျဖို့အတှကျ မကျြမွငျတှကေို မေးမွနျးဖို့ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ဆကျသှယျလို့မရခဲ့ပါဘူး။
ဖမျးဆီးခံရတဲ့ ဦးမောငျမောငျညိုရဲ့ဇနီး ဒျေါသန်တာငွိမျးက ဖမျးဆီးခံတဲ့ကိစ်စအပျေါ ဇငျခြောငျးနယျမွရေဲစခနျးမှာ အသိပေးထား ပမေယျ့ အမှုဖှငျ့ထားတာ မရှိဘူးလို့ ပွောပါတယျ။ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) က မနကေ့ ရကျစှဲနဲ့ ထုတျပွနျခကျြတဈခုမှာ ရက်ခိုငျ့ တပျတျောအနနေဲ့ မွနျမာ့တပျမတျောရဲ့ အမာခံတှေ၊ သတငျးပေးတှေ၊ ရိက်ခာထောကျပံ့ ပေးပို့နသေူတှေ၊ မွနျမာ့တပျမတျော ရဲ့ စဈဆငျရေးကို အထောကျအကူပွုနသေူတှကေို ရံဖနျရံခါ ချေါယူစဈဆေးမေးမွနျးလရှေိ့ပွီး အပွဈမရှိသူတှကေို လုံခွုံ စိတျခရြတဲ့ အခွအေနနေဲ့ သငျ့တျောတဲ့အခြိနျမှာ ပွနျလှတျပေးလရှေိ့တယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ရခိုငျပွညျနယျမှာ စဈရေး ကာလအတှငျး မသင်ျကာလို့ ဖမျးဆီးခံရမှုတှကေို တပျမတျောရော၊ အအေပေါ နှဈဘကျစလုံးက လုပျ ဆောငျနတောပါ။ အဲဒီ လို ဖမျးဆီးခံရရငျး ပွနျလညျလှတျမွောကျလာသူတှရှေိသလို စဈကွောရေးမှာလကျလှနျပွီး သဆေုံးသှားတာတှေ၊ ဘာ သတငျး အစအနမှ မရတော့ဘဲ ပြောကျဆုံး သှားတာတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ https://www.rfa.org/b urmese/ne ws/father-and-son-arrested-by-aa-in-kyaukphyu-06052020083219.html
စဈဘေးရှောငျကြောငျးသူ/သားမြားအတှကျ ဆမီးမွို့တှငျ ကြောငျးဆောငျသဈ ၂ လုံး စတငျဆောကျလုပျနကွေောငျး ခငျြး ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူစညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျထံမှ သိရသညျ။ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “ဒုက်ခသညျ တှကေ တိုးလာသလို ကြောငျးသူ ကြောငျးသား အရအေတှကျလညျး တိုးလာတယျ ဆမီးမှာဆိုရငျ ကြောငျးသူကြောငျးသား ဦးရေ ၇၅၀ လောကျတိုးလာတယျ အဲဒီအတှကျကို မနကျပိုငျးဖှငျ့တဲ့ကြောငျး ညနပေိုငျးဖှငျ့တဲ့ကြောငျး မနကျပိုငျးကို တဈဝကျ တကျ၊ ညနပေိုငျးကို တဈဝတျတကျ၊ဒီလိုစနဈတှေ သုံးဖို့ ဆှေးနှေးထားတယျ အဲလိုလုပျလို့ အဆငျပွရေငျ ပရိဘောဂနဲ့ ကြောငျးဆောငျ သကျသာသှားမယျ။ ပေ ၈၀ ပေ ၃၀ ကြောငျးဆောငျတှေ ဆောကျလုပျဖို့ ဆမီးမှာတော့ ခိုငျးလိုကျပွီ သဈတိုငျ သှပျမိုးနဲ့ အကာတော့ ဝါးထရံနဲ့လုပျမှာဖွဈတယျ အဲလို ၂ လုံး ဆောကျခိုငျးထားလိုကျတယျ”ဟုပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့၊ ဆမီးမွို့၊ မီးဇာရှာနှငျ့ ကငျခြောငျးဝရှာတို့တှငျ စဈဘေးရှောငျဒုက်ခသညျ မြားပွားလာသလို ကြောငျးသူ ကြောငျး သားဦးရမှောလညျး မြားပွားလာသောကွောငျ့ ကြောငျးဖှငျ့ခြိနျတှငျ အခြိနျမှီကြောငျးမြား ဖှငျ့လှဈနိုငျရနျ ကြောငျးဆောငျမြား ဆောကျလုပျနပွေီ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ စညျပငျဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက “ဆမီးတဈခုထဲမှာတငျ အခုနာမညျစာရငျး ကောကျယူထားတာက ၇၅၀ ဝနျးကငျြလောကျရှိတယျ ပလကျဝမှာတော့ အခုလုပျလို့မရသေးဘူး ပစ်စညျးတှေ ဝယျလို့လညျး မရဘူး ပို့လို့လညျး မရသေးဘူး အဲဒါကွောငျ့ ဆမီးမှာစလုပျနတေယျ”ဟုပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့တှငျ တိုကျပှဲရှောငျသညျ့ အိမျထောငျစု ၁၁၃၂ စုရှိပွီး လူဦးရအေားဖွငျ့ ၅၀၉ဝ ဦးရှိကွောငျး နှငျ့ ဆမီးမွို့တှငျ အိမျထောငျစု ၆၉၈ အိမျထောငျစု ရှိပွီး လူဦးရအေားဖွငျ့ ၂၉၆၁ ဦး ရှိကွောငျး ပွညျသူမြား အရေးပျေါကူညီရေးနှငျ့ ပွနျလညျ ထူထောငျရေး ကျောမတီ RRCCI ၏ ထုတျပွနျခကျြအရ သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73263
အစိုးရ တပျမတျောနှငျ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျမှုမြားဖွဈပှားစသေညျ့ ထိတှမှေု့ကို အတတျနိုငျဆုံး ရှောငျရှားရနျ တပျတှငျးညှနျ ကွား ခကျြထုတျထားကွောငျး တဈနိုငျငံလုံး ပဈခတျတိုကျခိုကျမှု ရပျစဲရေး သဘောတူစာခြုပျ ( NCA) လကျမှတျထိုးထား သညျ့ KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၏ ကရငျအမြိုးသားလှတျမွောကျရေးတပျမတျော-KNLA စဈဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျကွီး စောဂြျောနီက ပွောသညျ။
လတျတလော KNU နယျမွဒေသေမြားတှငျ အစိုးရ စဈတပျ၏ လကျအောကျခံ တပျရငျးမြားနှငျ့ KNLA တပျဖှဲ့ဝငျမြား အကွား နယျမွကြေူးကြျောမှု အကွောငျးပွခကျြမြားဖွငျ့ ပဋိပက်ခနှငျ့ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျပဈခတျမှုမြား ပိုမိုဖွဈပှား လာခွငျးကွောငျ့ ယခုလို ညှနျကွားခကျြ ထုတျလိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု ဗိုလျခြုပျကွီး စောဂြျောနီက ယခုလိုပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “အခု ကနြျောတို့ လူ တှကေို ညှနျကွားထားပွီးပွီ။ ကိုယျ့နရောနဲ့ ကိုယျနပွေီး နယျမွကြေူးကြျောတာမြိုး မဟုတျရငျ ဘာမှမလုပျဖို့နဲ့ တကယျလို့ နယျမွကြေူးကြျောလာတာမြိုးဖွဈရငျလညျး ဘယျလို အရေးယူဆောငျရှကျရမလဲဆိုတာကိုပေါ့။ အခုဆိုရငျ ကနြျောထငျတယျ နောကျတဈပတျ နှဈပတျလောကျဆိုရငျတော့ အဆငျပွသှေားမှာပါ” ယနေ့ ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ လမြားမှစ၍ ယခုဇှနျလဆနျးပိုငျးအထိ KNU လကျအောကျခံ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့အကွား ထိတှမှေု့ ၊ ပဈခတျမှုမြား ပုံမှနျပွနျဖွဈလာခွငျးနှငျ့ပတျသကျပွီး ကအေိုငျစီ-ကရငျသတငျးဌာန၏ ဆကျသှယျမေးမွနျးမှု အပျေါ ယခုလိုပွနျလညျပွော ကွားခွငျးဖွဈသညျ။
တဈနိုငျငံလုံး အပဈရပျစာခြုပျ လကျမှတျရေးထိုးထားသညျ့ KNU လကျအောကျခံတပျမြားနှငျ့ အစိုးရစဈတပျအကွား မကွာ ခဏ ပဈခတျမှုမြားဖွဈပှားလကျြရှိပွီး တဈဖကျနှငျ့ တဈဖကျသတျမှတျနယျ မွကြေူးကြျောခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပှားရခွငျး ဖွဈသညျ ဟု သကျဆိုငျရာနှဈဖကျတပျမြားက ပဈခတျမှုဖွဈစဉျမြားအပွီး ထုတျဖျောပွောလရှေိ့သျောလညျး ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးမှု လုပျငနျးစဉျမြားတှငျ ယနအေ့ခြိနျထိ နယျမွပေိုငျးခွားသတျမှတျခွငျးကို ဆှေးနှေးနိုငျခွငျးမရှိ သေးကွောငျးသိရသညျ။ အလား တူ မွနျမာ့တပျမတျောအနဖွေငျ့ အပဈအခတျရပျစဲရေးကို အခှငျ့အကောငျးယူပွီး ၎င်းငျးတို့ နယျမွထေဲတှငျ တပျစခနျးနှငျ့ တပျ အငျအားတိုးခြဲ့မှုမြား ယခငျနှဈမြားထကျ နှဈဆဖွညျ့တငျးခွငျးမြား ပွုလုပျလာကွောငျး ပွီးခဲ့သညျ့ မလေ ၁၅ ရကျနေ့ က KNU ဗဟိုက သဘောထားထုတျပွနျထားပွီး တပျမတျောစဈကွောငျးမြားမှ ရနျလိုသညျ့ ပုံစံပိုမိုပွသလာခွငျးကွောငျ့ အောကျ ခွတှေငျ ထိတှမှေု့မြား ဖွဈပှားရခွငျးဖွဈသညျဟု ပွောဆိုထားသညျ။
ယခုဇှနျလဆနျးပိုငျးတှငျလညျး KNU တပျမဟာ (၅) နှငျ့ တပျမဟာ(၇) ဒသေတို့တှငျ အစိုးရတပျမတျောနှငျ့ KNLA တပျဖှဲ့ ဝငျမြားအကွား ပဈခတျမှု ၂ ကွိမျထကျမနညျးဖွဈပှားခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့သညျ့ ဇှနျလ ၂ရကျနေ့ ပဈခတျမှု ဖွဈစဉျတှငျ ဒသေခံ ရှာသား ၂ ဦး လကျနကျကွီး ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့သလို ဇှနျလ ၄ရကျနတှေ့ငျလညျး KNU ဖာပှနျခရိုငျဒသေရှိ သောလယျထ နှငျ့ ဖားအံခရိုငျဒသေရှိ သူမှဲထ ဒသေတို့တှငျ နှဈဖကျ ပဈခတျမှု ဖွဈပှားခဲ့သေးသညျ။ နယျမွသေတျမှတျကြူးကြျောမှု အကွောငျး ပွခကျြဖွငျ့ ဖွဈပှားသညျ့ ထိတှပေ့ဈခတျမှုမြားအပွငျ လတျတလော ဖွဈပှားနသေညျ့ COVID-19 ကပျရောဂါကာလအတှငျး KNU ၏ ကာကှယျရေးလုပျငနျးစဉျမြားကို တပျမတျောဘကျမှ နှောငျ့ယှကျဟနျ့တားမှုမြားနှငျ့ ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေး ဂိတျ မြားဝငျရောကျဖကျြဆီးမှုကွောငျ့လညျး နှဈဖကျ ပဋိပက်ခမြား ဖွဈပှားခဲ့သေးသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%8 0%91%e1%80%ad%e1%80%b1%e1%80%90%e1%80%bc%e1%
လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မှနျညီညှတျရေးပါတီ MUP ကိုယျစားလောငျးမြားအဖွဈ ပါဝငျယှဉျပွိုငျလိုသူမြားအနဖွေငျ့ သကျဆိုငျရာ မိမိတို့မွို့နယျ ပါတီရုံးအသီးသီးသို့ သတျမှတျလြှောကျလှာပုံစံဖွငျ့ စာရငျးပေးသှငျးရမညျဖွဈကွောငျး MUP တှဲ ဖကျအတှငျးရေးမှူး(၁) နိုငျလယိတမက မှနျသတငျးအဂေငျြစီသို့ ပွောသညျ။
မှနျညီညှတျရေးပါတီ၏ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ မဟာဗြူဟာနှငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအရညျအခငျြး သတျမှတျရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဗဟိုအလုပျအမှုဆောငျအစညျးအဝေးကို မျောလမွိုငျမွို့၌ (ဇှနျ ၇ ရကျနေ့)က ကငျြးပ၍ ဗဟိုကျောမတီဝငျမြားမှ တငျပွခကျြမြားအား အတညျပွုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။“ရှေးကောကျပှဲဝငျလိုတဲ့ အမတျလောငျးတှအေနနေဲ့ အရငျဦးဆုံး ကိုယျ့မွို့ နယျမှာရှိတဲ့ MUP ကိုယျစားလှယျလောငျး ရှေးခယျြရေးအဖှဲ့ထံကို လာရောကျစာရငျးပေးသှငျးလြှောကျထားရပါမယျ၊ အဲဒီ ကိုယျစားလှယျလောငျးအဖွဈ အဆိုပွုသူတှကေို သတျမှတျရကျတှမှော မွို့နယျကိုယျစားလှယျလောငျး ရှေးခယျြရေးအဖှဲ့က ပဏာမရှေးခယျြပွီးတော့ ဗဟိုကိုဆကျလကျတငျပွပါမယျ” ဟု နိုငျလယိတမက ဆိုသညျ။
MUP ကိုယျစားလှယျလောငျး အဆိုပွုလြှောကျလှာတဈစောငျအတှကျ ငှကေပျြတဈသိနျးပေးသှငျးရမညျဖွဈပွီး ကိုယျစား လှယျလောငျး အရညျအခငျြးသတျမှတျခကျြ ၁၉ ခကျြရှိသညျ့အနကျ အဓိကအားဖွငျ့ ဒသေခံ (သို့မဟုတျ) ဒသေတှငျးနေ ထိုငျသူ (သို့မဟုတျ)ဇာတိမှေးရပျမွမှေ ပါတီဝငျဖွဈရမညျဟု ကိုယျစားလှယျလောငျးအရညျအခငျြး (Criteria of Candidate) သတျမှတျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ နိုငျလယိတမက “မွို့နယျအသီးသီးက ရှေးခယျြလာတဲ့ သူတို့ကိုယျစားလှယျလောငျး တှကေို ဇူလိုငျ ၁၅ ရကျနေ့ နောကျဆုံးထားပွီး ဗဟိုကိုတငျပွရပါမယျ၊ အဲဒီမွို့နယျ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို ဗဟိုကနေ တဈဦးခငျြးစီရဲ့အရညျအခငျြးတှကေို စိစဈသုံးသပျဆုံးဖွတျပါလိမျ့မယျ”ဟု ပွောသညျ။
မှနျအမြိုးသမီးအစညျးအရုံး MWO အဖှဲ့ဝငျ မိစားယားပိုငျက “ပွညျသူတှအေနနေဲ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေဲ့ အရညျ အခငျြး ကိုပဲကွညျ့မယျ၊ ပွောခငျြတာက ကိုယျစားလှယျလောငျးတဈဦးဟာ သူလုပျရမယျ့အလုပျနဲ့ပတျသကျပွီး ကြှမျးကငျြမှုရှိ ရမယျ၊ ဥပမာ – ဒီဒသေမှာတာဝနျယူထားတယျဆိုရငျ၊ ဒသေခံတှကေ ဘာကိုလိုအပျနသေလဲ သိထားရမယျ၊ နောကျတဈခု က နိုငျငံရေးလုပျငနျးတှမှော ဘယျလောကျအထိကြှမျးကငျြမှုရှိသလဲဆိုတာ မိမိကိုယျကို သုံးသပျနိုငျစှမျးရှိရမယျ”ဟု ဆို သညျ။ လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲအတှကျ လှတျတျောအသီးသီး၌ ပါဝငျယှဉျပွိုငျကွမညျ့ MUP ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားတှငျ လူငယျနှငျ့ အမြိုးသမီးမြားကို အဓိက ဦးစားပေးရှေးခယျြသှားမညျဟုလညျး သိရသညျ။
မှနျပွညျနယျတှငျ အမြိုးသားလှတျတျော ၁၂ ဦး၊ ပွညျသူ့လှတျတျော ၁၀ ဦး၊ ပွညျနယျလှတျတျော ၂၀ ဦးတို့အပွငျ ဗမာ၊ ကရငျနှငျ့ ပအိုဝျးတိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီးမြားအတှကျပါ မဲဆန်ဒနရောသတျမှတျပေးထားပွီး လာမညျ့ရှေးကောကျပှဲတှငျ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ NLD ပါတီ၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ USDP , မှနျညီညှတျရေးပါတီတို့ အဓိက ယှဉျပွိုငျသှားရမညျ့အနအေထားတှငျ တှရှေိ့ရကွောငျး စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာသူမြားက ဆိုသညျ။ http://burmese.monn ews.org/2020/0 6/08/%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%94%e1%80%ba%e1%
ရခိုငျပွညျနယျ မငျးပွားမွို့နယျ သိုငျးကပျြကြေးရှာက ဒျေါစိနျမွဦးကို AA က တဈလကြျောဖမျးဆီးစဈဆေးပွီး ပွနျလှတျပေးပွီး နောကျ ၃ ရကျအကွာ သဆေုံးသညျ့ဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျပွီး AA က ၎င်းငျးတို့နှငျ့ မသကျဆိုငျကွောငျးထုတျပွနျခွငျးသညျ တာဝနျမဲ့ရာရောကျကွောငျး ခငျြးအမြိုးသမီးကှနျရကျမှ အဖှဲ့ဝငျ ဒျေါခငျဝငျးရီကပွောဆိုသညျ။
AA က ဇှနျလ ၄ ရကျနတှေ့ငျ ကွညောခကျြတဈရပျထုတျပွနျခဲ့ပွီး ယငျးကွညောခကျြတှငျ မငျးပွားမွို့နယျ သိုငျးကပျြကြေးရှာ သူ ဒျေါစိနျမွဦး အသကျ ၅၁ နှဈ မငျးပွားပွညျသူ့ ဆေးရုံတှငျ သဆေုံးမှုသညျ ၎င်းငျးတို့နှငျ့မပတျသကျကွောငျး၊ ဧပွီလ ၂၇ ရကျ နကေ့ ဒျေါစိနျမွဦး နှငျ့အတူ ဦးယောငျဇာ၊ ဦးမောငျစိနျဖွူ၊ ဦးစိနျဝငျးကွိုငျ တို့ကို ရာမောငျတံတားထိပျ စခနျးခြ တပျစှဲထား သော မွနျမာ့တပျမတျော၏ စဈသင်ျဘောသို့ ရိက်ခာပေးပို့နသေညျ့အတှကျ ချေါယူစဈဆေးခဲ့ကွောငျး၊ ချေါယူစဈဆေးစဉျ နှိပျစကျညှဉျးပနျးမှု မလုပျဆောငျခဲ့ကွောငျး၊ ဒျေါစိနျမွဦးသညျ နဂိုရှိရငျးစှဲ နှလုံးရောဂါနှငျ့ စိတျကနျြးမာရေး အားနညျးသော ရောဂါ အခံပါရှိလာကွောငျး၊ မလေ ၃၁ ရကျနတှေ့ငျ ဒျေါစိနျမွဦးနှငျ့ အမြိုးသား ၃ ဦးကို ပွနျလညျလှတျပေးခဲ့ကွောငျး၊ ဇှနျလ ၃ ရကျနတှေ့ငျ မငျးပွားမွို့နယျ ပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ ဒျေါစိနျမွဦး သဆေုံးသှားခဲ့ပွီး သဆေုံးမှုသညျ AA နှငျ့ မသကျဆိုငျ ကွောငျး ကွညောခကျြထုတျပွနျခဲ့သညျ။
“သူတို့တာဝနျမဲ့တဲ့ ကွညောခကျြထုတျပွနျခွငျးအပျေါမှာ ကြှနျမတို့က တုံ့ပွနျတဲ့အနနေဲ့ ကွညောခကျြ ပွနျထုတျတာဖွဈ တယျ။ “တဈလကြျောကွာ ထိနျးသိမျးထားတဲ့အရာမြိုး ပွီးတော့ အညိုအမဲတှစှေဲတဲ့ အရာမြိုးက သူတို့နဲ့ လုံးဝ မဆိုငျပါဘူး ဆိုတဲ့အရာမြိုး AA ကဖမျပွီးတော့မှ လုံးဝမိသားစုနဲ့တောငျမတှရေ့ဘူး။ နောကျမှမိသားစုတှသေိရတယျ။ မိသားစုတှေ ရောကျ လာတဲ့အခြိနျမှာ မိသားစုတှကေို ကွောကျတယျ။ နဂိုစိတျတှေ လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ လူတှကေိုကွောကျတယျ။ ဘာမှမသိတော့ ဘူး။ ဘာမှ မပွောနိုငျတော့ဘူးဆိုတဲ့ အနအေထားမြိုးဆိုတော့ ဘယျလောကျအထိ သူအကွမျးဖကျခံရပွီလဲ။ AA ကမဖမျးရငျ ဒီလိုတှေ ဒျေါစိနျမွဦး ဖွဈစရာ ဘာအကွောငျးမှမရှိဘူး” ဟု ဒျေါခငျဝငျးရီကပွောဆိုသညျ။
ခငျြးအမြိုးသမီးကှနျရကျက AA ၏ ထုတျပွနျခကျြအပျေါ ပွငျးထနျစှာကနျ့ကှကျရှုတျခကြွောငျး ဇှနျလ ၆ ရကျနတှေ့ငျ ကွေ ညာခကျြတဈစောငျထုတျပွနျခဲ့သညျ။
ခငျြးအမြိုးသမီးကှနျရကျ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ AA က ဒျေါစိနျမွဦးကို ဧပွီလ ၂၇ ရကျနမှေ့ ဇှနျလ ၁ ရကျနအေ့ထိ ၁ လ ကြျောကွာ ထိနျးသိမျးထားခဲ့ကွောငျး၊ ဒျေါစိနျမွဦး ပွနျလညျလှတျမွောကျလာခြိနျတှငျ မူလသာမနျစိတျနစေိတျထား ပြောကျ သှားသညျ့အပွငျ အသကျရှုလမျးကွောငျးမြား ပုံမမှနျခွငျး၊ ကွောကျရှံ့တုနျလှုပျခွငျး၊ ခွောကျခွားခွငျး၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ရုပျပိုငျး ဆိုငျရာမြား ထိခိုကျနခေဲ့ကွောငျး၊ လကျကောကျဝတျနှဈဖကျစလုံးနှငျ့ နောကျကြောဘကျတှငျ အညိုအမညျးမြား စှဲနကော ခွထေောကျနှဈဖကျစလုံးတှငျလညျး ဒဏျရာမြားရှိနခေဲ့ကွောငျး၊ ဇှနျလ ၃ ရကျနတှေ့ငျ ကှယျလှနျခဲ့ကွောငျး၊ AA ၏ ထုတျပွနျ ခကျြကို ရှုတျခကြွောငျး၊ ယခုကဲ့သို့ အမြိုးသမီးမြားအပျေါ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ အကွမျးဖကျမှုမြား နောကျနောကျ တှငျ မပွုလုပျရနျနှငျ့ တိုကျပှဲမြားအတှငျး အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ တပျဖှဲ့မြားက ကငျြ့သုံးရနျ ထုတျပွနျထားသညျ့ UN Security Resolution 135 ပါ အခကျြကို လိုကျနာကငျြ့သုံးရနျ တောငျးဆိုကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။ https://www.khi tthitnews.com/2020/06/%e1% 80%96%e1%80%99%e1%80%ba%e1%80%b8%e1%80
ကယား(ကရငျနီ) ပွညျနယျ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ အတှငျးမှာရှိတဲ့ ကှိုငျငံရထှေကျပေါကျ ခြောငျးတဈလြှောကျ သဈပငျတှကွေီး တှေ လှဲဖွိုခံလိုကျရတဲ့အတှကျ ခြောငျးဘေးတှမှော မွပွေိုမှုတှေ ဖွဈပျေါနတေယျလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောဆိုနကွေပါတယျ။
“ဒီခြောငျးရဲ့ဘေးမှာရှိနတေဲ့ သဈပဈတှအေားလုံးကို ဖွိုလိုကျတဲ့ခါကတြော့ အဲ့ဒီခြောငျးနံဘေးမှာရှိတဲ့ နံရံတှပေေါ့နျော နံရံ တှကေလညျး ဒါကံပွိုနိုငျတဲ့ အနအေထားမြိုးရှိတယျ။ ဒါက ကတြျောတို့လကျတှပေ့ေါ့နျော ဒီနရောဟာဆိုရငျ ဒီလိုမြိုးပွိုစရာ အ ကွောငျးကိုမရှိဘူး။ ဒီသဈပငျကို မဖွိုဘူးဆိုလို့ရှိရငျ ဒီမွကေ ပွိုစရာအကွောငျးလဲမရှိဘူး။ ဒီသဈပငျတှကေို ဖွိုလိုကျတဲ့ ခါကတြော့ မွကွေီးကိုစှဲထားတဲ့ သဈပငျအမွဈတှကေ မရှိတော့တဲ့ ခါကတြော့ အဲ့ဒါပွိုတယျလို့ ဒါကတြျောတဈယောကျ အနနေဲ့ ကတြျောရဲ့အမွငျနဲ့ဒါ သုံးသပျတာပေါ့နျော။”လို့ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးသဲရယျကပွောပါတယျ။
ခြောငျးဘေးကနေ တူးဖျောထားတဲ့ အပငျကွီးတှကေို အခြို့ကိုတော့ တူးဖျောတဲ့ လူတှကေ ပွနျလညျရှငျးလငျးပေးခဲ့ပမေဲ့လဲ အခြို့အပငျကွီးတှကေ ဒသေခံတှရေဲ့လယျယာမွတှေနေားက အပငျကွီးတှကေို လယျမွပေိုငျဆိုငျတဲ့ သူတှကေပွနျလညျ ရှငျးလငျးရတဲ့အတှကျကွောငျ့ ရှငျးလငျးဖို့အတှကျ အခကျအခဲရှိနတေယျလို့ ကှိုငျငံရှာဟောငျးမှာနထေိုငျတဲ့ ကိုခှနျးလဘေီဦး က ပွောပါတယျ။ “အဲ့ဒီလှဲထားတဲ့ သဈပငျအကွီးတှပေေါ့နော သဈပငျအကွီးတှလေဲ ပွနျမရှငျးပေးဘူးပေါ့နျော။ လယျသမား တှလေဲ ကိုယျ့ဟာကို ပွနျသနျ့ရှငျးရေးလုပျရတာတအားခကျတယျ။ အခြိနျတှလေညျး တဈအားကုနျတဲ့ခါကတြော့ ကတြျောတို့ ရှုံးဆုံးသှားတဲ့ ကတြျောတို့သဘာဝသယံဇာတတှေ၊ သဈပငျကွီးတှေ ဒီဆညျမွောငျးဝနျကွီးဌာနအနနေဲ့ ဘယျလိုမြိုးပွနျလုပျ ပေးနိုငျမလဲပေါ့နျော အဲ့လိုမြိုးကတြျော မေးခငျြပါတယျ။”လို့ ပွောပါတယျ။
၂၀၂၀၊ ဇှနျလ ၃ ရကျနမှေ့ာ ဖရူဆိုမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးသဲရယျက ကှိုငျငံရှာ က ဒသေခံတှနေဲ့ သှားရောကျဆှေးနှေးခဲ့တဲ့အပျေါမှာ ဒသေခံတှကေ အခုလိုတငျပွဆှေးနှေးခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။ ဒသေခံ တှကေ ခြောငျးဘေးမှာရှိနတေဲ့ သဈပငျကွီးကို လဲလိုကျတဲ့အတှကျကွောငျ့ မွပွေိုမှုတှေ ဖွဈပျေါလာတဲ့အပျေါမှာ သဈပငျ တှကေို ပွနျလညျအစားထိုးစိုကျပြိုးပေးဖို့ တောငျးဆိုတာတှေ ရှိနတေယျလို့ ဦးသဲရယျက ပွောပါတယျ။
ကှိုငျငံရထှေကျပေါကျကနေ ရသှေယျတဲ့ခြောငျးတူးဖျောတဲ့ အခါမှာ ဒသေခံတှရေဲ့လယျယာမွေ အခြို့နဲ့ခြောငျးဘေးမှာရှိတဲ့ သဈပငျကွီးတှေ ပကျြစီးသှားတဲ့အတှကျ လတျတလောမှာ ခြောငျးပေါငျတှကေနေ မွပွေိုမှုတှေ ဖွဈပျေါနပေါတယျ။ အဆိုပါ မွပွေိုမှုတှထေပျပွီးတော့ မဖွဈဖို့အတှကျ ဒသေခံတှကေခြောငျးဘေးမှာ သဈပငျတှပွေနျလညျစိုကျပြိုးပေးဖို့အတှကျ တောငျး ဆိုနတောဖွဈပါတယျ။ ကှိုငျငံရထှေကျပေါကျကနေ တဈခွားရှာတှကေိုရလှေဲပေးဖို့အတှကျ ခြောငျးကို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ်ဍာ ရေးနှဈမှာ ရစေီးရလော ပိုမိုကောငျးမှနျဖို့အတှကျ နကိုယျရှိပွီးသား ငူးပလော့ဆညျသို့ သှားတဲ့ခြောငျးကို ထပျမံပွီးတော့ ပွငျဆငျတူးဖျောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ရမွေောငျးကိုပွငျဆငျတူးဖျောတဲ့ အခါမှာ ဒသေခံတှရေဲ့လယျယာမွတှေလေဲ တဈခြို့ တဈဝကျက ခြောငျးဖျောတဲ့အထဲမှာပါသှားခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73279
၂၀၂၀ ဇှနျလ (၁) ရကျနတှေ့ငျ တိုငျကွားပေးပို့လာသော မူးယဈဆေးဝါးသတငျးမြားနှငျ့ စပျလဉျြး၍ ထုတျပွနျခကျြတဈခုကို နိုငျငံတျောသမ်မတရုံးက ထုတျပွနျကွညောခဲ့သညျ။ အဆိုပါထုတျပွနျခကျြတှငျ “မူးယဈဆေးဝါး အထူးသတငျးတိုငျကွားရေး ဌာန”သို့ တိုငျကွားလာခွငျးကွောငျ့ ဖျောထုတျဖမျးဆီးခဲ့သညျ့ မူးယဈအမှုပေါငျး (၁၈) မှု ကို ဖျောပွထားရာ မှနျပွညျနယျမှ တိုငျကွားမှုတဈခုမှ မပါရှိကွောငျး သိရသညျ။“မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲသူအမြားဆုံးထဲမှာ မှနျပွညျနယျက ထိပျပိုငျးမှာရှိတယျ။ (အဲဒါကို) ဘာလို့မတိုငျတာလဲဆိုတော့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ ဒီတိုငျကွားရေးလမျးစဉျကို မယုံကွညျလို့ မတိုငျတာပါ” ဟု ရေးမွို့နယျက တကျကွှလှုပျရှားသူတဈဦးက ပွောပါသညျ။ သတငျးပေးပို့တိုငျကွားသူမြား၏ လုံခွုံရေးကို သကျဆိုငျရာ အာဏာပိုငျမြားက အကာအကှယျမပေးသညျ့အပွငျ ၎င်းငျးတို့၏ ပုဂ်ဂိုလျရေးအခကျြအလကျမြားကို ဖှငျ့ဟပွောဆိုခွငျးမြားကို ကိုယျတိုငျကွုံတှခေဲ့ရကွောငျး ၎င်းငျးက ဆကျပွောပါသညျ။
“မူးယဈဆေးဝါး အထူးသတငျးတိုငျကွားရေးဌာန”သို့ တိုငျကွားလာပါက သကျဆိုငျရာမွို့နယျအဆငျ့သို့ ပွနျလညျညှနျ ကွားခွငျးမြိုးမဟုတျဘဲ တိုကျရိုကျဖမျးဆီးအရေးယူခွငျး ပွုလုပျစလေိုကွောငျး မုဒုံမွို့နယျမှ တကျကွှလှုပျရှားသူတဈဦးက ပွောပါသညျ။“အထကျကနေ တိုကျရိုကျလာဖမျးတာမဟုတျဘဲ အောကျခွကေိုပဲ ဖမျးခိုငျးတယျဆိုရငျတော့ ထိရောကျမှု မရှိ ဘူးပေါ့”ဟု မုဒုံမွို့နယျမှ တကျကွှလှုပျရှားသူကပွောပါသညျ။ မူးယဈပွဿနာနှငျ့ပတျသကျလာပါက “မူးယဈဆေးဝါး အထူး သတငျးတိုငျကွားရေးဌာန”သို့ တိုငျကွားနိုငျကွောငျးနှငျ့ တိုငျကွားနိုငျသညျ့ နညျးလမျးကို ပွညျသူမြားသိရှိခွငျးမရှိသေး ကွောငျး မေးမွနျးခကျြမြားအရသိရသညျ။“မူးယဈဆိုငျရာ အသိပညာပေးလုပျငနျးတှမှော ထိရောကျမှုရှိဖို့ အစိုးရ ဘတျဂကျြ နဲ့ စီမံခကျြလိုမြိုး စနဈတကလြုပျနိုငျရငျတော့ ပိုကောငျးမယျလို့ ကြှနျတျောမွငျတယျ”ဟု မုဒုံမွို့နယျမှ တကျကွှလှုပျရှား သူက ပွောပါသညျ။
မူးယဈဆေးဝါးမြား ပိုမိုဖမျးဆီးရမိနိုငျရေးနှငျ့စပျလဉျြး၍ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနနှငျ့ တိုငျးဒသေကွီး/ပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့မြား သို့ တိုငျကွားနိုငျသညျ့အပွငျ ထူးခွားသညျ့ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ကွီးမားသညျ့ မူးယဈဆေးဝါးရောငျး/ဝယျမှုမြားကို နိုငျငံတျော သမ်မတရုံး၏ “မူးယဈဆေးဝါး အထူးသတငျးတိုငျကွားရေးဌာန”သို့ တိုငျကွားလိုပါက အျောတိုတယျလီဖုနျးနံပါတျ ဝ၆၇-၅၉၀ ၂၀ဝ၊ ဖကျဈဖုနျးနံပါတျ ဝ၆၇-၅၉၀ ၂၃၃ နှငျ့ အီးမေးလျလိပျစာ [email protected] သို့ ရုံးခြိနျ အတှငျး လုံခွုံစိတျခစြှာ တိုငျကွားနိုငျပါကွောငျး နိုငျငံတျောသမ်မတရုံးက အသိပေးထားသညျ။ http://burmese.monnew s.org/2020/06/05/%e1%8 0%99%e1%80%9a%e1%80%af%e1%80%b6%e1%
ရခိုငျပွညျနယျမှာ လှနျခဲ့တဲ့ ၈ နှဈ ၂၀၁၂ ခုနှဈက ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ လူမြိုးရေး ဘာသာရေး အသှငျဆောငျ အကွမျးဖကျ ပဋိပက်ခ တှကွေား နအေိမျတှမေီးရှို့၊ အုပျစုလိုကျ တိုကျခိုကျမှုတှကွေောငျ့ ဒသေခံ ရခိုငျပွညျသူတှရေော မှတျစလငျတှပေါ အသကျ ဘေးလှတျရာကို အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးခဲ့ကွရပွီး ဒုက်ခသညျစခနျးတှထေဲမှာ နထေိုငျနကွေရတဲ့အထဲ ရခိုငျပွညျနယျ ကြောကျဖွူမွို့နယျ ကြောကျတလုံး ဒုက်ခသညျစခနျးထဲက ဒုက်ခသညျတှလေညျး အပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီက ဒုက်ခသညျ တှဟော ကြောကျဖွူမွို့ပျေါမှာ ကိုယျ့အိုးကိုယျ့အိမျ ကိုယျ့စီးပှားရေး လုပျငနျးတှနေဲ့ နှဈပေါငျးမြားစှာ နထေိုငျခဲ့ကွတဲ့ ဒသေခံ တှဖွေဈပွီး သူတို့ မူရငျးနရောတှမှော ပွနျနထေိုငျခှငျ့ရဖို့ တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ အကွိမျကွိမျ ဆှေးနှေးခဲ့ပမေယျ့လညျး ခုခြိနျထိ တော့ မပွလေညျသေးပါဘူး။ အခငျြးခငျြးကွားမှာ ဘာပဋိပက်ခမှမရှိဘဲ မွို့ပျေါမှာ အတူတူ ယှဉျတှဲနထေိုငျခဲ့ကွရာကနေ ရုနျးရငျးဆနျခတျ အခွအေနတှေေ ဖွဈခြိနျမှာ ဒုက်ခသညျစခနျးထဲ ဘယျလိုရောကျသှားရ တယျဆိုတာကို စနနေကေ့ အှနျလိုငျးကနလေုပျတဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲအတှငျး ဒုက်ခသညျတဦးဖွဈသူ ဦးခငျရှကေ ပွောပွပါတယျ။
နောကျ ဒုက်ခသညျတဦးဖွဈသူ မခငျနီလာဝငျးကလညျး ဒုက်ခသညျစခနျးထဲမှာ အခကျအခဲတှနေဲ့ နထေိုငျနရေတဲ့အကွောငျး ပွောပွပါတယျ။“အရငျက ကမြတို့ ရလေုပျငနျးတှလေုပျတယျ၊ တံငါလုပျငနျးတှလေုပျတယျ။ မွို့ပျေါရပျကှကျမှာဆို မျောတျောယာဉျလုပျငနျးတှေ ကုနျစုံဆိုငျတှေ လုပျကိုငျတော့ ကမြတို့ အဆငျပွခြေောမှေ့ စားဝတျနရေေးလညျး အဆငျပွခေဲ့ ပါတယျ။ အခု ၂၀၁၂ နောကျပိုငျးမှာဆိုရငျ စားဝတျနရေေးဟာ လုံးဝ ကပျြကပျြတညျးတညျးနဲ့ အခကျအခဲမြားစှာ ရငျဆိုငျရ တယျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျလို့ရှိရငျလညျး ဒီထဲရောကျတဲ့ အခြိနျကတြော့ လူဦးရကေ ၁,၅၀ဝ ကြျောလောကျရှိပါတယျ။ ၁,၅၀ဝ ကြျောလောကျမှာ ၁၂၀ နီးပါး အသကျဆုံးရှုံးရတယျ။ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးဆိုတာ မရှိပါ။ ဒီနရောမှာနဖေို့ဆိုတာ ကမြတို့အတှကျ လုံးဝ မသငျ့တျောပါ။ ကမြ အမတေယောကျအနနေဲ့ ပွောရမယျဆိုရငျ ကလေးတှရေဲ့ စားဝတျနရေေး၊ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး အကုနျဆုံးရှုံးရပါတယျ။ အခကျအခဲတှေ အမြားကွီးနဲ့ ကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။”ပွညျထောငျစုအစိုးရ တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ ဒုက်ခသညျတှကွေား အကွိမျကွိမျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့ပွီး သူတို့ဘကျက လိုလားခကျြတှကေို တငျပွထားပွီး ဖွဈတယျလို့ ကြောကျတလုံး ဒုက်ခသညျစခနျး စီမံခနျ့ခှဲရေးကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ကိုဖွူခကြေ ပွောပါတယျ။
အစိုးရရဲ့ ပွနျလညျနရောခထြားရေး အစီအစဉျကို ကွိုဆိုပမေယျ့ လကျရှိ ကြောကျတလုံး ဒုက်ခသညျစခနျးကနေ ရှပေ့ေးမယျ ဆိုတဲ့ နရောဟာ ဆားငနျဒီရတေောကို တာပတျပွီး စခနျးပွနျလညျနရောခထြားမှာဖွဈလို့ လူ့အသိုကျအဝနျးတခု နသေငျ့နေ အပျတဲ့နရောဒသေ မဟုတျတဲ့အတှကျ ဒုက်ခသညျတှဘေကျက လကျမခံဘဲ မနလေိုကွတာဖွဈတယျဆိုတာကိုလညျး ဒုက်ခ သညျတှေ ဘကျက ရှငျးလငျးပါတယျ။
ကုလအတှငျးရေးမှူးခြုပျဟောငျး ကိုဖီအာနနျ ဦးဆောငျခဲ့တဲ့ အကွံပေးကျောမရှငျရဲ့ အကွံပွုခကျြတှထေဲမှာတော့ IDP တှေ ကို သူတို့ မူလနထေိုငျနတေဲ့နရော ဒါမှမဟုတျ တခွားနရောသဈကို ပွနျလညျရှပွေ့ောငျးပေးမယျဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ သဘော ဆန်ဒအရသာ ဆောငျရှကျပေးရမယျ၊ လုံခွုံမှုရှိရမယျ၊ ဒါ့အပွငျ ဂုဏျသိက်ခာနဲ့ အညီ ပွောငျးရှနေို့ငျရမယျဆိုတဲ့ အခကျြလညျး ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူတို့ မူလနထေိုငျရာ ဒသေတှမှော ပွနျလညျနထေိုငျနိုငျဖို့ ဦးစားပေး ဆောငျရှကျရမှာဖွဈပွီး အဲဒီလို မလုပျနိုငျဘူးဆိုရငျ IDP တှေ ပွောငျးရှလေို့တဲ့ နရောသဈကို ပွောငျးရှနေို့ငျဖို့ ဆောငျရှကျပေးရမယျလို့လညျး အကွံပေး ထားပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/rakhine-refugees-kyauk-phyu/5452622.html
Covid-19 ကာလ Social distancing စနဈဖွငျ့ ကရငျပွညျနယျရှိ အထကျတနျးအဆငျ့(နဝမတနျးနှငျ့ ဒဿမတနျး) ကြောငျးမြား အားလုံးကို ဇူလိုငျလ ၂၁ ရကျတှငျ စတငျဖှငျ့လှဈသှားမညျဟု ပွညျနယျပညာရေးမှူးရုံးထံမှ သိရသညျ။
ပညာရေးဝနျကွီးဌာန၊အခွခေံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသငျနှဈ အခွခေံပညာကြောငျးမြားဖှငျ့လှဈနိုငျရေးဆောငျ ရှကျရမညျ့လုပျငနျးအစီအစဉျအတိုငျးဖွဈကွောငျး ပွညျနယျပညာရေးမှူးရုံး ဒုတိယညှနျကွားရေးမှူး ဦးစိုးဝငျး က ပွောသညျ။ ၎င်းငျးက “Social distancing ပဲ။ ၆ ပေ အကှာအဝေးလကှော မငျးတို့ကလညျး၊ (နှာခေါငျးစညျး- mask တှကေ တော့) ဌာနကလညျးပေးမယျ။ ကြောငျးတှကေလညျး ပွငျထားတယျ။ လကျဆေးခုံကတော့ မငျးတို့လှူမှရမယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ ယနေ့ (ဇှနျ ၈ ရကျ)တှငျ ပွောသညျ။
ကရငျပွညျနယျရှိ ကြောငျးမြားဖှငျ့လှဈသငျကွားသညျ့အခါ ကြောငျးသူ၊ ကြောငျးသား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမြား အနေ ဖွငျ့ တဈဦး နှငျ့တဈဦး ၆ ပအေကှာနကော လူဦးရအေလိုကျ အခြိနျခှဲသငျကွားသှားနိုငျရနျ စီစဉျထားကွောငျး ဦးစိုးဝငျးက ဆကျပွော သညျ။ ထို့အပွငျ အထကျတနျးအဆငျ့ ကြောငျးအပျနှံရေး သီတငျးပတျအဖွဈ ဇူလိုငျလ ၁၃ ရကျမှ ၁၇ ရကျနအေ့ထိ သတျမှတျထားကွောငျးလညျး ကရငျပွညျနယျပညာရေးမှူးရုံးထံမှ သိရသညျ။ အခွခေံပညာအထကျတနျးအဆငျ့မြား ဖှငျ့လှဈ သညျ့ ဇူလိုငျလ ၂၁ ရကျနနေ့ောကျပိုငျး COVID-19 ရောဂါ ပွနျ့ပှားကူးစကျမှု အခွအေနအေရ အလယျတနျးနှငျ့မူလတနျး အဆငျ့မြားကို တဈဆငျ့ခငျြးစီ ဖှငျ့လှဈနိုငျရေး ဆကျလကျအကွောငျးကွား သှားမညျဟုလညျး အခွခေံပညာဦးစီးဌာနမှ ညှနျကွားထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/socialdistancing%e1%80%bb%e1%80%96%e1%80%84% e1%80%b9%e1%
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (NLD) ပါတီမှ စဈတှခေရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသင်ျခါကြျောမှာ ဇှနျလ ၁ ရကျ ရကျစှဲဖွငျ့ ပါတီဝငျအဖွဈမှ နုတျထှကျစာ တငျလိုကျကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ခရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသင်ျခါကြျောက “ဒီလ ၁ ရကျနကေ့တညျးက ခရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌ တာဝနျကရော၊ ပါတီဝငျအဖွဈကပါ နုတျထှကျစာတငျလိုကျပွီ။ နုတျထှကျတာကတော့ ကနျြးမာရေးအကွောငျးပွခကျြနဲ့ ထှကျ လိုကျတာ။ ပါတီ ဗဟိုကိုရော ပွညျနယျကိုရော စာပို့လိုကျပွီ” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။ NLD ပါတီ စဈတှခေရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသင်ျခါကြျောသညျ ရခိုငျပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ကွီးကွပျမှုဖွငျ့ ထုတျဝသေညျ့ ရှီပွညျရခိုငျ စာစောငျတှငျ စာတညျးမှူးအဖွဈ ၂၀၁၈ ခုနှဈအတှငျးက ခနျ့အပျခံခဲ့ရသူလညျး ဖွဈသညျ။
ပါတီက နုတျမထှကျမီ မလေ ၁၄ ရကျက ၎င်းငျးမှာ ရှီပွညျရခိုငျစာစောငျ စာတညျးမှူး အဖွဈမှ အကွောငျးပွခကျြ တစုံတရာ မရှိ ဘဲ ရပျစဲခံလိုကျပွီး ၎င်းငျးနရောတှငျ NLD ပါတီမှ စဈတှမွေို့နယျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစံရှကြေျောအား အစားထိုးလိုကျကွောငျးလညျး ပွော ပွသညျ။ ဦးသင်ျခါကြျောက “မလေ ၁၄ ရကျက စညျပငျဝနျကွီးရုံးက ဝနျထမျးတယောကျက ဖုနျးဆကျတယျ။ ရှီပွညျရခိုငျ စာတညျး မှူးနရောကို လူစားလဲမယျလို့ ဝနျကွီးက ပွောတယျလို့ ပွောတယျ။ အသိပေးတယျပေါ့။ ဖွုတျလိုကျတဲ့ သဘောပဲ။ ဦးလေး က ပွောတယျ။ ဝနျကွီးကို တခကျြမေးလိုကျမယျဆိုတော့ သူက ဖုနျးဆကျလို့ရမှာ မဟုတျဘူး၊ ကပျဘိနကျ အစညျး အဝေး ဝငျသှားတယျလို့ ပွောတယျ။ ဒီကိစ်စတှကေ ဝနျကွီးခြုပျ သဘောမတူဘဲ လုပျလို့မရဘူး။ ကပျဘိနကျမှာ အတညျပွု လိုကျပွီးတော့ ဦးလေးလညျး ထပျမမေးတော့ဘူး”ဟု ဆိုသညျ။
NLD ပါတီအနဖွေငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးမွို့နယျမြားတှငျ လူထုထောကျခံမှု ရရှိလာအောငျကွိုးပမျးလုပျကိုငျနသေော အခြိနျတှငျ စဈတှခေရိုငျအတှငျး ပါတီဝငျ အခငျြးခငျြးကွားတှငျ သဘောထား ကှဲလှဲမှုတခြို့ ဖွဈပျေါနကွေောငျးလညျး ပါတီနှငျ့နီးစပျသူ တခြို့ထံမှကွားသိရသညျ။ NLD ပါတီမှ စဈတှခေရိုငျ အတှငျးရေးမှူး ဦးကောငျးစံလှ သညျလညျး ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈအတှငျးက ပါတီတာဝနျမှ နုတျထှကျခဲ့သညျ။ ဦးကောငျးစံလှက “ကနြျောက မိသားစုစားဝတျနရေေးရှိတယျ။ ပါတီတာဝနျကို ထမျးဆောငျဖို့ အခကျအခဲရှိတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ နုတျထှကျလိုကျတာ။ အခု ခရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌ ထှကျ တာနဲ့ ပတျသကျလို့ ကနြျောကလညျး ပါတီကနုတျထှကျထားတဲ့ ကွာနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ ပါတီကိစ်စကိုတော့ တစုံတရာ မှတျခကျြ မပေးလိုတော့ဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
စဈတှခေရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးသင်ျခါကြျော ပါတီမှ နုတျထှကျသညျ့ ကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ဧရာဝတီမှ NLD ပါတီမှ ရခိုငျပွညျနယျ ဒု ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစိုးလေးအား ဆကျသှယျခဲ့ရာ အစညျးအဝေး လုပျနသေညျ့အတှကျ အလုပျမအားကွောငျး ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့ သညျ။ NLD ဗဟိုပွနျကွားရေး ကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး မုံရှာအောငျရှငျအား ဆကျသှယျခဲ့သျောလညျး အဆိုပါကိစ်စအား ၎င်းငျး အနဖွေငျ့ မသိရှိသေးကွောငျး တုံ့ပွနျ ဖွကွေားသညျ။ NLD စဈတှခေရိုငျ ဥက်ကဋ်ဌအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူ ဦးသင်ျခါကြျော အနဖွေငျ့ ကနျြးမာရေးကိစ်စ အပါအဝငျ ပါတီတှငျးတခြို့သော ပွဿနာတို့ကွောငျ့ နုတျထှကျခွငျးဖွဈကာ၊ ပါတီ တာဝနျ ပွနျလညျထမျးဆောငျရနျ ကမျးလှမျး ညှိနှိုငျးလာမညျဆိုလြှငျလညျး မထမျးဆောငျတော့ရနျ ဆုံးဖွတျထားပွီး ဖွဈ ကွောငျးလညျး ပွောဆိုသညျ။ ဦးသင်ျခါကြျောသညျ၂၀၁၅ ခုနှဈ အထှထှေေ ရှေးကောကျပှဲတှငျ စဈတှမေဲ ဆန်ဒနယျမှ ပွညျသူ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျအဖွဈ ဝငျရောကျရှေးခယျြခံခဲ့သူလညျး ဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/202 0/06/08/224246.html
သြှမျးပွညျအရှပေို့ငျး ကြိုငျးတုံ ပွညျသူ့ဆေးရုံတှငျ positive အတညျပွုလူနာ မရှိတော့ကွောငျး စုံစမျးသိရှိရသညျ။ ဇှနျလ ၅ ရကျနတှေ့ငျ လူနာအမှတျ (၁၁၂)သညျ ဆေးရုံမှ ဆငျးခှငျ့ရပွီးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။“ဒီမနကျ (၁၀) နာရီ ကပဲ ဆေးရုံကဆငျးခှငျ့ရပွီ။ Home Quarantine ၇ ရကျ ထပျနရေမယျ။”ဟု ကြိုငျးတုံပွညျသူ့ဆေးရုံမှ ဆရာဝနျကွီး ဒေါကျတာလှဌေးမငျး ကသြှမျးသံတျောဆငျ့ ကိုပွောသညျ။
အတညျပွု လူနာအမှတျ (၆၄) သညျလညျး ၂ ကွိမျဆကျတိုကျ negative ဖွဈပွီး ယခုအခြိနျတှငျမူ ဆေးရုံ၌ ၁၄ ရကျ စောငျ့ ကွညျ့ထားကွောငျး သိရသညျ။“ဆေးရုံမှာက Positive လူနာ မရှိတော့ဘူး။ ခုလကျရှိ ပိုးတှလေူ့နာ တဈယောကျကနျြတယျ။ သူကလညျး Negative ဖွဈပွီ။ သူ့ကိုလညျး ၁၄ ရကျစောငျ့ကွညျ့ပွီး ဆေးရုံက ဆငျးခှငျ့ရမယျ။”ဟု ဒေါကျတာလှဌေးမငျး ကပွောသညျ။
သြှမျးပွညျအရှပေို့ငျး ကြိုငျးတုံပွညျသူ့ဆေးရုံမှာ ကိုဗဈ-၁၉ အတညျပွု လူနာ ၃ ဦး တှရှေိ့ပွီး ၂ ဦး ဆေးရုံမှ ဆငျးခှငျ့ရကာ ကနျြတဦးသညျ Negative ဖွဈပမေယျ့ ဆေးရုံမှ ၁၄ ရကျ စောငျ့ကွညျ့ထားခွငျးဖွဈသညျ။ ကြိုငျးတုံ ပွညျသူ့ဆေးရုံမှာ သံသယ လူနာ ၈ ဦး ရှိထားကွောငျး သိရသညျ။ သြှမျးပွညျနယျတှငျ အတညျပွု လူနာ ၂ ဦး ရှိသညျ။ သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး မူဆယျပွညျသူ့ဆေးရုံမှာ အတညျပွု လူနာတဈဦး နှငျ့ သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့ရှိ စဝျစံထှနျးဆေးရုံမှာ အတညျပွု လူနာ တဈဦး ရှိသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16975
ဇှနျ ၁ ရကျနနှေ့ငျ့ ၃ ရကျနတှေ့ငျ တပျမတျောမှ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားသညျ့ တောငျကုတျမွို့နယျ၊ ခကျြဖောကျကြေးရှာ သား ၅ ဦးမှာ မိသားစုနှငျ့ အဆကျအသှယျမရဘဲ ဖွဈနသေညျဟု သတငျးရရှိသညျ။ ဇှနျလ ၁ ရကျနတှေ့ငျ ဖမျးဆီး ချေါ ဆောငျခွငျးခံရသူ ၃ ဦးမှာ ခကျြဖောကျရှာမှ ဦးကံဇျော (၄၄)နှဈ၊ ဦးနိုငျခြေ (၂၆)နှဈ မောငျနိုငျနိုငျလငျး (၁၈) နှဈတို့ ဖွဈကွ သညျ။ နောကျထပျ နှဈဦးကို ဇှနျ ၃ ရကျနတှေ့ငျ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ယငျးတို့မှာ ဦးကြျောတငျအောငျ (၃၇) နှငျ့ မောငျငမိုး (၁၈) နှဈတို့ ဖွဈကွသညျဟု ဒသေခံတဈဦးက နိရဉ်စရာ သတငျးဌာနသို့ပွောသညျ။
” ဇှနျ ၁ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးက သုံးဘီးနှဈစီးနှငျ့ မအီမွို့ကိုဈေးပွုဖို့သှားကွတာ မိနျးမ၊ ယောကျြား လူပေါငျး ၃ဝ လောကျရှိ တယျ။ ဒီရှာကလူတှကေ မအီက ဈေးပွုပွီးတော့ စားသောကျနကွေ။ အဲဒီ သုံးဘီးဆိုငျကယျနှဈစီးကိုဖမျးတယျ။ ဖမျးပွီးတော့ ရဲစခနျးကိုချေါသှားတယျ။ ကနျြတဲ့လူတှကေို ညနပေိုငျးမှာလှတျပေးလိုကျပွီး သူတို့သုံးယောကျကို ဖမျးသှားတယျ။ သူတို့က ဦးကံဇျော၊ ဦးနိုငျခနြေဲ့ မောငျနိုငျနိုငျလငျးတို့ ဖွဈကွပါတယျ”ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ ဇှနျ ၃ ရကျနေ့ မနကျပိုငျးတှငျလညျး တပျမတျောစဈကွောငျး တဈကွောငျး ဝငျရောကျလာပွီး ရှာသား နှဈဦးကို ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားသညျဟု ဆိုသညျ။“ ရှာ ထဲကို ဝငျလာတယျ။ အငျအား တဈရာကြျောလောကျပါတယျ။ ရှာသားတှကေ ကွောကျလနျ့ပွီး ပုနျးနကွေတယျ။ ဦးကြျောတငျအောငျ နှငျ့ ငမိုးကိုတော့ ရှာမှာတှလေို့ သူတို့က ဖမျးယူသှားတယျ။ သူတို့နှဈဦးကို ဘယျကိုချေါသှားမှနျးတော့ မသိဘူး။ တဈရကျနကေ့ ဖမျးသှားတဲ့ သုံးယောကျတော့ မအီရဲစခနျးမှာ ရှိတယျလို့သိရတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ထိုသို့ ပထမ ၃ ဦးကို မအီရဲစခနျးတှငျ ခြုပျနှောငျထားသညျဟု ပွောဆိုသဖွငျ့ မအီရဲစခနျးသို့ ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ရာ ခကျြဖောကျကြေးရှာမှ ဖမျးဆီးထားသူ တဈယောကျမှ မရှိကွောငျး ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့သညျ။ ရခိုငျပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့ ပွောခှငျ့ရသူ စညျပငျဝနျကွီးလညျးဖွဈ၊ တောငျကုတျမွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျဖွဈသူ ဦးဝငျးမွငျ့သို့ ဆကျ သှယျရာ ၎င်းငျးသတငျး သူမရရှိဟု ပွောကွားသညျ။ ခကျြဖောကျကြေးရှာတှငျ အိမျခွေ ၄ဝဝ နီပါးရှိပွီး မအီနှငျ့ဆိုလြှငျ ၃ မိုငျခနျ့ကှာဝေးကွောငျး သိရှိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-73281
ကရငျပွညျနယျ မွဝတီမွို့တှငျ ယမနျနေ့ ဇှနျလ ၆ ရကျနနေံ့နကျပိုငျးက WY မူးယဈဆေးပွား အလုံးရေ (၄)သောငျး ကြျော နှငျ့အတူ တရားခံ ၄ ဦးအား ဖမျးဆီးရမိကွောငျး မွဝတီခရိုငျရဲတပျဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။
ယမနျနေ့ နံနကျ (၁၀း၃၀) အခြိနျခနျ့တှငျ မွဝတီခရိုငျရဲတပျဖှဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကွီး သကျလငျးဦးနှငျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ မွဝတီရှေ့ တနျးရုံးမှ ခွလေငျြတပျရငျး (၉၇) တပျရငျးမှူး ဒုတိယဗိုလျမှူးကွီး အောငျဆနျးဝငျး၊ မူးယဈတပျစု(၃၂) မွဝတီမူးယဈတပျဖှဲ့ရုံးမှ ရဲမှူးမငျးအောငျမွငျ့ဦးနှငျ့ ပူးပေါငျးတပျဖှဲ့မြားက မူးယဈဆေးဝါးရောငျးခနြကွေောငျး သတငျးအရ မွဝတီမွို့ အမှတျ ၄ ရပျ ကှကျ ဇျောဂြီ(၂)လမျးတှငျ စောငျ့ဆိုငျးနစေဉျ မသင်ျကာဖှယျ အမြိုးသားတဈဦးနှငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦးအား တှရှေိ့၍ ရပျတနျ့ စဈ ဆေးခဲ့သညျ။ ထိုသို့ စဈဆေးရာတှငျ ရှမျးပွညျနယျ၊ တနျ့ယနျးမွို့၊ နောငျဖာကြေးရှာနေ စိုငျးရှေ(၄၅)နှဈနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျ၊ နမျ့စနျမွို့ အမှတျ ၄ ရပျကှကျနထေိုငျသူ နနျးရှနျနှနျး (၂၇)နှဈတို့ကို စဈဆေးရှာဖှရောတှငျ စိုငျးရှေ ၏လကျ၌ ကိုငျဆောငျ ထားသော ကွှပျကွှပျအိတျအမဲရောငျဖွငျ့ ထုပျထားပွီး တိပျအဝါ ရောငျပတျထားသော အထုပျ(၄)ထုပျ အတှငျးမှ WY စာတမျးပါ မူးယဈဆေးပွားအလုံးရေ (၄) သောငျးအား တှရှေိ့သိမျးဆညျးခဲ့သညျဟု မွဝတီရဲတပျဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။
ထိုသိမျးဆညျးရမိသော မူးယဈဆေးဝါးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ စိုငျးရှအေား စဈဆေးရာ အဆိုပါဆေးပွားမြားမှာ မွဝတီမွို့ အမှတျ(၄) ရပျကှကျ အလိုတျောပွညျ့ (၂) လမျးသှယျနေ ဦးဖသေနျးအောငျဆိုသူထံမှ ရရှိသော ပစ်စညျးမြားဖွဈကွောငျး ပွောကွားသဖွငျ့ အဆိုပါ ပူးပေါငျးအဖှဲ့မှ ဦးဖသေနျးအောငျ၏ နအေိမျသို့ သှားရောကျ ရှာဖှခေဲ့ သညျ။ ထိုသို့ရှာဖှစေဉျ နအေိမျ တှငျ ဦးဖသေနျးအောငျနှငျ့အတူ မွဝတီမွို့ အမှတျ (၃) ရပျကှကျနသေူ အောငျနိုငျစိုး (၃၀) နှဈအား တှရှေိ့ပွီး နအေိမျတှငျး ဆကျလကျရှာဖှရော မူးယဈဆေးဝါး တဈစုံတဈရာ မတှရေ့သျောလညျး နအေိမျမီး ဖိုခြောငျအခနျးတှငျးမှ မူးယဈဆေးဝါး ထုပျပိုးရာတှငျ အသုံးပွုသညျ့ မှိုငျးခံ စက်ကူနှငျ့ဂပျြဖာတို့အား လညျးကောငျး၊ မူးယဈဆေးဝါးရောငျး ရငှဟေုယူဆရသော မွနျမာငှေ ၆ သိနျးကပျြနှငျ့ အောငျနိုငျစိုး ဝတျဆငျထားသော အပွာရောငျဂငျြးဘောငျးဘီ ယာဘကျအိတျကပျအတှငျးမှ WY စာတမျးပါ မူးယဈဆေးဝါး ၂ ပွား၊ မွနျမာငှေ ၂ သိနျးကပျြအား တှရှေိ့ခဲ့သညျ။
၎င်းငျးအပွငျ နအေိမျခွံဝငျးအတှငျးရှိ 9K/9797 နံပါတျပါ Nissan Navara အနကျရောငျ မျောတျောယာဉျ (၁)စီးနှငျ့ Moccona Wave. 125 i နီ/မဲရောငျ ဆိုငျကယျ (၁)စီးအား တှရှေိ့ပွီး သိမျးဆညျးခဲ့ကွောငျး မွဝတီမွို့မ ရဲစခနျးထံမှ သိရသညျ။ မူးယဈ ဆေးဝါး အမွောကျအမြား လကျဝယျတှရှေိ့သူ စိုငျးရှေ (၄၅) နှဈ၊ နနျးရှနျနှနျး(၂၇)နှဈ နှငျ့ ကှငျးဆကျတရားခံမြားဖွဈသော ဦးဖသေနျးအောငျ (၅၂)နှဈနှငျ့ အောငျနိုငျစိုး (၃၀)နှဈ တို့အား ဥပဒအေရအရေးယူဆောငျရှကျနိုငျရနျစီစဉျနကွေောငျး မွဝတီ မွို့မရဲစခနျးထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/06/%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%9d%e%80%9 0%e1%80%a e%e1%
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး မူဆယျမွို့ တုနျခမျရှာအဆငျး နမျ့ခှမျရှာအဝငျ ရကှေေ့ မူဆယျ- ၁၀၅ မိုငျ ပွညျထောငျစုလမျးမပျေါ ၌ ယနေ့ (ဇှနျ ၇ ရကျ) ညနေ ၄ နာရီအခြိနျခနျ့က ယာဉျတိုကျမှုတဈခု ဖွဈပှားခဲ့ရာ တဈဦးသဆေုံးပွီး တဈဦးဒဏျရာရရှိခဲ့ ကွောငျး သိရှိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာ မူဆယျမွို့ တုနျခမျအဆငျး နမျ့ခှနျရှာအဝငျ ရကှေတှေ့ငျ ၁၅ မိုငျဘကျမှ မူဆယျမွို ဝငျရောကျရနျ တနျးစီစောငျ့ ဆိုငျးနသေော ကုနျတငျယာဉျ အမှတျ MDY 1F/ – – – – – FUSO ခဲရောငျ ၁၂ ဘီးယာဉျကားအား ၁၀၅ မိုငျဘကျမှ မူဆယျဘကျသို့ မောငျးနှငျလာသော ယာဉျအမှတျ YGN 2I/- – – – WASH အ‌ဖွူရောငျသညျ ကုနျတငျယာဉျ နောကျဘကျရှိ ယာဉျအကူကို ဝငျတိုကျကာ ကုနျတငျယာဉျအနောကျဘကျ အောကျထဲသို့ ဝငျတိုကျမိခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး၊ အဆိုပါယာဉျတိုကျ မှုကွောငျ့ WASH ကားအဖွူရောငျမှာ ခေါငျးခနျးနှငျ့ အလယျခနျး ပကျြစီးခဲ့ပွီး ၎င်းငျးယာဉျကို မောငျးနှငျလာသော ယာဉျမောငျး ခဈြမွိုငျမှာ အဆိုပါနရောတှငျ သဆေုံးခဲ့ကွောငျး သိရှိရသညျ။
ယာဉျတိုကျမှုကွောငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိခဲ့သော ကုနျတငျယာဉျအကူနှငျ့ ‌သဆေုံးသူတို့ကို နှလုံးလှ လူမှု့ကူညီရေးအသငျး ကားဖွငျ့ မူဆယျဆေးရုံကွီးသို့ ပို့ဆောငျခဲ့သညျ။ အဆိုပါ ယာဉျတိုကျမှုဖွဈစဉျသို့ အမှတျ ၁၂၅ ယာဉျထိနျးတပျဖှဲ့စုမှ လာ ရောကျ စဈဆေးခကျြအရ WASH ကားမောငျသူ ခဈြမွိုငျအား ရာဇသတျကွီးပုဒျမ ၂၇၉/၃၃၈/၃၀၄(က) တို့ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူရနျ ဆောငျရှတျလကျြရှိကွောငျး သိရှိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/177345
COVID-19 ကွောငျ့ ဈေးကှကျပကျြသဖွငျ့ တောငျသူမြားမနဈနာစရေနျ အလှူရှငျတဈဦးကဝယျယူ၍ ဇှနျ ၇ ရကျက ပရဟိတ အဖှဲ့မြား အကူအညီဖွငျ့ လိုအပျသညျ့နရောမြားသို့ ပို့ဆောငျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။“ ဒသေကထှကျတဲ့ ဂျေါဖီထုပျကို ၂၄ နှဈ ရှိသှားပွီ ဝယျရောငျးတယျ။ အခုက ဝယျရောငျးတော့ COVID-19 က သူရှိတော့ ဈေးကှကျက ဒီလိုမြိုးပကျြပွားသှားတော့ တောငျသူလညျး အခကျအခဲရှိသလို ဝယျရောငျးသူမှာလညျး အခကျအခဲရှိတယျ။ ကြှနျမကတောငျ သူလုံးဝမနဈနာအောငျလို့ ဝယျပွီးတော့မှ ဈေးခြိုခြိုနဲ့ ရောငျးပေးတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမအရငျးကို ရအောငျပွနျရောငျးတယျ။ ပွနျရောငျးပွီးတော့ရတဲ့ အမွတျကို ကယားပွညျနယျမိုး ခေါငျရရှေားအရပျပေါ့နျော။ ရမေရှိတဲ့ဒသေ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှေ လူမြိုးဘာသာမရှေး လှူ ပေးပါလို့ ပွောတယျ” ဟု အလှူရှငျဖွဈသူ နနျးလှဦးက ပွောကွားသညျ။
ယခငျက လှိုငျကျော၊ ဒီးမော့ဆို၊ ဖရူဆိုမွို့မြား၌ ဂျေါဖီဈေးကှကျရှိခဲ့ပွီး အဆငျပွသေညျ့အပွငျ ရှမျးပွညျတောငျပိုငျး ဖယျခုံနှငျ့ မိုးဗွဲဘကျမှ ဂျေါဖီလိုအပျပါက ရောငျးခပြေးခဲ့ရသျောလညျး ယခုအခါ ဈေးကှကျပကျြသှားကွောငျး သိရသညျ။ ဂျေါဖီထုပျမြား ကို ဖေးကူလကျမြား ပရဟိတအသငျး၊ ငှတေောငျပွညျလူမှုကူညီရေးအသငျး၊ လငျးမတ်ေတာပရဟိတအသငျးတို့က စိုကျခငျး အထိ သှားရောကျခူးယူကွပွီး လိုအပျသညျ့ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးမြား၊ မိဘမဲ့ကြောငျးမြား၊ ဂိတျတာဝနျကဝြနျထမျးမြားအား သှားရောကျ၍ ပို့ဆောငျပေးကွောငျး သိရသညျ။
“ သူတို့က ဆကျသှယျလာတာပေါ့နျော။ ကြှနျမတို့ကပွောတယျ မရောငျးဘူးလားပေါ့။ ကြှနျမတို့ ကူရောငျးပေးရမလဲ ဘယျ လောကျနဲ့ ရောငျးပေးရမလဲပေါ့။ မဟုတျဘူးတဲ့ သူတို့ အပွတျလှူမယျတဲ့။ ကာယကံရှငျကိုယျတိုငျက မရောငျးဘူး လှူမယျဆို လို့ လာပွီးတော့ သယျပွီးမှ လိုကျလှူပေးမှာရှငျ”ဟု ဖေးကူလကျမြား ပရဟိတအသငျး ခေါငျးဆောငျတဈဦးဖွဈသူ မအိက ပွောကွားသညျ။ ကယားပွညျနယျတှငျ လှိုငျကျောမွို့နယျ လငျဖုံလေးကြေးရှာနှငျ့ ဒီးမော့ဆိုမွို့နယျ ကုနျးသာကြေးရှာတို့မှာ ရကွေောရှိသညျ့ နရောဖွဈသဖွငျ့ ဆယျ့နှဈရာသီပတျလုံး ရရေရှိသဖွငျ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား စိုကျပြိုး၍ အသကျမှေးကွ ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/177394